သူတို့အကြောင်း – Grab Love Story
အိမ်ရှေ့မှ ခေါ်နေသော အမေ့အသံကြောင့် အိမ်နောက်ဖေးတွင် နွားစာစင်းနေရာမှ ကမန်းကတန်း လက်ဆေးကာ အိမ်နောက်ပေါက်မှ တက်သွားသည်။
အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာ အမေနှင့် အတူ ထိုင်နေသော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုအမျိုးသမီး မျက်နှာကို အေးမောင် စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်မိသည်။ ဘယ်နေရာမှာ မြင်ဖူးလို့ပါလိမ့်။ တစ်နေရာ ရာမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီး မြင်ဖူးနေသလိုပဲ။ ဘယ်နေရာမှာမှန်းတော့ မသိ။
သား…. သူ့ကို မှတ်မိလား….
အေးမောင် သေသေချာချာ မျက်မှောင်ကြုပ် စဉ်းစားသည်။ သိတော့ သိနေသလိုပဲ။ ဘယ်မှာလဲသာ မသိတာ။
ဟဲ့…. ဖြေပါအုံး… မေးနေတာကို….
အမေ့ အသံကြောင့် လန့်ဖြပ်သွားသည်။
အင်း…. သိတော့ သိသလိုပဲ အမေ။ သေသေချာချာ မသိဘူး….
သြော်…. သူက အရင်တုန်းက ရွာမှာ အမေတို့နဲ့ အတူတူ နေခဲ့ဖူးတဲ့ သားဖွားဆရာမလေးလေ သားရဲ့…
အဲ…. မှတ်မိသလိုတော့ ရှိတယ်အမေ…. မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေလို့…..
အေးမောင်၏ အူလည်လည်စကားကြောင့် သားဖွားဆရာမလေးဟု အမေပြောသော ထိုခပ်ချောချော အမျိုးသမီးက ပြုံးသည်။
အေး…. မမှတ်မိရင်လည်း…. နင့်အန်တီလေးဝယ်လာတဲ့…. မုန့်လည်း… မစားနဲ့တော့….
အေးမောင် ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ စပ်ဖြီးဖြီးသာ နေလိုက်ရသည်။
နင်… ငယ်ငယ်က… တစ်နှစ်သားလေးပဲ ရှိအုံးမှာပေါ့…. နင့်အန်တီလေးက ရွာမှာတာဝန်ကျတော့ အမေတို့အိမ်မှာ အတူတူလာနေတာလေ… အခုတော့ သူ့သမီးလေးတောင် နင့်ထက်ငယ်လှ တစ်နှစ် နှစ်နှစ် လောက်ပဲ ရှိမှာ… နင့်ကို ရေမိုးချိုး သနပ်ခါးလိမ်းပေတာ သူပေါ့….
အမေ ပြောပြလိုက်တော့လည်း အေးမောင် အားတုံ့အားနာ ဖြစ်သွားမိသေးသည်။ အမေတို့နှင့် စကားစမြည် ခဏလောက် သွားပြောပြီးတော့ အေးမောင် အိမ်အောက်သို့ ဆင်းကာ နွားစာ ဆက်စဉ်းနေလိုက်သည်။ ဧည့် ခန်းထဲမှာ နေရတာ အနေအထိုင် ကျဉ်းကြပ်သလို ဖြစ်လာလို့ပါ။
ခြံထဲမှာ လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်များ ဆက်တိုက်လုပ်ပြီးတော့ ဘေးက ကောက်ရိုးပုံပေါ်မှာ အမြိုင့်သား နှပ်နေလိုက်သည်မှာ ညနေ သုံးနာရီခွဲလောက် သူ့အမေ နှိုးမှ နိုးတော့သည်။ ဟိုအန်တီက ပြန်သွားလေပြီ။
ထိုအန်တီလေးနာမည်က အိအိမွန်။ အေးမောင်တို့ ငယ်ငယ်လောက်တုန်းက အမေတို့နှင့်အတူ အိမ် မှာ လိုက်နေဖူးသည်။ ခြောက်လလောက် နေပြီးတော့ အိမ်ထောင်ကျသွားသဖြင့် သူမ၏ ဇာတိမြို့သို့ ပြန်သွားကာ မြို့အနီး ရွာတစ်ရွာမှာ သားဖွားဆရာမ လုပ်နေသည်။ ယခုတော့ အလုပ်ထွက်လိုက်ပြီး အိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထား သည်။
သူမ၏ အမျိုးသားဖြစ်သူ ကိုမိုးဇော်က ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ကူးကာ အလုပ်သွားလုပ်ရင်း ထိုအလုပ်တွင် တွေ့သည့် ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် ညိစွန်းကာ မြန်မာဘက်သို့ ပြန်မလာတော့ဘဲ ထိုနိုင်ငံမှာပင် အခြေ ချလိုက်သည်မှာ ယနေ့ထက်တိုင်ပင်။
အန်တီလေးကတော့ သူမ၏ သမီးလေးနှင့်အတူ နောက်အိမ်ထောင် ထပ်မပြုတော့ဘဲ နေလိုက်သည်။ အမေတို့နှင့် လာနေစဉ်က အေးမောင်က သုံးနှစ်သားအရွယ်၊ အမေ့အသက် နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်လောက်မှာ အေးမောင်ကို မွေးသည်။ ထိုအချိန်တွင် ထိုအန်တီလေးက ၁၈ နှစ် လောက်သာ ရှိအုံးမည်။
ယခုတော့ အေးမောင် အသက် ၁၆ နှစ်ထဲ ရောက်နေပြီ။ အေးမောင် ငယ်ငယ်က စာ တအားညံ့သည်။ သူငယ်တန်းနေ သုံးတန်းလောက်အထိ ပုံမှန်လေး အောင်သော်လည်း လေးတန်းမှာ နှစ်နှစ် ၊ ရှစ်တန်းမှာ နှစ်နှစ် နေလိုက်ရသည်။ ကျောင်းစတက်တာတောင် ခြောက်နှစ်သားအရွယ်မှ စတက်သည် ဖြစ်ရာ အသက် ၁၆ နှစ်မှာမှ ရှစ်တန်းသာ ရှိသေးသည်။
သူ့အရပ် သူ့ဒေသမှာတော့ ဒီအရွယ်က လယ်ထဲ အလုပ်လုပ်နိုင်နေပြီ ဆိုတော့ ကျောင်းထုတ်ကာ လယ်ထဲဝိုင်းကူလုပ်ရသည်သာ များသည်။ အေးမောင် အမေက အေးမောင်ကို ကျောင်းဆက်နေစေလိုသည်။ သူများတွေ ဆယ့်ခြောက်နှစ်မှာ ဆယ်တန်း အောင်သော်လည်း အေးမောင် ဆယ့်ခြောက်နှစ်ကျော်မှ ကိုးတန်း တက်ရအုံးတော့မည်။ အခုလည်း ကျောင်းပိတ်ရက်မို့ အမေ့ကို ၀ိုင်းကူနေခြင်းသာ။
ထိုအန်တီလေးလာလည်တော့ အမေလည်း အေးမောင်ကို ကိုးတန်း ဘယ်မှာထားရမလဲ တိုင်ပင်မိ သည်။ ထိုအန်တီလေးက သူ့အိမ်မှာ လာနေပြီး ကျောင်းတက်ခိုင်းလျှင် အိမ်လခရော စားစရိတ်ပါ မပေးပါနဲ့။ သူ့ကျောင်းမုန့်ဖိုးနဲ့ အ၀တ်အစားဖိုးလောက်ပဲ ပေးပါ ဆိုပြီး ပြောသွားသည်ဟု အမေက ပြောပြသည်။ အေးမောင် သူ့အမေ ပြောနေသည့် စကားများကို နားထောင်ရင်း အတွေးပင်လယ်ထဲ မျောပါသွားလေတော့ သည်။
ဟဲ့… ကောင်လေး… ငါပြောတာကြားလား…. စိတ်က ဘယ်ရောက်နေမှန်း မသိဘူး…. နင့်ကိုတော့ အိအိမွန်လက်ထဲ မြန်မြန်အပ်မှ ဖြစ်တော့မယ်။ ရွာမှာထားလို့တော့…. စောစော မိန်းမရမလားပဲ….
ဟာ…. အမေကလည်း…. သားက အဲဒါတွေ.. စိတ်မ၀င်စားပါဘူး….
အောင်မယ်…. စိတ်ဝင်စားလို့ရော… ရမလား…
အမေက သူပြောချင်တာများ ပြောပြီး အိမ်ပေါ်သို့ ပြန်တက်သွားတော့သည်။ အေးမောင်လည်း တစ်ကိုယ်လုံး ပေလူးနေသည်များကို ရေချိုးသန့်စင်ကာ ထမင်းစားရန် အိမ်ပေါ်သို့ လိုက်တက်သွားရတော့ သည်။ အဖေက ပိုးထိပြီး ပြီးခဲ့သည့် ငါးနှစ်လောက်က ဆုံးပါးသွားခဲ့ရာ အမေလည်း အမေ၊ အဖေလည်း အမေ မဟုတ်ပါလား။ အမေ့ကို အေးမောင် ကြောက်ပါသည်။
မိုးဦးကျစ၊ မေလ၏ အကုန်ပိုင်းလောက်ဖြစ်သည်…..
အေးမောင်နှင့် သူ့အမေ ရွာမှ မြို့ကို ပြေးဆွဲသော ပဲ့ထောင်သင်္ဘောလေးနှင့် အန်တီလေးဆီ သွားကြသည်။ အေးမောင်ကို ကျောင်းအပ်ရတော့မည်လေ။
အန်တီလေးအိမ်ကို ရောက်တော့ အထုပ်အပိုးတွေ နေရာချရသည်။ အန်တီလေးက အေးမောင်ကို အပေါ်ထပ်က အခန်းမှာ နေရာချပေးသည်။ ထင်းရှူးသေတ္တာတစ်လုံးနှင့် ခေါက်စားပွဲလေးတစ်လုံးသာပါသော အေးမောင်အဖို့ နေရာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ရှိလှသည်။
နေရာချပေးပြီးတော့ အောက်ထပ်ကို ပြန်ဆင်းလာသည်။ အမေက အေးမောင်ကို မလိမ္မာတာရှိ ဆုံးမပါ ဘာညာသာရကာ ပြောကာ အန်တီလေးထံ အပ်သည်။ အန်တီလေးကလည်း ပြုံးပြုံးရယ်ရယ်ပင် အေးမောင်က လိမ္မာမှာပါ။ ကျမတာဝန်သာ ထားဟု ပြော သည်။
အေးမောင် အမေ သင်္ဘောနှင့် ရွာပြန်သွားတော့ အေးမောင်ရင်ထဲ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်နေမိသည်။ မိဘနှင့်ခွဲကာ တစ်ခါမှ မနေစဖူးလေ။ ညနေပိုင်းလောက်ကျတော့ အေးမောင် ကျူရှင်တက်ဖို့ အန်တီလေး လိုက်အပ်ပေးသည်။ ကျူရှင်စရိတ်တွေလည်း တစ်နှစ်စာ တစ်ခါတည်း ကြိုရှင်းပေးထားသည်။
အိမ်မှာ နေတုန်းကထက်တော့ အလုပ်သက်သာသည်။ အန်တီလေးတို့အိမ်က ရေတွင်းရှိသဖြင့် အိမ် နောက်ရေတွင်းမှ ရေကို ပုံးလေးများနှင့် ထမ်းကာ ဆေးဖို့ကြောဖို့ စည်ပိုင်းထဲ ထည့်ပေးရသည်။ သောက်ရေ ကိုတော့ ရပ်ကွက်ထိပ်က ရေကန်မှာ သွားယူရသည်။ ကျန်တာကတော့ ကိုယ့် တစ်ကိုယ်ရည်တစ်ကာယ တာဝန်အပြင် လုပ်စရာမရှိလှပါ။
ကျူရှင်ကြိုတက်ထားသဖြင့် ကျောင်းဖွင့်တော့ သိပ်တော့ အခက်အခဲမရှိလှ။ စာတော်တော်များများက ဖတ်ဖူးပြီးသားတွေတော့ ဖြစ်နေသဖြင့် အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော် အေးမောင်သည် အသက် ၁၇ နှစ်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည့်အပြင် လူကောင်လည်း ထွားသဖြင့် အတန်းဖော်အားလုံးတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် နည်းနည်းတော့ အနေရခက်သည်။ သူထက် ခြောက်လလောက်သာ ငယ်သည့် ကျောင်းသား လေးငါးယောက် ရှိသည်ဖြစ်ရာ သိပ်တော့ အခက်အခဲမရှိလှချေ။
အေးမောင် ကျောင်းဆင်းလျှင် အိမ်ပြန် ရေမိုးချိုးထမင်းစား၊ ပြီးလျှင် ကျူရှင်ပြန်သွား၊ ကျူရှင်ကပြန်လျှင် စာနည်းနည်းကျက်ပြီး အိပ်ရုံသာ။ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ အသားကျသွားသည်။ သိပ် မကြာမီ ရန်ကုန်က ဆွေမျိုးများနှင့် ဘုရားဖူး ထွက်သွားသော အန်တီလေး၏သမီးဖြစ်သူ အိဖြူ ပြန်ရောက်လာ သည်။ သူမက အိဖြူဆိုသည့် နာမည်နှင့် လိုက်အောင်ပင် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က အိအိပုံ့ပုံ့လေးနှင့် ဖြူဝင်း သော အသားအရည်ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အန်တီလေးက အိဖြူကို အေးမောင်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အိဖြူက အေးမောင်ထက် တစ်နှစ်သာ ငယ်သည်။ ဆယ့်ခြောက်နှစ်လောက် ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ကလေးဆန်ဆန် သူ့ ရုပ်ဟန်လေးက ချစ်စရာ အလွန်ကောင်းနေသလိုပင်။ အေးမောင်ကို သူက ကိုကို ဟုခေါ်ပြီး အေးမောင်က သူမ ကို ညီမလေးလို့ခေါ်သည်။ အိအိလို့လည်း တစ်ခါတလေ ခေါ်သည်။
အေးမောင် မြို့ကျောင်းမှာ တက်ရတော့ အပေါင်းအသင်းတွေလည်း စုံလာသည်။ အပေါင်းအသင်း စုံ သော်လည်း ကွမ်းတွေ ဆေးလိပ်တွေ အရက်တွေ သူမလုပ်ရဲ။ အန်တီလေးက အမေကို ပြန်တိုင်လိုက်လျှင် နွား ရိုက်သည့် ကြိမ်နှင့် အဆော်ခံရမည်ကို ကြောက်လှသည်။ တစ်ရက်တွင် သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က စာအုပ် ကလေး တစ်အုပ် လာပေးသည်။ ပန်းရောင်စာအုပ်ကလေးဖြစ်ကာ ပါးပါးလေးဖြစ်သဖြင့် သီချင်းစာအုပ်ဟု ထင်လိုက်ကာ ငါမှ သီချင်းမဆိုတတ်တာဟ ဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်။
သူငယ်ချင်းက သီချင်းစာအုပ်မဟုတ်ဘူး၊ မင်းသေချာဖတ်ကြည့် ပြီးရင်ကောင်းမှန်းသိလာလိမ့်မည် ဟု ပြောသည်။ အေးမောင်လည်း ယူပြီး လွယ်အိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်သည်။ ထုတ်မဖတ်ရဲချေ။ အရှေ့တွင် စာသင်နေသည့် ဆရာကြီးက သင်္ချာတော်သလောက် အရိုက်ကြမ်းသည်ဟု နာမည်ကြီးသော ဆရာကြီး ဦးမြ၀င်း ဖြစ်နေသောကြောင့်…..။
ညနေ ရေချိုး ထမင်းစား ကျူရှင်သွားနှင့် အလုပ်များလိုက်သဖြင့် ထိုစာအုပ် ကိုလည်း မေ့မေ့လျော့လျော့ ဖြစ်သွားသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပင်ပန်းသဖြင့် အတော်လေး နွမ်းနယ် နေပြီ။ အိဖြူကတော့ ဆယ်တန်းဖြေထားပြီးပြီမို့ အောင်စာရင်းထွက်ဖို့ စောင့်နေသည်။ အိဖြူက တစ်နှစ်ကျလို့ ပြန်ဖြေထားခြင်းဖြစ်သည်။ သိပ်တော့ မဖြေနိုင်ဟု ပြောသည်။ သူက လောလေဆယ် စာမကျက်သေး။ ကျလျှင် တော့ ကျက်မည်ဟု ပြောသည်။ သြော် သိပ်ပြောတတ်တဲ့ ကောင်မလေး။ ကျမှတော့ နောက်တစ်နှစ်တက်ရင် ကျက်ရတော့မည်ပေါ့။
အေးမောင် သူ့အခန်းသို့ တက်သွားသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ စာအုပ်များကို လွယ်အိတ်ထဲက ထုတ်ကာ စားပွဲပေါ်တင်လိုက်ချိန်တွင် နေ့လည်က သူငယ်ချင်းပေးသွားသည့် စာအုပ်ကလေးက ထွက်ကျ လာသည်။ ကျန်သည့်စာအုပ်များကို မဖတ်ရသေးခင်မှာပင် ထိုစာအုပ်ကလေးကို လက်က လှန်မိသည်။
စာအုပ်က စဖတ်လိုက်သည်နှင့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာ သိလိုက်သည်။ စိတ်ဝင်တစားနှင့် ဖတ်လိုက် သည်မှာ စာအုပ်အလယ်ပိုင်းလောက် ရောက်တော့ အစက ဆီးသွားချင်၍ တောင်လာသည်ဟု သိထားသော ငယ်ပါညီတော်မောင်မှာ ဆီးမသွားချင်ဘဲ တင်းမာလာချေပြီ။ တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးသော (သတိမထားမိသော) ကာမ ဆန္ဒများသည် နိုးကြွလာချေပြီ။ စာအုပ်ဖတ်ပြီး ဇာတ်လမ်းဆုံးသွားသော်လည်း ထပ်ကာထပ်ကာ ဖတ်မိ သည်။ ကျောင်းက သင်လိုက်သော စာများကို ဖတ်ဖို့ပင် စိတ်မပါတော့။
သို့သော်လည်း မဖတ်လျှင် ကြိမ်လုံးစာ မိမည်ကို ကြောက်ရသေးသည်ဖြစ်ရာ ကြိတ်မှိတ်ဖတ်လိုက်ရသည်။ အိပ်ကာနီး ပန်းရောင် စာအုပ် လေး တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီး တော့ အိပ်လိုက်သည်။ အိပ်မက်ထဲတွင် ဘယ်ကမှန်းမသိသော ကောင်မလေးတစ် ယောက်နှင့် ကြည်နူးနေလိုက်သည်။ မနက် အိပ်ရာထလိုက်တော့ ပုဆိုးတွင် စိုနေသည်။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိချေ။
ကျောင်းပြန်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းကို သူ့စာအုပ်လေး ပြန်ပေးလိုက်သည်။ သူ့သူငယ်ချင်းက နောက် တစ်အုပ် ထပ်ပေးသည်။
ဟျောင့် ဂျင်းကောင်…. မနေ့ညက ဘယ်နှချီပြီးသွားလဲ….
အာ…… မင်း… ဂွင်းမထုတတ်ဘူးလား….
ဟေ့အေး….. ဘာလဲ ဂွင်းထုတာ….
သူငယ်ချင်းက ဘေးဘယ်ညာကို မျက်စိဝေ့ကြည့်လိုက်သည်။ သူတို့က အနောက်က ထောင့်ဆုံးခုံဖြစ်နေ သဖြင့် ဘေးတစ်ဖက်က နံရံဖြစ်နေသည်။ ကျန်တဲ့ ဘေးတစ်ဖက်ကလည်း ခုံအလွတ်တွေချည်း။ ခုံတန်းပိုနေ သဖြင့် ခပ်အေးအေးနေတတ်သည့် သူတို့နှစ်ယောက်ကို နောက်ဆုံးတန်းမှာ ထားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဟျောင့်…. ငါပြမယ် ဒီမှာကြည့်….
သူငယ်ချင်းက သူ့ကျောင်းစိမ်းပုဆိုးအောက်က ငယ်ပါကို လက်နှင့် ဆုပ်ကိုင်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပြ သည်။ အေးမောင် တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးပါ။ သူလုပ်သလို လိုက်လုပ်မလို့ ကြံတုန်း အရှေ့က အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာကြီး အနောက်ကို လျှောက်လာသဖြင့် ကိုယ်ရှိန်သတ်လိုက်ရသည်။ အတန်းပြီးလို့ ဆရာထွက်သွားတော့ ကျောင်းလဲ လွှတ်ပြီမို့ သူငယ်ချင်းက….
အေးမောင်… ညကျ ခုနပြောသလိုလုပ်ကြည့်…. မင်း ကြိုက်သွားလိမ့်မယ်….
အေးမောင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူစကားကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စိတ်ကူးယဉ်လာသည်မှာ အိမ်ကို ဘယ်လို ရောက်သွားသည်ပင်မသိ။ အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း စမ်းသပ်မလို့ ကြံစည်သေးသည်။ အချိန်မရသဖြင့် ကျူရှင် ကို အမြန်ပြေးရသည်။ ကျူရှင်မှာ ဆရာမ စာသင်သည်ကိုလည်း လိုက်သာမှတ်နေရသည်။ စိတ်တော့ သိပ်မ၀င် စားတော့။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အန်တီလေးကို နှုတ်ဆက်ပြီး အခန်းထဲတက်သွားသည်။ အခန်းထဲရောက် တော့ အခန်းတံခါးကို သေချာပိတ်ကာ ဂျက်ချသည်။ ထို့နောက် စာအုပ်များကို စားပွဲပေါ်တင်ကာ အသစ်ထပ်ရ လာသည့် စာအုပ်ကလေးကို စားပွဲခုံပေါ် တင်လိုက်ပြန်သည်။ စာအုပ်ကို တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်သည်။
မနေ့က ဇာတ်လမ်းထက် ပိုကောင်းသလို ထင်ရသည်။ ထို့နောက် ပက်လက်လှန်ချလိုက်ကာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ပြောသလို ငယ်ပါကို လက်နှင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ စာအုပ်ဖတ်ထားပြီး မတ်မတ်ထောင်နေသည်ဖြစ်ရာ လက် နှင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ကြည့်(ဂွင်းတိုက်ကြည့်)ရာ စိတ်ထဲတွင် တမျိုးခံစားနေရသည်။ တစ်ခု ခု ဆီသို့ ရောက်အောင်သွားနေရသကဲ့သို့။ ရင်ထဲမှာလည်း လှိုက်မောလာသည်။ ရင်ခုန်သံတွေ တဒိန်းဒိန်း မြန်လာကာ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ပူရှိန်းရှိန်းဖြစ်လာသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အရှိန်တက်လာပြီးနောက် ထိပ်ဖျားမှ သည့် အရင်းတိုင်အောင်၊ ထိုမှသည် ဟိုးအတွင်းပိုင်းအထိ ကျင်တက်လာသည်။
အေးမောင် လန့်သွားသည်။ ဘာဖြစ်လာသည်မသိသောကြောင့်ပင်။ သို့သော် ရပ်ပစ်လိုက်ချင်စိတ်ကို ရှေ့ဆက်ချင်စိတ်က ဖုံးလွှမ်းသွား သည်။ ထိုစိတ်နှစ်မျိုး ဒွန်တွဲကာ လွန်ဆွဲနေစဉ်မှာပင် ငယ်ပါတစ်ခုလုံး ကျင်တက်လာပြီး ပူနွေးသော သုက်ရည် များ ၀တ်ထားသည့် ပုဆိုးထဲသို့ ထွက်သွားလေတော့သည်။ ဒီလောက် ကောင်းသည့် အရသာ အေးမောင် တစ်ခါမှ မခံစားဖူးချေ။ နုန်းခွေသွားသလိုလည်း ခံစားရသည်။
အိပ်ရာပေါ်တွင် ပိုးလိုးပက်လက် လှဲချလိုက်ရ သည်။ ၀တ်ထားသော ပုဆိုးကို ကြည့်လိုက်တော့ စိမ်းရွှေရွှေအနံ့ရှိသော အရည်ဖြူဖြူများကို တွေ့ရသည်။ အေးမောင် ပထမဆုံး အကြိမ်မို့ လန့်နေသည်။ ဟိုကောင်တွေလုပ်တာ ဒီလိုရော ဖြစ်ကြရဲ့လား။ ငါ့ကျမှ အရည်တွေထွက်ပြီး လူကနုန်းသွားတာဆိုတော့ အထဲမှာ ဒဏ်ရာတွေ ဘာတွေများ ရှိလို့လား လန့်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်နေ့ ကျောင်းရောက်တော့ သူငယ်ချင်းလဲဖြစ် ဒီနေရာမှာဆရာလည်း ဖြစ်သူကို စာအုပ် ပြန် အပ်ရင်း အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ရသည်။
သယ်ယင်းကလည်း….. အဲဒါ… ပုံမှန်ပဲကွ… အဲဒီအရည်မထွက်တော့မှသာ… ပုံမှန်မဟုတ်တော့မှာ….
သိပုလေကွာ…. ငါက တခါမှ မကြုံဖူးတော့…. လန့်သွားတာ…. ဟဲဟဲ…..
ရော့….. ဒီမှာ နောက်တစ်အုပ်…..
အေးမောင် အရင်နေ့တွေလိုပဲ စာအုပ်ကို လွယ်အိတ်ထဲ ထည့်သယ်ကာ အိမ်ပြန်သွားသည်။ ကျူရှင်သွား အိမ်ပြန်ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း မနေ့က လုပ်ငန်း ဆက်လုပ်သည်။ အေးမောင် ဒီအရသာကို သဘောကျ နှစ်ချိုက်စွာ စွဲလန်းသွားသည်။ စာအုပ်ထဲကလို အပြင်မှာလည်း လုပ်ကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်တွေလည်း ပေါက်လာရ သည်။ အပြင်မှာ လုပ်ကြည့်ဖို့က မလွယ်လှ။ ရည်းစားထားတာ မိသွားရင်လည်း ကျောင်းထုတ်ခံရမည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ထုတ်မည်ထက် အမေလာထုတ်မည်ကို စိုးရိမ်ရသည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးထုတ်လိုက်တာ တစ်ခြားကျောင်း သွားတက်လို့ရသေးသည်။ အမေလာထုတ်သွားရင်တော့ ဘယ်ကျောင်းမှာမှ တက်လို့ ရတော့မည်မဟုတ်ပေ။
ကျောင်းက မိန်းကလေးတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်သည်။ ယခင်က သတိမထားမိသည့် အလှတွေက မျက်စိထဲမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပေါ်လာကြသည်။ စိတ် ဆိုတော့လည်း ခက်သားကလား။ ထိန်းလို့ သိမ်းသို့ လွယ်သည့်အရာ မဟုတ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် အိဖြူဆီလည်း ရောက်သွားသည်။ တီလေးဆီလည်း ရောက်သွားသည်။ အိမ်မှာ အနီးဆုံး ရှိနေပြီး အများဆုံး တွေ့နေရသည့် မိန်းမသားနှစ်ဦး မဟုတ်ပါလား။ တီလေးကိုတော့ ကြောက်သည့် အားနာသည့်စိတ်နှင့် အတွေးထဲက အမြန်ပြန်ထုတ်ပစ်ရသည်။ ညီမလေး အိအိကိုလည်း မပြစ်မှားလို။
သို့သော် ဆယ့်ခြောက်နှစ် အရွယ်ရောက်နေသည့် အိဖြူ၏ ဖွံ့ထွားသည့် ရင်နှစ် မွှာ၊ စွင့်ကားသည့် တင်နှစ်မွှာ၊ အဆီကင်းသည့် ခါးသိမ်သိမ်ကလေးများနှင့် စကတ်တိုတိုလေးများ ၀တ်ချိန်တွင် မြင်ရတတ်သည့် ဖြူဝင်းမွတ်စင်းနေသည့် ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေးများကြောင့် အာရုံထဲမှ ထုတ်ပစ်လို့ မရနိုင် ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အတန်းထဲမှ ကောင်မလေးများအား မှန်းဆကာ ဂွင်းတိုက်နေချိန်တွင် ပြီးကာနီးတွင် အိဖြူ၏ ပုံရိပ်လွှာက အလိုလို ၀င်လာပြီး ပြီးသွားသည်သာ များသည်။ ကြာတော့ အိဖြူကိုပင် အားမနာတမ်း မှန်းတတ်လာသည်။ တစ်ခါတရံ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမှန်းဘဲ အိဖြူတစ်ယောက်တည်းကိုသာ မှန်းပြီး ထုလိုက်မိတတ်သည်။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနှင့် အတွေ့အကြုံဖလှယ်တိုင်း နည်းစနစ် အသစ်တစ်မျိုး အမြဲရသည်။ နောက်ဆုံး တော့ ကျောင်းကအိမ်သာ၊ အိမ်က အိမ်သာ၊ ရေစင်(အပေါ့သွားရန်လုပ်ထားသည့်နေရာ)များတွင် မကျန် ထု တတ်လာသည်။ ဆေးဆိုင်မှာလည်း မုန်ညင်းဆီ သွားဝယ်ကာ ဆောင်ထားတတ်လာသည်။ ပညာရေးတွင် မညံ့ရအောင်လည်း ထိန်းတတ်လာသည်။ ဒါက ဘယ်အချိ်န်လုပ်လုပ် ရသည်ဆိုတာ သိသွားတော့ စာသင်ချိန်မှာ စိတ်ထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပြီ၊ စာကျက်ချိန် ဖြောင့်ဖြောင့် ကျက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ စာကျက်ပြီးရင် တော့ အားလုံးသိမ်းဆည်းပြီးချိန်မှ အိပ်ရာထဲဝင် တစ်ချီတစ်မောင်း ဆွဲတတ်လာသည်။ စာသင်ချိန်မှာ စိတ်ပေါ် လာလျှင်ပင် ခွင့်တောင်းကာ အိမ်သာထဲဝင်ပြီး စိတ်ဖြေတတ်နေပြီကိုး။
မိုးလေး တဖွဲဖွဲ ရွာသွန်းနေသော ညတစ်ည။ အေးမောင် ထုံးစံအတိုင်း စာများကျက်ပြီးသဖြင့် လုပ်ငန်း စဖို့ ဟန်ပြင်နေတုန်းရှိသေး အောက်က အော်ခေါ်သံကြားလိုက်ရသည်။
အိမွန်….. အိမွန်ရေ…. တံခါးဖွင့်အုံးဟေ့ ဧည့်စာရင်းစစ်ချင်လို့…. (ထိုစဉ်က ဧည့်စာရင်းဥပဒေမဖျက် သေးပါ)
ဘယ်သူမှ ကြားဟန်မတူ။ မိုးဖွဲဖွဲနှင့် အန်တီလေးရော အိအိပါ အိပ်မောကျနေပြီ ထင်သည်။ အေးမောင် အောက်ကခေါ်သံကြောင့် ခုနက တင်းမာနေသော စိတ်များ လျော့ပါးသွားသည်။ ပုဆိုးပြင်ဝတ်ကာ အောက်ကို ဆင်းသွားပြီး အန်တီလေး အခန်းရှေ့အရောက် တံခါးခေါက်လိုက်သည်။ ထူးသံမကြား။ ၀င်နှိုးမှ ရတော့မည်။ အခန်းတံခါးဘုသီးကို လှည့်ဖွင့်လိုက်တော့ အန်တီလေး အိပ်ရာမှ နိုးလာဟန်တူသည်။
အေးမောင်…. ဘာလဲ ဖိုးသား (အေးမောင်ကို ဖိုးသားဟု အန်တီလေးက ချစ်စနိုးခေါ်တတ်သည်)
ဧည့်စာရင်းစစ်မလို့တဲ့…အန်တီလေး…. လူကြီးတွေ ရောက်နေတယ်….
အေး… ခဏစောင့် ဖိုးသား…. လာမယ်….
အန်တီလေး အိပ်ရာထဲမှာ အိပ်နေရာမှာ ခြင်ထောင်ကို မ ကာ ခြေနှစ်ချောင်းကို အပြင်သို့ တွဲလောင်းချလိုက် သည်။ အေးမောင် မျက်လုံးထဲ မြင်လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် ကြက်သေသေသွားမိသည်။ လျှပ်စီးလက် လိုက်သလို စိတ်ထဲခံစားမိကာ ဗလောင်ဆူသွားသည်။ တီလေး၏ ထဘီက ခါးအထိ လန်တက်နေကာ ပေါင် နှစ်ချောင်းကြားက အဖုတ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်လိုက်ရသည်။ တီလေးက ညအိပ်လျှင် မီးလင်းမှ အိပ်တတ် သည်။ တီလေးက မျက်လုံးမဖွင့်သေး။ အေးမောင် သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်နေမိကာ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ဖြစ် နေသည်။ ထိုအချိန်တွင် တီလေး မျက်လုံးပွင့်သွားရာ အေးမောင် သူမ အောက်ပိုင်းကို စိုက်ကြည့်နေသည်ကို မြင်ရပြီး သူမကိုယ်သူမ ပြန်ငုံ့ကြည့်လိုက်ရာ အဖြေမှန်ကို သွားတွေ့သည်။
ဟဲ့…. ကောင်လေး….. ဘာကို လာပြီး အပြူးအပြဲကြည့်နေတာတုန်း…. သေချင်လို့လား….. သွား…..
တီလေး ရှက်ကိုးရှက်ကန်း မောင်းထုတ်သဖြင့် အေးမောင် ကမန်းကတန်း အိမ်ပေါ်ထပ်သို့ တက်ပြေးရလေ တော့သည်။ ရင်ထဲတွင်လည်း တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေမိသည်။ သူ မိန်းမတစ်ယောက်၏ လျှို့ဝှက် အစိတ်အပိုင်းတွေ ကို သေသေချာချာ မမြင်ဖူးချေ။ ရုပ်ပြစာအုပ်များတွင် ဆွဲထားသည်ကလည်း မဆန့်မပြဲ ဟဲဗီးကြီးတွေ ဖြစ်ရာ သိပ်မပီပြင်လှ။
ယခုတော့ တီလေး၏ အဖုတ်ကိုမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုည စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ တစ်ခြားအကြောင်းစဉ်းစားလို့မရတော့။ တီလေး၏ ရွှေတြိဂံနယ်မြေမှ ရုန်းထွက်လို့ မရ နိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်။ အိပ်မက်ထဲအထိပါ လိုက်စိုးမိုးနေတော့သည်။
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းတွေထွက်တော့ အိဖြူ မအောင်ပါ။ မအောင်သော်လည်း အိဖြူ သိပ်ဝမ်းမနည်း လှ။ ငိုလည်း မငိုမိ။ ဖြေစဉ်ကတည်းက မအောင်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိထားပြီးပြီဆိုတော့ သိပ်မခံစားရခြင်းဖြစ်သည်။ အမေဖြစ်သူက ကျောင်းလိုက်အပ်ပေးကာ စာအုပ်များ ကျောင်းဝတ်စုံများ ၀ယ်ပေးရသည်။ အိဖြူ ကျောင်းတက် တော့ ကိုကို အေးမောင် ဆိုင်ကယ်နှင့် အတူတူ လိုက်ရသည်။
အေးမောင်ကလည်း ပျော်ပါသည်။ သူ့ထက် တစ်တန်းကြီးသော်လည်း တစ်နှစ်ငယ်သော ညီမလေး အိဖြူကို ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ကာ ကျောင်းသွားရသည်လေ။ ကျူရှင်တက်ရတော့လည်း အတူတူဖြစ်သည်။ အေး မောင်က ကျူရှင်ပြီးသွားလို့ အိဖြူ စာသင်နေတုန်းဆိုလည်း စောင့်နေရသည်။ အိဖြူက အရင်ပြီးသွားရင်လည်း အေးမောင် အခန်းရှေ့က စောင့်နေသည်။ အေးမောင်ရင်ထဲတွင် ကြည်နူးနေသည်။ သူ ညစဉ်ညတိုင်း ပြစ်မှား နေကျ ညီမလေး အိဖြူက သူ့ဆိုင်ကယ်နောက်တွင် တက်ထိုင်ကာ အင်္ကျီစကို ကိုင်ပြီး လိုက်သည်။
ခါးတော့ မဖက်ပါ။ အေးမောင် အိဖြူ၏ အလှကို သေသေချာချာကို ကြည့်ဖြစ်သည်။ အိဖြူ ဘာအ၀တ်အစား ၀တ်ဝတ် အေးမောင်က မျက်လုံးဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ထားသည်။ အစက ကျောင်းက သူငယ်ချင်းမလေးများနှင့် ရှုပ်ရှတ်ခက် နေသော စိတ်ကူးယဉ်နယ်မြေတွင် လူရှင်းသွားပေပြီ။ တီလေးနှင့် အိဖြူသာ တစ်လှည့်စီ ကြီးစိုးနေသည်။
တီလေး၏ အဖုတ်ကို မြင်ရပြီးတော့ သူ့မင်းသမီးလေး အိဖြူ၏ အဖုတ်ကို မြင်ချင်လှသည်။ သို့သော် မြင်ခွင့်မသာသေး။ အိဖြူက အခန်းတံခါးကို ဂျက်ထိုးပြီး အိပ်တတ်သည်။ အေးမောင် အကြံပေါင်းစုံ ထုတ်တော့ လည်း အခွင့်မသာလှ။ တစ်ရက်တွင် ဆင်ကြံကြံနေရင်း အကြံတစ်ခု ဖျပ်ကနဲ ရလိုက်သည်။ ဟိုတခါ တီလေးကို မြင်ရတုန်းက တီလေး ညဘက်အိပ်လျှင် ပိုးစိုးပက်စက် အိပ်တတ်သည်ကို သိသွားသည်။ ထိုအကြံ ရလိုက်သည်မှာလည်း အခြားမဟုတ်။ သူ့အခန်း ဘေးနံရံမှာ ပိုးပေါက်သဖြင့် အပေါက်ဖြစ်နေသည်ကို ကြည့် နေရင် အကြံပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
တီလေးရော အိဖြူရော သူ့အခန်းအောက်မှာ နေတာဖြစ်သည်။ အောက်ထပ်မှာ တီလေးနှင့် အိဖြူက အခန်းနှစ်ခန်းကို အကျယ်ယူထားသည်။ အပေါ်ထပ်တွင် အခန်းသုံးခန်း ဖွဲ့ထားကာ ထိပ်ဆုံးခန်းကို အလွတ်ထားသည်။ လှေကားနားက အခန်းကိုတော့ ပစ္စည်းအပိုတွေ သိမ်းထားသည်။ အေးမောင်အခန်းက တီလေးအခန်းနှင့် အိဖြူအခန်း၏ အပေါ်တွင် ခွကာ ဆောက်ထားသဖြင့် ခေါင်းရင်းပိုင်းက တီလေးအခန်းဘက်တွင် ရှိပြီး ခြေရင်းပိုင်းက အိဖြူအခန်းဘက်တွင် ရှိသည်။
ကျောင်းပိတ် ရက်တစ်ရက်တွင် အေးမောင် ခဲတံချွန်ဓားနှင့် တီလေး အခန်းဘက်ခြမ်းဖြစ်သည့် ခေါင်းရင်းဘက် ခေါင်းအုံးဘေးနားတွင် အပေါက်တစ်ပေါက် ဖောက်သည်။ ကျွန်းပြားတွေ ခင်းထားသည်ဖြစ်ရာ တော်တော် ဖောက်ယူရသည်။ ကြိုးစားပမ်းစားဖောက်လိုက် တော့ အပေါက်တစ်ပေါက် ကောင်းကောင်းဖြစ်သွားသည်။ အစမ်း ချောင်းကြည့်သည်။ အဆင်ပြေသည်။ တီလေးက မီးဖိုချောင်ထဲတွင် ရှိမည်ထင်သည်။ အခန်းထဲတွင် မရှိ။ အပေါ်စီးကနေ အန်တီလေး တစ်ခန်းလုံးကို သေသေချာချာ မြင်ရသည်။
အေးမောင် ဖောက်လိုက်သည့် နားက အ၀တ်ဘီရို အရှေ့ဘက်ကို ကျသည်။ ဟိုဘက်က တီလေး အိပ်ရာ တစ်ခုလုံးကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်း လင်း မြင်ရသည်။ သို့သော် ယနေ့တော့ လက်တွေ နာလွန်းသဖြင့် ရေကြည်ဘု ထလာကာ နားလိုက်ရသည်။ နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ အေးမောင် အိဖြူအခန်းဘက်ကို ဖောက်ဖို့ကြံပြန်သည်။ ဖျာချပ်၏ ခြေရင်းအဖျား ပိုင်းလောက်တွင် လှပ်ကာ အပေါက်ဖောက်သည်။ ဒီတစ်ခါ ဖောက်တော့ အေးမောင်၏ အချိန်အဆ မှန်သွားသည်။ အိဖြူ၏ ခုတင်အပေါ်တည့်တည့်ကို ဖောက်မိသွားသည်။ တစ်ခန်းလုံးကိုတော့ ခြုံငုံ မိသွားသည်။
ညနေ အိဖြူနှင့် ကျူရှင်အတူတူ သွားသည်။ ဒီည အိဖြူက ကျူရှင်အတန်းပြီးတာ နောက်ကျသည်။ အေးမောင် ပြန်စောင့်နေရသည်။ ထို့နောက် အိဖြူအတန်းပြီးသွားသဖြင့် သူမကို ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ကာ အိမ် သို့မောင်းလာခဲ့သည်။ တစ်နေရာအရောက်တွင် လမ်းဘေးမှ ၀ှစ်ကနဲ ပြေးဝင်လာသော ခွေးတစ်ကောင် ကြောင့် ဘရိတ်ကို ဆောင့်နင်းလိုက်သည်။ ထိုအခါ အနောက်မှ အိဖြူ၏ ကိုယ်ကလေးသည် အေးမောင်ကျော သို့ စွေ့ကနဲ ပြေးကပ်လာပြီး ရွှေရင်နှစ်မွှာနှင့် အမှတ်တံဆိပ် ခတ်နှိပ်လိုက်လေတော့သည်။
ဆက်လက် မောင်း နှင်လာရာ အိဖြူ အေးမောင်၏ ခါးကို ခပ်တင်းတင်းဖက်ကာ လိုက်ပါလာတော့သည်။ ခုနက ဘရိတ် ဆောင့် အုပ်လိုက်သဖြင့် ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်သွားပုံရသည်။ အိမ်ကိုရောက်တော့ ကိုကို ဂွတ်နိုက်ဟု ဆိုကာ လက်ကလေးပြကာ အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားသော အိဖြူကိုကြည့်ကာ အေးမောင် အသည်းယားသွားသည်။
အေးမောင် အိမ်ပေါ်ထပ်သို့ တက်လာခဲ့ပြီး ဖောက်ထားသော အပေါက်ကလေးများကို အသုံးချရန် ပြင် ဆင်လိုက်သည်။ ပထမဦးစွာ ခေါင်းရင်းဘက်မှ ခေါင်းအုံးကိုဖယ်ကာ ဖျာကို လှန်ပြီး အန်တီလေးဘက်ခြမ်းကို ကြည့်လိုက်သည်။ အန်တီလေးကို မတွေ့ရသေး။ အိမ်ရှေ့ခန်းထဲတွင် ရှိနေပုံရသည်။ ထို့ကြောင့် အိဖြူအခန်း ဘက် ခြေရင်းဘက်က အပေါက်ကို ဖျာလှန်ကာ ကြည့်လိုက်သည်။ မြင်ရသော မြင်ကွင်းကြောင့် အေးမောင် မျက်စိမခွာနိုင်ဖြစ်သွားသည်။ အေးမောင် ကြည့်လိုက်ချိန်ဝယ် အိဖြူသည် သူမ ကျူရှင်သွားစဉ်ဝတ်ခဲ့သော ထဘီနှင့် တီရှပ်ကလေးကို ချွတ်ပြီးနေပြီ။ ပန်းနုရောင် ၀မ်းဆက် ဘရာကလေးနှင့် ပင်တီလေးသာ ရှိသည်။
သူမနှင့် အန်တီလေးအခန်းသည် အလုံပိတ်ဖြစ်သည်။ တံခါးပိတ်ထားလျှင် ကြွက်ပင် ၀င်နိုင်သည်မဟုတ်။ ပြတင်း ပေါက်များကိုလည်း မှန်အနက်များ တပ်ထားသဖြင့် ပိတ်ထားလျှင် အပြင်ဘက်ကို မြင်နိုင်သော်လည်း အပြင်ဘက်က သူမတို့ကို မြင်ရန် ခက်ခဲသည်ဖြစ်ရာ ကိုယ့်အခန်းထဲအရောက် စိတ်လွတ်လက်လွတ် နေပုံရသည်။ အိဖြူ ဘာဆက်လုပ်မည်ကို အေးမောင် စိတ်ဝင်တစား ကြည့်လိုက်မိသည်။ အိဖြူ ၀တ်ထားသည့် ဘရာကလေးကိုလည်း ချွတ်လိုက်ရာ ဖွံ့ထွားသည့် ရင်သားနှစ်မွှာသည် လွတ်လပ်စွာ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့ နောက် သူမ၏ ပင်တီလေးကိုလည်း ချွတ်ချလိုက်ပြန်သည်။
အိဖြူ၏ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ကိုယ်လုံးလေးအား အထင်းသား မြင်နေရသည်။ ဘီရိုကို ဖွင့်ကာ အိဖြူ ဂါဝန်တစ်ထည် ယူလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဘာအခုအခံမှ မ၀တ်တော့ဘဲ ထိုဂါဝန်ကိုသာ ခေါင်းမှ စွပ်ချလိုက်သည်။ ဂါဝန်ကလည်း ဒူးအထက်နားလောက်အထိသာ ရှည် မည် ထင်သည်။ ထို့နောက် အိဖြူ အိပ်ရာထက်သို့ တက်ကာ ခြေပစ်လက်ပစ် လှဲချလိုက်သည်။ ခြေကားယား လက်ကားယား လှဲချလိုက်သောကြောင့် ပျော့ပြောင်းပါးလွှာသည့် ဂါဝန်လေးက အိဖြူ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို ပေါ် လွင်စေသည်။ ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေးနှစ်ချောင်း၊ ထိုပေါင်တန်နှစ်ချောင်း ပေါင်းဆုံရာနေရာမှ အဖုတ်ကလေး နေရာကို မမြင်ရသော်လည်း မြင်ရသကဲ့သို့ပင်၊ ရင်နှစ်မွှာကိုလည်း တစ်လုံးစီပင် မြင်နေရသည်သာ။
အေးမောင် ထိုမြင်ကွင်းကို ကြည့်နေရင်းပင် ငါးဦးကော်မတီဖွဲ့လိုက်ရာ တစ်ချီတစ်မောင်း ပြီးသွားရသည်။ ထိုအချိန်တွင် အိဖြူ ပက်လက်လှန်နေရာမှ မှောက်လိုက်ကာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုယူကာ စာကျက်နေသည်။ မှောက်လိုက်တော့လည်း အိဖြူ၏ တင်နှစ်မွှာကြားထဲတွင် ဂါဝန်စ ညပ်နေသည်ဖြစ်သဖြင့် တင်အလှဖွံ့ဖွံထွား ထွား လုံးလုံးကျစ်ကျစ်ကလေးကို အားရပါးရရှုစားရသည်။
အေးမောင် စိတ်ကျေနပ်သွားသဖြင့် စာကျက်ဖို့ အသိဝင်ကာ စာအုပ်ထုတ်ကျက်လိုက်သည်။ ကျက်စရာ စာများ ကုန်သွားတော့ စာအုပ်များ သိမ်းလိုက်ပြီး တီလေးဘက် အခန်းကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ထိုအခါ မြင်ကွင်းတစ်မျိုးကို ထပ်မြင်ရပြန်သည်။ တီလေးက ပက်လက်လှန်အိပ်နေသည်။ ခြင်ထောင်အမိုးက လည်း ပါးပါးလွှာလွှာလေးဖြစ်ရာ ထင်ထင်ရှားရှား မမြင်ရသော်လည်း အနေအထားဘယ်လိုရှိနေသည်ကို ကွက် ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရသည်။
ခြေနှစ်ချောင်းကို ဆန့်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကို ရင်ဘတ်ပေါ်ယှက်တင်ပြီး တီလေး အိပ်မောကျနေပြီ။ ၀တ်ထားသော ထဘီက ဆီးခုံလောက်အထိ လန်တက်နေရာ တီလေး၏ ရွှေတြိဂံ နယ်မြေကို မည်းမည်းလေး မြင်နေရသည်။ သူဖောက်ထားသည့် အပေါက်က အ၀တ်လဲသည့် နေရာ ရောက် နေသဖြင့် အိပ်သည့်နေရာကို သေသေချာချာ မမြင်ရ။ တီလေး အိပ်သည့်နေရာလောက်ကို မှန်းဆကာ အမှတ် အသားလုပ်ထားလိုက်ရသည်။ ဒီညတော့ အပေါက်ဖောက်လို့ မဖြစ်။ မတော်တဆ အမှုန်တွေဘာတွေ ကျသွား လျှင် ရိပ်မိသွားနိုင်သည်။
အေးမောင် ညမအိပ်ခင်မှာပင် တီလေးကို ကြည့်ကာ ငါးဦးကော်မတီ ဒုတိယမ္ပိ ထပ်ဖွဲ့လိုက်ရသည်။ မှန်းနေစရာမလိုတော့ချေ။ လက်တွေ့မြင်ကွင်းကိုပင် ကြည့်ရသည်က ပိုကောင်းနေသည်။
ကျောင်းတစ်ပတ်ပိတ်တော့ အပေါက်ဖောက်ရေးစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရသည်။ နည်းနည်း လေး ထွင်းလိုက် အမှုန်ဖယ်လိုက် အိပ်ရာတည့်တည့်တွင် အပေါက် ဖောက်ရသည်။ အိပ်ရာတည့်တည့်ကျတော့ အေးမောင်၏ ခေါင်းရင်း စာအုပ်စင်နားတွင် ဖြစ်သည်။ စာအုပ်စင်နှင့် နီးနေသဖြင့် ကြည့်ရသည်မှာတော့ သိပ် သက်တောင့်သက်သာ မရှိလှ။ အေးမောင် စောင်တစ်ထည်ကို ထိုနားတွင် ခင်းထားသည်။ စာကြည့်စားပွဲကို လည်း ထိုနားသို့ ရွှေ့ပစ်လိုက်သည်။ အိပ်ရာပေါ်တွင် စာမကျက်တော့ဘဲ စာကျက်သည့်နေရာကို ပြောင်းလိုက် ခြင်း ဖြစ်သည်။ ညစဉ် ညတိုင်း အိဖြူကို ချောင်းလိုက်၊ အန်တီလေးကို ချောင်းလိုက်နှင့် အဆင်ပြေလွန်းလှသည်။
အေးမောင် တဖြည်းဖြည်း လောဘ တက်လာသည်။ အိပ်ခန်းထဲကို ချောင်းရသည်ကို အားမရတော့။ အန်တီလေးနှင့် အိဖြူတို့ ရေချိုးသည်ကိုလည်း ကြည့်ချင်သည်။ ရေချိုးခန်းနှင့် ရေစင်(အပေါ့သွားသည့်နေရာ) မှာ ဆက်နေသဖြင့် အေးမောင် ရေချိုးရင်း၊ အပေါ့သွားရင်း သူ့အခန်းရှိရာဘက်သို့ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ထို နေရာကို စိတ်နှင့် မှတ်ထားလိုက်သည်။ ထိုနေရာအတွက်လည်း အပေါက် ဖောက်လိုက်သည်။ သို့သော် ရေချိုး ချိန်နှင့် ရေအိမ်ဝင်ချိန်ကို ချောင်းရသည်မှာ မလွယ်ကူလှ။ သူ့အိပ်ခန်းလည်း မဟုတ်ဘဲ လှေကားပေါက် လက် ရန်းနားတွင် ဖြစ်နေသဖြင့် တစ်ယောက်ကို ချောင်းနေချိန် တစ်ယောက်တက်လာလျှင် ကွိကနဲ မိသွားနိုင် သည်။ သေချာမှသာ ချောင်းရဲသည်။
အန်တီလေး ရေချိုးချိန်နှင့် အရင်တိုးသည်။ အန်တီလေးကလည်း ရေချိုးခန်း အလုံဖြစ်သဖြင့် ကိုယ်လုံး တီး ချွတ်ကာ ချိုးသည်ပဲ။ အန်တီလေးသည် ကလေးတစ်ယောက် အမေဖြစ်သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစား မပျက်စီးသေးချေ။ အေးမောင်ထက် ဆယ့်ငါးနှစ်လောက် အသက်ကြီးသော်လည်း အသက် သုံးဆယ် ၀န်းကျင်လောက်သာ ဖြစ်သဖြင့် နုပျိုလှပနေဆဲဖြစ်သည်။ ကလေးအမေ ရင်သားများကို တစ်ခါတရံ တွေ့ဖူး သည်။ ဘယ်လိုမှ စိတ်ကူးယဉ်လို့ မရ။ (အိမ်ထောင်သည်ဆိုသည့်အတွေးကြောင့်လည်း ပါသည်)။
သို့သော် အန်တီလေး၏ ရင်သားမှာ ဘတ်လပ်ကြီး တွဲကျနေသည်မဟုတ်ဘဲ အနည်းငယ်လေး တွဲကျသယောင်လောက် သာ ရှိပြီး အပျိုနီးပါးပင် တင်းရင်း လှပနေခြင်းဖြစ်သည်။ တင်သားမှာလည်း စွင့်ကားကာ တင်းနေသည်။ အိဖြူ လို လုံးလုံးကျစ်ကျစ်ကလေး မဟုတ်စေကာမူ အခြား မိန်းမကြီးများကဲ့သို့ ပရမ်းပတာကြီး အယ်ထွက်မနေချေ။
ဗိုက်သားလေးတစ်ခုသာ အနည်းငယ် အဆီများကာ အစ်နေသော်လည်း ဗိုက်ပူသည်ဟု ပြောရမည့်အဆင့် အထိ မရှိချေ။ အန်တီလေး ရေချိုးကာ ဆပ်ပြာတိုက်ပြီး သူ့ပေါင်ခြံခွကြားမှ အဖုတ်ကို ပွတ်သပ်ဆေးကြော နေ သည့်အချိန်တွင် အေးမောင် ချက်ချင်း ထုပစ်လိုက်မလို့ စဉ်းစားသည်။ သို့သော် ဒီနေရာမှာ လုပ်လို့မဖြစ်။ ပေ ကျံသွားလျှင် ရှင်းရခက်လိမ့်မည်။
အန်တီလေး အပြင်ထွက်သွားသည့် တစ်နေ့ အိဖြူ ရေချိုးချိန်ကို စောင့်နေသည်။ အိဖြူ ထဘီလေး ရင် ရှားပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားသည်နှင့် အပေါ်ထပ်သို့ အသည်းအသန် တက်ကာ ချောင်းတော့သည်။ အိဖြူလည်း အန်တီလေးလိုပင် ၀တ်လစ်စားလစ်သာ ချိုးသည်။ အိဖြူကတော့ အပျိုပေါက်ကလေးမို့ ရင်သား နှစ်မွှာသည် ပန်းကန်လုံးနှစ်လုံး မှောက်ထားသည့်နှယ် တင်းရင်းနေသည်။ ခါးကလည်း အဆီပို လုံးဝမရှိ ချပ်ယပ်နေသည်။ ညစဉ် သေသေချာချာမမြင်ရသည့် အဖုတ်ကလေးကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်လိုက်ရသည်။ အန်တီလေးကဲ့သို့ အမွှေးသိပ်မများလှပါ။ အပေါ် ဆီးခုံနားလေးတွင်သာ စုစုလေး ပေါက်နေသည်။ ထိုမြင်ကွင်း ကြောင့် အသက်ပင် ရှူမိရဲ့လား မသိတော့ပေ။
ကျောင်းဖွင့်ရက် တစ်ရက်တွင် အေးမောင်ရော အိဖြူပါ ကျောင်းသွားနေချိန် အန်တီလေး သူတို့၏ ခြင်ထောင် များ လျှော်ဖွပ်ပေးချင်သဖြင့် အိဖြူအခန်းက ခြင်ထောင်တွေ စောင်တွေယူပြီး ရေစိမ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် အပေါ် ထပ် တက်ကာ အေးမောင်အခန်းသို့ ၀င်ယူသည်။ အေးမောင်အခန်းက သော့မခတ်ပါ။ ဒီအတိုင်းသာ ထားသည်။ ယောက်ျားလေးဖြစ်သဖြင့် သော့ခတ်စရာမလိုပေ။
အေးမောင် အခန်းထဲ ၀င်လိုက်သည်နှင့် သူမ သိသော အနံ့တစ်ခု ထောင်းကနဲထွက်လာသည်။ အေးမောင် ခြင်ထောင်အနားစများတွင်လည်း မာ နေသည်။ သူ့ပုဆိုးများကို ယူကြည့်တော့လည်း အကွက်လိုက် အကွက်လိုက် ခြောက်သွေ့လို့ပင် နေသည်။ သြော် ဒီကောင်လေး ဒါတွေ လုပ်တတ်နေမှကိုး….. သြော် သူလည်း ကိုးတန်းကျောင်းသားသာ ပြောတာ အသက်က ဆယ့်ခုနစ်နှစ်ထဲ ၀င်နေပြီဆိုတော့ လုပ်တတ်နေပြီပေါ့….
အန်တီလေး စိတ်ထဲတွင် အတွေးများ ယောက်ယက်ခတ်သွားသည်။ ဟိုး ပြီးခဲ့တဲ့ လ လောက်တုန်းက ဧည့်စာရင်းစစ်ချိန် အေးမောင်လာနှိုးတော့ သူမထဘီလန်တက်နေသည်ကို အေးမောင် မျက်လုံးအပြူးသားလေး နှင့် ကြောင်ကြည့်နေသည်ကို အမှတ်ရမိသည်။ ဒီကောင်လေး သူမကိုများ ပြစ်မှားနေရော့သလား။ ဟုတ်ချင် မှလည်း ဟုတ်မှာပါ။ သူ့ထက် အသက်ကြီးကြီး အဒေါ်လေးအရွယ်ကိုတော့ မပြစ်မှားလောက်ပါဘူး ဟုသာ စိတ်ဖြေသိမ့်လိုက်ရသည်။
သူ့အတန်းမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေ အများကြီးရှိတာ ပြစ်မှားချင်လည်း အဲဒါ လေးတွေ ပြစ်မှားမှာပေါ့ဟု စိတ်ထဲ တွေးလိုက်မိသည်။ ထိုအတွေးများနှင့်အတူ ရခဲ့သည့် လူပျိုအနံ့ကြောင့် ကင်းကွာခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည့် ကာမအရသာကို တောင့်တသည့် ကာမစိတ်များ နိုးကြားသွားမိသည်။ အေးမောင်၏ လူလုံးလူဖန် တောင့်တင်းသည့်အသွင်ကိုလည်း မြင်ယောင်လာခဲ့သည်။ သြော် ကိုယ့်တူ ကိုယ့် မောင်လေး အရွယ်ပါလေ ဟု စိတ်ပြောင်းသွားလိုက်၊ ကိုယ်နှင့်ဘာမှသွေးသားမတော်ပါလားဟု စိတ်ရိုင်းဝင် လိုက်နှင့် စိတ်တွေ ထွေပြားသွားမိသည်။
အေးမောင် ကျူရှင်က ပြန်လာတော့ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်ငန်းစသည်။ အိဖြူကို ချောင်းပြီးသွားတော့ အန်တီလေး အခန်းဘက်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ အန်တီလေးက အိပ်ရာပေါ် ရောက်နေသည်။ အိပ်ရာဘက် ကို ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ သာမန်နှင့် မတူသော မြင်ကွင်းတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရသည်။ အန်တီလေး ထိုညက ခြင်ထောင် မထောင်ထားချေ။ အန်တီလေး လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ပေါင်ကြားကို ပွတ်သပ်နေသည်။ အေးမောင် သေချာကြည့်နေသည်။ ထဘီပေါ်မှ ပွတ်သပ်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် အဖုတ်ကိုတော့ မမြင်ရပေ။ သို့သော် ခဏ အကြာတွင် အန်တီလေး သူမ၏ ထဘီကို ထချွတ်ပစ်လိုက်ကာ ခြေရင်းသို့ ကန်ထုတ်လိုက်သည်။ထို့နောက် ပက်လက် ပြန်လှန်လိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဒူးနှစ်ချောင်းကို ထောင် လိုက်ကာ ပေါင်ကို ကားလိုက်သဖြင့် အဖုတ်ကြီးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နေရသည်။
အန်တီလေး မျက်လုံး မှိတ်သွားသည်။ ထို့နောက် သူမ၏ လက်တစ်ဖက်က အဖုတ်ကို ပွတ်သပ်နေသည်။ ဖြည်းဖြည်း ပွတ်သပ်ရာမှ မြန်ဆန်လာသည်။ လွတ်နေသည့်လက်တစ်ဖက်က သူမရင်သားကို ပွတ်နယ်နေသည်။ အင်္ကျီကို မချွတ် သဖြင့် ရင်သားကိုတော့ မမြင်ရချေ။ တဖြည်းဖြည်း အတော်လေး မြန်ဆန်လာပြီး ရင်သားကို ပွတ်နေသည့် လက်တစ်ဖက်က အောက်က အိပ်ရာခင်းစကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ မျက်နှာလည်း ရှံ့မဲ့နေကာ အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ထားသည်။ ထို့နောက် အိပ်ရာခင်းစကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် လက်က ပိုတင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာ သူမတစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ကနဲ တုန်ခါသွားပြီး တင်ပါးက မွှေ့ယာပေါ်မှ မြောက်တက်သွား ကာ ဘုန်းကနဲ ပြန်ပြုတ်ကျသွားသည်။
ထိုအတိုင်း ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်နေပြီး အခုအကြာတွင် အရုပ်ကြိုး ပြတ် ခြေကားယားလက်ကားယား ဖြစ်သွားသည်။ အေးမောင် တစ်ခါမှမမြင်ဖူးပေ။ အန်တီလေးလဲ သူ့လိုပင် လက်နှင့် အာသာပြေ လုပ်ခြင်းဖြစ်မည်ဟုသာ တွေးလိုက်သည်။ အေးမောင် ချောင်းနေရာမှ မျက်နှာကို အပေါက်မှ ပြန်ခွာလိုက်သည်။ အန်တီလေး ဒီလို လုပ်သည်ဆိုတော့ အိဖြူရော ဒီလိုလုပ်တတ်လား မသိ။ အိဖြူ လုပ်တာတော့ မမြင်ဖူးသေး။ ဘယ်အချိန်လုပ်သလဲမသိ။ လုပ်ရော လုပ်တတ်ရဲ့လားမသိ။ အတွေးတွေ များ နေသည်။
အန်တီလေး နေ့လည်ကတည်းက နိုးကြွနေသည့် စိတ်များက ရေမိုးချိုးလိုက်ပြီး လန်းဆန်းသွားတော့ တစ်ဖန်နိုးကြားလာပြန်ချေပြီ။ နေ့ခင်းဘက် ကလေးများ ကျောင်းသွားချိန် ကိုယ့်ဘာသာ လက်ဖြင့် အာသာ ဖြေမိသည်။ အပျိုဘ၀ကတည်းကလည်း ဒီလိုမျိုး လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ သင်တန်းတက်ချိန် စီနီယာမမကြီးများက သင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ဒီလို မလုပ်ဖြစ်တော့ပေ။ သို့သော် သူမ အမျိုးသားနှင့် ကွာရှင်း ပြတ်စဲပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ကာမစိတ်များ အလိုလို ကုန်ခမ်းနေသည်။ သူမသမီးလေးကို ပြုစုပျိုးထောင် ရ သည့်အလုပ်နှင့် လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေရာ ဒီစ်ိတ် တစ်ခါတရံ ၀င်လာသော်လည်း သိပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန် မဟုတ်။ လက်နှင့်ပင် မဖြေမိချေ။
ယခုကျမှ အတော်လေးကို သည်းသည်းထန်ထန် စိတ်များ နိုးထနေပြီး အဖုတ်ဝတွင် အရည်ကြည်များ ရွှဲနစ်နေသည်။ မခံမရပ်နိုင်တော့သဖြင့် လုပ်မိခြင်းဖြစ်သည်။ အနီးဆုံး ယောက်ျားလေးမှာ အေးမောင်သာ ဖြစ်သဖြင့် သူ့ကိုသာ စိတ်ထဲ မြင်ယောင်ပြီး လုပ်မိသည်။ ကိုယ်လည်း ကလေးတစ်ယောက် အမေဆိုပေမဲ့ လင်မှ မရှိတော့တာ။ အပြစ်မရှိဟု စိတ်ထဲ ဖြေသိမ့်လိုက်သောအခါ အားရ ပါးရပင် ပွတ်သပ်ကာ အာသာဖြေမိသည်။ အခု ညအိပ်ကာနီးတော့လည်း နေ့လည်က အရသာကို ပြန်လိုချင် မိပြန်သဖြင့် ထပ်လုပ်မိသည်။ အားလုံး အိပ်မောကျနေချိန် ဖြစ်သဖြင့် ထဘီပေါ်က ပွတ်ရတာကို အားမရဖြစ်ကာ ထဘီကွင်းလုံးချွတ်ကာ အားရပါးရ အရသာခံမိသည်။
တစ်ချီ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြီးသွားပြီး နုန်း ချိသွားသည်။ စိတ်လည်း ကျေနပ်သွားသည်။ သြော် နှစ်ရှည်လများ ငတ်ပြတ်နေလို့လားမသိ၊ ကောင်းလိုက်တဲ့ အရသာလေ။ မျက်စိ မှိတ်ထားရာမှ မျက်စိဖွင့်လိုက်စဉ် အပေါ်မျက်နှာကျက်မှ အလင်းရောင်တစ်ခု တွေ့လိုက် ရသည်။ အပေါ်မှာက အေးမောင်၏ အိပ်ခန်းသာ ရှိသည်။ ထိုအလင်းရောင်က ပျောက်သွားလိုက်၊ ပေါ်လာ လိုက်၊ အစက ပျောက်သွားသည်က ကြာသည်၊ ပေါ်လာတာက ခဏလောက်သာ၊ ပျောက်သွားပြန်သည်။ နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် ပြန်ပေါ်လာပြီးနောက် ပျောက်သွားလိုက်သည်မှာ ပေါ်မလာတော့ပေ။
စိတ်ထဲ သိပ်မသေ ချာသေးသဖြင့် အပေါ်ဘက်မျက်နှာကျက်ကို ဓာတ်မီးနှင့်ထိုးကြည့်လိုက်တော့ အပေါက်လိုလို ဘာလိုလို တစ်ခု တွေ့ရသည်။ အင်း…. ဟိုကောင်လေး… ငါ လုပ်နေတာတွေများ ချောင်းကြည့်နေသေးလား… မနက်ကျရင်တော့ အပေါက်ရှိမရှိ သွားကြည့်အုံးမယ်ဟု တေးထားလိုက်သည်။ မနက်မိုးလင်း ကလေးတွေ ကျူ ရှင်သွားချိန် ၀င်ကြည့်တော့ ဟုတ်ပေသပ။ ဒီကျွန်းပြားတွေ အပေါက်မရှိဘူးဆိုတာ ခဏခဏ ကြမ်းတိုက်ခဲ့ဖူး သည့် သူမ ကောင်းကောင်း သိသည်ပေါ့။ ဒီကောင်လေး ဖောက်ထားတာ သေချာပြီဟု သိလိုက်ရသည်။
ညဘက် အိပ်တော့ သူမ သတိထားကြည့်မိလာသည်။ မနေ့ညကလိုပင် ချောင်းနေပြန်ပြီ။ သူမကို ချောင်းကြည့်နေမှန်းသိကာမှ စိတ်က ပိုထလာသည်။ ချောင်းကြည့်နေသည်ကိုပင် ကြည်နူးသလို ဖြစ်မိသည်။ ဒီညတော့ သူမ ခြင်ထောင်လည်း မထောင်တော့။ ရှိသမျှအ၀တ်တွေ ချွတ်ချလိုက်ကာ တန်းပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီး အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်ကာ လုပ်ငန်းစလိုက်သည်။ မနေ့ညကထက်ပင် ပိုးစိုးပက်စက် အာသာဖြေ ပစ်လိုက်သည်။
အေးမောင် ချောင်းနေသည်ကို သိနေသောကြောင့်လားမသိ တော်တော် အရသာရှိလှသည်။ အဖုတ် အတွင်းပိုင်းနှင့် သားအိမ်ဝကပင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လာကာ ကျင်စိမ့်နေအောင် ကောင်းလွန်းလှသည်။ ပွတ် သပ်ရုံမျှနှင့် မတင်းတိမ်နိုင်တော့။ အစေ့ကို ဖွဖွလေး ပွတ်ကာ လက်ခလယ်ကိုပါ နှိုက်သွင်းလိုက်မိသည်။ လင် နှင့် ဝေးရသည်မှာ ကြာလှပြီဖြစ်သဖြင့် အပျိုလေးနှင့် မခြား ကျပ်နေသည်။ မနည်းပင် ၀င်အောင် နှိုက်လိုက်ရ သည်။ နှစ်ချီသုံးချီ ဆက်တိုက် ပြီးအောင် ပွတ်လိုက် နှိုက်လိုက်နှင့် အတော်လေး နုန်းချိသွားမှပင် အိပ်ပျော်သွား ရတော့သည်။ ပြန်လည်း မ၀တ်ဖြစ်တော့ပေ။ ဒီအတိုင်းပင် ပိုးလိုးပက်လက် အိပ်လိုက်ရသည်။
အေးမောင်လည်း မနေ့ကထက်ပင် ပိုကောင်းသွားသည်။ အန်တီလေးက မနေ့ကထက်ပင် ပိုကြမ်း လာသည်။ မနေ့က ခဏလောက်သာ။ ဒီနေ့တော့ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးသွားလိုက်၊ ငြိမ်ကျသွားလိုက်၊ ထပ် ပွတ်လိုက်နှင့် အတော်ကြာသည်။ ဒေါ်လေး အိပ်သွားတော့ အိဖြူအခန်းဘက်ကို ကြည့်သေးသည်။ အိဖြူ အိပ် မောကျနေပြီ။ ဘေးတစ်စောင်း အိပ်သဖြင့် ဘာမှ သိပ်မမြင်ရသောကြောင့် လက်လျှော့ကာ အေးမောင် အိပ် လိုက်ရသည်။ ဒီညကတော့ အန်တီလေးနှင့်ပင် တော်တော် လုံလောက်နေပေပြီ။
အေးမောင် စာအုပ်အသစ်တစ်အုပ် ထပ်ရလာသည်။ စာကျက်ပြီး စာအုပ်ဖတ်လိုက်သည်။ စာအုပ်ဖတ် တော့ စိတ်က ထလာပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် အပေါက်ကလေးများကို ဖွင့်ကာ မျက်စိအစာ ရှာလိုက်သည်။ မတွေ့။ အိဖြူက စာထိုင်ကျက်နေသည်။ အန်တီလေးက အခန်းထဲမှာ မရှိ။ အိမ်ရှေ့မှာ တီဗီ ကြည့်နေသည် ထင်သည်။ ဒါနဲ့ စာအုပ်ကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဖတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် မျက်စိထဲတွင်သာ မြင်ယောင် ပြီး ငါးဦးကော်မတီ ဖွဲ့လိုက်ရသည်။ ပါးစပ်မှလည်း အား …. အိအိ…. အိဖြူ…. ညီမလေး…. ကိုကို ကောင်း လိုက်တာ ဟု အသံထွက်မိသည်။
တစ်ခါတလေလည်း ဒီလိုလေး အသံထွက်လိုက်ရတာ ပို ဖီးလ် ရှိသည်ဟု ထင်မိသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူ့အခန်းတံခါးမှာ စေ့ရုံစေ့ထားရာ ဟနေပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်က ချောင်းကြည့် နေသည်ကို မသိလိုက်ချေ။ ပြီးသွားတော့ သတိပြန်ဝင်လာသည်။ အနောက်နားမှ ဖြတ်လျှောက်သွားသည့် ခြေ သံ ကြားလိုက်ရသလို။ စိတ်ထဲ စနောင့်စနင်းဖြစ်သဖြင့် အန်တီလေးများလားဟု သူ့အခန်းဘက်ကို ကြည့် လိုက်သည်။ မဟုတ်နိုင်။ ဒါနဲ့ ကမန်းကတန်း အိဖြူအခန်းဘက် ကြည့်လိုက်သည်။ ဟား.. အိဖြူ မရှိတော့။ ဒါဆို သေချာပြီ။ အိဖြူပဲ။ မြင်များ မြင်သွားသလားမသိ ဆိုသည့် စိုးရိမ်စိတ် မွှန်တက်လာသည်။ အိဖြူအခန်းကို လည်း ရဲရဲ မချောင်းရဲတော့။ တော်ကြာ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်တက်လာလျှင် ခက်တော့မည်။
အိဖြူ စာကျက်နေရင်း ယခင်နှစ်က စာအုပ်တစ်အုပ် ရှာချင်တော့ အပေါ်ထပ် တက်သွားလိုက်သည်။ ကိုကို့အခန်းရှေ့အရောက် ကိုကို့ကို နှုတ်ဆက်မလို့ တံခါးခေါက်မည်အလုပ် တံခါးက ဟနေသဖြင့် မခေါက် တော့ဘဲ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ကိုကို့ရှေ့မှာ စာအုပ်တစ်အုပ်တော့ ဖွင့်ထားသည်။ ကိုကို လက်က ဘာလုပ်နေသည်မသိ။ တလှုပ်လှုပ်နှင့် ပေါင်ကြားထဲထည့်ကာ လှုပ်နေသည်။ ကိုကို့နှုတ်မှ ထွက်လာသည့် စကားက သူမနာမည်ပါလာတော့ အံ့သြသွားရသည်။ ဟင်… ကိုကို အိဖြူကို မှန်းပြီး အာသာဖြေနေတာပဲ…
အိဖြူ လိုချင်သည့်စာအုပ်ပင် မယူဖြစ်တော့။ ကမန်းကတန်းပြန်ဆင်းကာ အပေါ့သွားပြီး ရင်တဖိုဖိုနှင့် အခန်းထဲသာ ပြန်ဝင်လိုက်ရသည်။ သူမလည်း အတွေ့အကြုံရှိပါသည်။ ယောက်ျားနှင့် အတွေ့အကြုံတော့ မဟုတ်။ အမ်ပီဖိုးထဲတွင် အပြာကားထည့်ကာ သူမသူငယ်ချင်းတွေပြသဖြင့် ကြည့်ဖူးသည်။ လက်နှင့်အာသာ ဖြေရသည်ကိုလည်း သိသည်။ တစ်ခါတရံတော့ လက်နှင့် အာသာဖြေမိသည်။ အမြဲတမ်း မလုပ်ဖြစ်။ ဒီတစ်ည တော့ ကိုကိုက သူမအပေါ် မရိုးသည့်စိတ်တွေ ၀င်နေသည်ဆိုတာ သိသွားကာ ကာမစိတ်တွေ နိုးကြားလာမိ သည်။
အင်း မွေးရာပါလယ်ကွက်ကလေးတော့ ထွန်လိုက်အုံးမှပါ(ကျွန်တော်၏အာဘော်) ဟု စဉ်းစားမိသည်။ ဒီ တစ်ညတော့ ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်နေသည်။ ဘေးတစောင်းလေး စောင်းလိုက်ကာ လက်ကို ပေါင်ကြားထဲ ထည့် အာသာဖြေမိသည်။ လူမိသွားမှာ ကြောက်သည့်စိတ်ကြောင့် ပက်လက်တော့ မလုပ်ရဲ။ ကောင်းလာတော့ လည်း သိပ်မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့။ ခြေမတွေ ကုပ်ကွေးလာကာ အသံထွက်ညည်းမိပြီး ဆန့်ကနဲဖြစ်ကာ ပြီးသွား ရတော့သည်။ တစ်ခါတလေတော့လဲ ခြေပစ်လက်ပစ် အရသာအပြည့် ခံစားကြည့်ချင်သည်။ သို့သော် တစ် ယောက်ယောက် မမြင်နိုင်သည်မှန်း သိပါလျှက် ကြောက်နေမိသောကြောင့် သိုသိုသိပ်သိပ်သာ လုပ်မိသည်။
တစ်ယောက်ယောက် မမြင်နိုင်ဘူးဟု ထင်ရသော်လည်း သူမကို မြင်နိုင်သည့် အေးမောင်ရှိနေသည် ဆိုတာကိုတော့ မသိသေးချေ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်သည့် အိဖြူသည် အေးမောင် သူမ နာမည်ခေါ်ကာ အာသာဖြေနေသည်ကို သိရှိကြောင်း အေးမောင်ကို ပြောပြလိုသည်။ သို့သော် ရှက်လည်း ရှက်သည်။ တစ်ရက်တွင်တော့ ကျူရှင်သွားရင်း ပြောမိလိုက်သည်….
ကိုကို… ညီမလေးကို ဘယ်လိုမြင်လဲဟင်….
ဘယ်လိုမြင်ရမှလဲ ညီမလေးရဲ့…. ကိုကို့ညီမလေးလို မြင်တာပေ့ါ…
ဟုတ်ပါဘူး…ကိုကိုရာ… မညာပါနဲ့…. အဲလို ဟုတ်လို့လား….
အဲဒါဆို….. ဟိုတနေ့ညက…. ဘာလို့…. ညီမလေးနာမည်ခေါ်ပြီး…. ဟိုဟာ..လုပ်နေတာလဲ(လေသံတိုးတိုး ဖြင့်)
အဲ….. ဟို….. အဲဒါက…..
ဟင်းနော်…. ကိုကို….. ညီမလေးကို.. လာပြစ်မှားနေတယ်….
ကဲ…. အဲဒါဆို…. ညီမလေးကရော…. ကိုကို့ကို မှန်းပြီး….. ဘာလို့…. ဟွာ လုပ်တာလဲ….
အဲဒါက…. ဟာ… ကိုကိုကွာ…. မကောင်းဘူး….
ည ကျူရှင်ပြန်ရောက်တော့ အိဖြူကို အေးမောင် သူ့အခန်းထဲခေါ်ကာ အိဖြူကို ချောင်းနေကျ အပေါက်ကို ပြလိုက်သည်။ မထူးတော့ပြီ။ သိသွားမှတော့ လိမ်နေစရာ မလိုတော့။ အိဖြူကလည်း စိတ်ဆိုးပုံ မပေါ်တာ ပါသည်။
ထိုညမှ စကာ အိဖြူက ညတိုင်း အာသာဖြေဖြစ်တော့သည်။ အရင်လို ကွေးကွေးလေး ဘေးတစောင်း မလုပ်ဖြစ်တော့။ ကိုကို ကြည့်ကာ အာသာဖြေနေမှန်း သိသဖြင့် ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပစ်ကာ စိမ်ပြေနပြေ အာသာ ဖြေသည်။ ကြည့်ခံနေရသည်ကို သိတော့ ပိုပြီး ဖီးလ်လာသည်။ သူမကတော့ သူမကို ချောင်းနေသည် ဆိုတာ ကိုကိုအေးမောင် ၀န်ခံထားသဖြင့် စိတ်မပူတော့။ တစ်ခါတစ်ခါ ပြောင်ပြသေးသည်။ လက်နှစ်ချောင်းထောင် ပြ လိုက်၊ သူမ ဖုတ်ဖုတ်ကလေးကို ပွတ်ကာ ဖီးလ်လာသည်ပုံ လုပ်ပြလိုက် လုပ်နေသေးသည်။ ဆယ်တန်း တစ်နှစ် ကျထားသော်လည်း ကလေးစိတ်မကုန်သေးသည့် ဟန်လေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းသလို ရမ္မက်ကြွဖွယ် လည်း ကောင်းလှသည်။ အေးမောင်က သူမကိုသာမက သူမအမေကိုလည်း ချောင်းနေသည်ကိုတော့ မသိရှာ ပေ။
အေးမောင်က ကိုးတန်းဖြစ်သဖြင့် အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်သော်လည်း အိဖြူက ဆယ်တန်း ဖြစ်ရာ ပထမအစမ်းစာမေးပွဲနီးတော့ အချိန်ပို ဆက်တိုက် တက်ရသည်။ အေးမောင် ကျောင်းပိတ်လည်း သူမကတော့ မပိတ်ချေ။ အေးမောင်က သူမကို ကျောင်းပို့ပြီးသည်နှင့် အိမ်ပြန်လာရသည်။ ညနေမှ တစ်ခေါက် သွားကြို ရသည်။ ညကျူရှင်ကျတော့လည်း အေးမောင်က ခုနစ်နာရီဆို ပြီးပြီ။ အိဖြူက ဆယ့်တစ်နာရီအထိ ကျူရှင်မှာ စာကျက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် အေးမောင် ဆယ့်တစ်နာရီထိုးမှ တစ်ခေါက်သွားကြိုရသည်။
အေးမောင် ကံကောင်းသည်။ ညစဉ်ပင် အန်တီလေးကို တစ်ခေါက်၊ အိဖြူကို တစ်ခေါက် ကြည့်နိုင် သည်။ နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း အေးမောင်ကြည့်နေသည်ကို သိနေကြသည်သာ။ အိဖြူက တရားဝင်ပင် ၀န်ခံထားသောကြောင့် သိသည်။ အန်တီလေးက မသိချင်ယောင်ဆောင်သော်လည်း သိသည်။ သိကြသဖြင့် လည်း ကိုယ်စီအာသာဖြေနေခြင်းဖြစ်သည်။ အန်တီလေးက အေးမောင် အခန်းပေါ်တက်သွားသည်နှင့် လုပ် ငန်းစသည်။ ပြီးသွားသည်နှင့် စောစောအိပ်လိုက်သည်။
အေးမောင် စာကျက်ပြီးချိန်တွင် အိဖြူအခန်းသို့ ကြည့် လိုက်သည်။ အိဖြူကလည်း ထိုအချိန်လောက်ကို မှန်းပြီး လုပ်ငန်းစသည်။ အေးမောင်နှင့် အိဖြူ အချိန်းအချက် မလုပ်ထားသော်လည်း အိဖြူက အချိန်ဇယားနှင့် စာကျက်သူဖြစ်ရာ ဆယ်နာရီဆို ပြီးပြီဆိုတာ အေးမောင် သိသည်။ တခါတရံ သူမ စာမရသေးလျှင်လည်း လက်ခါပြလိုက်သည်။ ဒါဆိုရင်တော့ အေးမောင် စောင့်နိုင်ရင် စောင့်၊ မစောင့်နိုင်ရင် အိပ်ပေတော့ပေ့ါ။ အေးမောင် သတိတော့ ထားလိုက်ရသည်။ တံခါးကို သေသေချာချာ ဂျက်ထိုးရသည်။ အိဖြူနှင့် မိသွားတာ အရေးမကြီး၊ အန်တီလေးနှင့် မိသွားလျှင် ဘာဖြစ်လာမည် မပြောနိုင်။
အိဖြူ စာတွေနှင့် လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတော့ ဟိုစိတ်ဒီစိတ်တွေလည်း နည်းနေပြီထင်သည်။ အရင်လို အာသာဖြေတာတွေ ဇောင်းတိုက်တာတွေ မတွေ့ရတော့။ အိဖြူကိုယ်တိုင်ကလည်း စာတွေ များသည် ဟု ညည်းသည်။ အိဖြူ အိမ်သိပ်မကပ်ဖြစ်တော့ဘဲ အေးမောင်က အိမ်မြဲနေတော့ အန်တီလေး လျှို့ဝှက် အကြံ အစည်တစ်ခု ကြံစည်ရသည်။ အေးမောင် သူမကို ကြိတ်ပြီး ပြစ်မှားနေသည်ကိုလည်း သိသည်။ သို့သော် လာ ငါ့ကိုတက်လုပ်စမ်းကွာဟု ခိုင်းရအောင်ကလည်း မဟုတ်သေး။ သို့သော် အန်တီလေး တော်တော် ခံချင်စိတ် တွေ ပြင်းပြနေသည်။ သို့နှင့် အိဖြူ အချိန်ပိုတက်နေသော ဒီဇင်ဘာ ကျောင်းပိတ်ရက်တွင် …..
အန်တီလေး. အကြောတွေ တက်နေလို့ နင်းပေးပါလား…..
လာ…. အန်တီလေးအခန်းထဲမှာ…. ၀င်နင်းပေး…. အပြင်မှာဆို…. လူမြင်မကောင်းဘူး…..
အေးမောင် အန်တီလေး အခန်းထဲသို့ ၀င်လိုက်သွားသည်။ အန်တီလေးက အိမ်နေရင်း လက်ပြတ် ဂါဝန်ပွပွကို ၀တ် ထားသည်။ ပထမတော့ ခုတင်ပေါ်က တန်းကို ကိုင်ပြီး ခြေသလုံး၊ ထိုမှ ပေါင်အထိ နင်းပေးသည်။ ပေါင် လယ်လောက် ရောက်တွင် အန်တီလေးက ခဏဆင်းခိုင်းကာ မှောက်ပေးသည်။ ခြေသလုံးမှ ပေါင်ရင်းအထိ နင်းပေးရပြန်သည်။ တင်ပါးဆုံအရင်းနားအထိ ရောက်သွားတော့ အိစက်နေသည့် တင်ပါး အောက်ပိုင်း၏ အထိ အတွေ့ကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားလာသည်။ ငယ်ပါက တင်းမာလာသောလည်း အောက်ခံဘောင်းဘီ ပါသော ကြောင့်သာ ထောင်ထမလာခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ပက်လက်ပြန်လှန်ပြီး အပူထုတ်ပေးအုံး ဆိုသဖြင့် ပေါင်ရင်း သွေးလွှတ်ကြောကို ခြေဖျားလေးနှင့် ဖွဖွလေး ဖိပေးထားရသည်။ တီလေး၏ အဖုတ်နှင့် အနီးဆုံးနေရာကို ထိတွေ့နေရရာ အဖုတ် ၏ ဘေးနှုတ်ခမ်းသားများကိုပင် ထိနေသဖြင့် စိတ်အလွန် လှုပ်ရှားလာကာ အာခေါင်တွေပင် ခြောက်လာသည်။ ထိုညကတော့ နင်းပေးပြီးတော့ အေးမောင် အိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွားခဲ့ရသည်။ ညနေ အိဖြူကို ကျောင်းမှသွား ကြိုကာ ကျူရှင်ပို့ပေးရသည်။ အေးမောင် အိဖြူကို စာကြိုးစားရန်၊ ကျန်တဲ့စိတ်တွေ ဘာမှမထားရန် စေတနာ အရင်းဖြင့် အားပေးမိသည်။ အိဖြူကလည်း ခေါင်းလေး ငြိမ့်ပြသည်။
အိဖြူ ကျူရှင်ပြန်သွားပို့ပြီး ပြန်လာတော့ အေးမောင် ရေချိုးကာ အန်တီလေးနှင့်အတူ ထမင်းစား သည်။ ကျောင်းပိတ်ထားသဖြင့် အေးမောင် စာလဲ မကျက်ဖြစ်တော့ပါ။ ထမင်းစားပြီး ခဏကြာတော့ အန်တီ လေးက နှိပ်ပေးဖို့ပြောသဖြင့် အေးမောင် အိပ်ခန်းထဲ လိုက်သွားသည်။
ဖိုးသား…. မနက်က နင်းတာ…. အကြောတွေ တော်တော်ပြေတယ် သိလား…. ဒါပေမဲ့…. အသားတွေ…. နာတယ်…
ဟုတ်ကဲ့… အန်တီလေး…. နှိပ်ပေးမယ်လေ….
အန်တီလေးက ပက်လက်လှန်ပေးကာ အေးမောင်က ခြေသလုံးကနေ စနှိပ်သည်။ ခြေသလုံးမှ ဒူးဆစ်၊ ဒူးဆစ်မှ.. ပေါင်လယ်…. ထိုမှ ပေါင်ရင်းရောက်ကာနီးတွင် အေးမောင် စိတ်တွေ ကရောက်ကယက် ဖြစ်လာ သည်။ အန်တီလေးက မှောက်ပေးလိုက်မှ နည်းနည်း ရင်အေးသွားသည်။ သို့သော်လည်း တင်ပါးနား ရောက်ကာ နီးတော့ မျက်လုံးက တင်ပါးကနေ မခွာနိုင်တော။ အန်တီလေးက အေးမောင်ကို တစ်ချက် လှမ်း ကြည့်လိုက်သည်။
ဖိုးသားလေး…. အန်တီလေး ဖင်ကိုကြည့်ပြီး…. ပြစ်မှားနေတယ်… ဟုတ်.
အန်…. ဟုတ်ပါဘူး…. အန်တီလေးရဲ့….
ဟွန့်…. ဟုတ်သာမဟုတ်တယ်…. မျက်လုံးက… အဲဒီနားမှာချည်းပဲ….
အဲ… မနေနဲ့… ဟွန့်… အခန်းထဲမှာလဲ လူပျိုနံ့တွေကို မွှန်နေတာပဲ…
အာ… ဟုတ်ပါဘူး အန်တီလေးရဲ့….
ဘာ… မဟုတ်ရမှာလည်း…. ပြီး ကြမ်းပြင်ကို အပေါက်က ဖောက်ထားသေးတယ်…. ဖိုးသား တော်တော် ဆိုးနေပြီ… ဟင်း…
ဟို…. အဲ… ဟိုဒင်း…
ကဲ…. ဆရာလေး…. ၀န်ခံလိုက်ရင် အကျိုးရှိမယ်…. ၀န်မခံရင်တော့….
ဟုတ်…. အန်တီလေး…. သား မှားပါတယ်….
ဖိုးသား…မှားတယ်လို့…. အန်တီလေး.. မပြောပါဘူးရှင်။
ဖိုးသားက အခုမှ လူပျိုပေါက်အရွယ်လေးပဲ ရှိသေးတာ…. ဒါတွေ လုပ်တာ သဘာဝပဲလေ…
ဖိုးသားက… အန်တီလေးကို… ဘယ်အချိန်ကစပြီး ပြစ်မှားနေတာပါလိမ့်….
ဟို…. ဟိုတခါ… အန်တီလေးကို လာနှိုးတုန်းက….
ဟိုး… ဆရာ… ရပြီ ရပြီ… အဲဒါမြင်ပြီး နေ့တိုင်း လက်ဆော့နေတယ်ပေါ့လေ…
ဟုတ်…အန်တီလေးကို ညဘက်ချောင်းကြည့်တော့ … ဖိုးသား…. ဘာတွေတွေ့လို့လဲ….ဟို… အန်တီလေး…. ညအိပ်ကာနီးရင်…. ဟိုဒင်းကို ပွတ်တာတွေ့တယ်…. ပြီးတော့…. အကုန်မြင်ရတယ်….ဖိုးသားလဲ စိတ်တွေ ထလာရင် အဲလို…. လုပ်တယ်… မို့လား။ အန်တီလေးလဲ…. လုပ်တာပေါ့….. ဖိုးသား…. အန်တီလေးဟာကို ကိုင်ကြည့်ချင်လို့လား…..ဟို…. အဲ….အင်းပါ…. မကိုင်ချင်လဲ နေပါတော့….ဟို…. ဟုတ်ဘူး…. ကိုင်ချင်တယ်…. အဲဒါ … ပြောမလို့….အင်း… ဒါဆို… ကတိတစ်ခုပေး…. ကတိပေးရင်…. ဖိုးသားဖြစ်ချင်တာ အကုန်ဖြစ်ရမယ်….ဟုတ်ကဲ့အန်တီလေး… သား ကတိပေးပါ့မယ်….ဖိုးသားကို အခု နင်းနှိပ်ခိုင်းတာက စပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမှ မသိအောင် နေရမယ်၊ ပြန်မပြောရဘူး၊ ပြီးတော့ အဓိက မင်းညီမလေး အိဖြူ မသိအောင် နေရမယ်… တီလေး မခေါ်ဘဲနဲ့ မလာရဘူး…. အရင်လိုပဲ.. ခပ်တည်တည်… နေရမယ်နော်….ဟုတ်…ကဲ ကတိတကယ်ပေးလား… ကတိဖျက်ရင်…. ရွာပြန်လွှတ်မှာနော်…. ဖိုးသားအမေနဲ့လည်း တိုင်ပြောမှာ….အင်းပါ… မဖျက်ပါဘူး….ကဲ… အဲဒါဆို ပြီးတာပဲ…. သွား… ဟိုမှာ တံခါး ဂျက်ချထားသလား မထားသလား အရင်ကြည့်….ဂျက်ချထားတယ်….တီလေး….ကဲ… ကိုယ်တော်လေး…. ဒီဘက်ကို…ကြွအန်တီလေး သူမ၏ လက်ယာဘက်သို့ အေးမောင်အား ရွှေ့ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။ကဲ ပေါင်ကို အရင်ဖွဖွလေး နှိပ်ပေး…. အပေါ်ကို ကျော်မတက်နဲ့အုံး….ရပြီ… အပေါ်နဲနဲတက်…ရပြီ…. ထပ်တက်အုံး….အန်တီလေး၏ အမိန့်နှင့်အတူ လက်က တဖြည်းဖြည်း ပေါင်ရင်းကို ရောက်လာသည်….အင်း…. အပေါ်ကို ဆက်မတက်နဲ့… ရှေ့နားကို တိုးပြီးနှိပ်လိုက်….ရှေ့တိုးလိုက်တော့ အန်တီလေး၏ အဖုတ် နှုတ်ခမ်းသား လုံးလုံးမို့မို့ပေါ်ရောက်သွားသည်။အင်းဟင်း… ဟုတ်ပြီ… အဲဒီနားကိုပွတ်ပေး….ထိုနှုတ်ခမ်းသားလေးကို ရွရွလေးပွတ်ပေးရာ တစ်ချက်တစ်ချက် အလယ်မြောင်းကို သွားသွားထိသည်။ တစ်ချက်တွင်တော့ အန်တီလေးကိုယ်တိုင် အေးမောင်၏ ညာလက်ကို ကိုင်ကာ အဖုတ်ကို တည့်တည့် အုပ်ကိုင်ခိုင်းသည်။ ထို့နောက် လက်ခလယ်နှင့် အမြောင်းလေးအတိုင်း သာသာယာယာ အထက်အောက် ပွတ် ခိုင်းသည်။အင်း…အင်း… ဟင့်…. ဟုတ်တယ်… ဖိုးသား…အဲဒီအတိုင်း ဖြည်းဖြည်းချင်းပွတ်…. အင်း… ဟုတ်ပြီ… ကောင်း တယ်…. အား… ရှီး…. မြန်မြန်လေး ပွတ်တော့…. တီလေး ပြီးတော့မယ်…. ဟာ့…. အား….. အမေ့…. ရှီး…. ပြီးပြီ….အာ့…..အန်တီလေး ပါးစပ်မှ သံစုံညည်းသံတွေ ထွက်လာကာ ကော့ပျံလာပြီး သူမ၏ ဂါဝန်ပေါ်တွင် အဖုတ်မြောင်းအတိုင်း အရည်တွေ စိုလာတော့သည်။ ထို့နောက် ငြိမ်ကျသွားတော့သည်။ကဲ… ဖိုးသား… ဒီလောက်ဆို… ရပြီ…. နောက်နေ့မှ…. နောက်တစ်မျိုးပေါ့…. သွားကြိုတော့… ညီမလေးကို..အေးမောင် အိဖြူကို သွားကြိုခဲ့သည်။ ထို့နောက် အပေါ်ရောက်တော့ အန်တီလေး အိပ်ခန်းဘက်ဆီသို့ ချောင်းကြည့်သည်။ အန်တီလေးက ရှူးတိုးတိုး ဆိုသည့်ပုံစံလေး လုပ်ပြသည်။ ထို့နောက် သူမဘာသာ တစ်ခါ ကိုယ်တုန်းလုံးတီးဖြင့် လုပ်ပြသည်။ တီလေးပြီးသွားတော့ အေးမောင်လည်း အိပ်လိုက်ရတော့သည်။ အိဖြူကို အခုတလော အေးမောင် ချောင်းချင်စိတ်သိပ်မရှိ။ အိဖြူ စာတွေများပြီး ပင်ပန်းနေသဖြင့် အ၀တ်ပင် မလဲတော့ဘဲ အိပ်သွားတာကို သနားတာလည်းပါသည်။ အန်တီလေးနှင့် အဆင်ပြေနေတာလည်း ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့ညတွင်တော့ အေးမောင်ကို တီလေး ဘာမှ မပြောတော့။ အသာလေးသာ သူမအခန်း ထဲ ခေါ်သွင်းသွားသည်။ ဒီည နောက်တစ်မျိုးဟုတော့ ပြောထားတာ ရှိသည်။ ဘာလဲတော့မသိ။ဖိုးသား…. မနေ့ကလိုပဲ…. လုပ်အုံးမလား…. ဖိုးသား ဘယ်လို လုပ်ပေးချင်လဲ ပြောကြည့်ကြည့်….အန်တီလေး…. သား အန်တီလေးကို…. ဟိုဟာ လုပ်ချင်တာ…ဘာလဲ…. လိုးချင်တာလား…တစ်တစ်ခွခွ အန်တီလေးစကားကြောင့် အေးမောင် ဖျင်းကနဲပင် ဖြစ်သွားရသည်။ဟုတ်ကဲ့… အန်တီလေး….မလိုးနဲ့အုံး…. အန်တီလေး…. ဆေးမထိုးရသေးဘူး…. ဆေးထိုးပြီးမှ… စိတ်ချရမှာ…. ဗိုက်ကြီးမှာစိုးလို့နော်….ဟုတ်ကဲ့… အန်တီလေး….လက်နဲ့ပဲ လုပ်အုံး….. လက်နဲ့ ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ချင်သေးလဲ….အန်တီလေးဟာကို မမြင်ရဘူးလေ…. အဲဒါကို လှန်ပြီး ပွတ်ပေးချင်တာ…..အောင်မယ်လေး…. လူလည်လေး…. သူ့စိတ်ကူးထဲကအတိုင်းသာ အကုန်ဖြစ်ရရင်…. မတွေးဝံ့စရာ… ကဲ… ဆရာ… အဲဒါဆို… အန်တီလေးအ၀တ်တွေ… ကိုယ့်ဘာသာ ချွတ်တော့….အန်တီလေးက လက်ကို မြှောက်ပေးသည်။ ထို့နောက် မတ်တပ်ရပ်ပေးသည်။ အေးမောင် အန်တီလေး၏ ဂါဝန် ကို အောက်ခြေမှ မတင်ကာ ခေါင်းမှ ချွတ်ပစ်လိုက်တော့ အန်တီလေး မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ဖြစ်သွားသည်။ အန်တီလေး ကုတင်ပေါ် ပြန်လှဲကာ ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ ပေါင်ကိုလည်း ကားပေးထားသည်။ အေးမောင် က အဖုတ်ကို ကိုင်မည်ပြုတော့.ဟာ…. ဖိုးသားကလည်း…. အဲဒါကို အရင်သွားမကိုင်နဲ့လေ…. မနေ့ကလို နည်းနည်းပါးပါး ပွတ်အုံး သပ်အုံး.. မှပေါ့….ဟီး…အေးမောင် တစ်ချက် ရယ်ပြလိုက်ကာ လက်က ပေါင်ကို ပြန်ပွတ်လိုက်ရသည်။ပေါင်ရင်းနားရောက်ကာနီးတွင်….ဖိုးသား…. နို့စို့ချင်လား….အင်း….လာ… အဲဒါကို မပွတ်နဲ့အုံး….. ဒါကို အရင်လုပ်….သူမ နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်စေကာ ပွတ်သပ်နယ်ခိုင်ပြီး ပါးစပ်ဖြင့် စို့ခိုင်းသည်။အင်း…. ကောင်းတယ်…. ဖွဖွလေး စို့…. ဖိုးသားရဲ့….လက်က… ဗိုက်ကို ပွတ်ပေး….အန်တီလေး၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဖိုးသား နို့နှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီ စို့နေရင်း လက်က ဗိုက်သားပြင်ကို ပွတ်ပေး နေမိသည်။ ထို့နောက် အမိန့်ပင် မစောင့်တော့ဘဲ ဗိုက်မှ တဆင့် ဆီးခုံကိုရောက်ကာ အမွှေးများကို ဖွပေး နေသည်။ ထို့နောက် အဓိကနေရာကို သိမ်းပိုက်လိုက်တော့သည်။ အန်တီလေးလဲ ဘာမှ မပြောတော့ပေ။ မနေ့ကလိုပင် စုန်ချည်ဆန်ခြည် လှုပ်ရှားပေးရာ အရည်များ တစိုစိုနှင့် အန်တီလေး တစ်ချီပြီးသွားသည်။ သို့ သော် အေးမောင် ပြန်မရုပ်မိ။ သူက အထဲကို နည်းနည်းနှိုက်ကြည့်ချင်သေးသည်။ လက်တစ်ဆစ်လောက် ၀င်သွားတော့..ဖိုးသား… အထဲကို နှိုက်ချင်လို့လား… ဒီလို့လေးလုပ်ပေး….အန်တီလေးက နည်းလမ်းပြပေးသည်။ လက်မကို အစေ့လေးပေါ်တင်ကာ လက်ခလယ်ကို အထဲသို့ နှိုက် စေသည်။ ထို့နောက် သူမကိုယ်တိုင် လက်ကို ကိုင်ကာ အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးသည်။ လက်ခလယ်က ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်နေချိန်တွင် လက်မက အစေ့ကို ပွတ်နေသည်။အား…. ဖိုးသား…. ပြီးတော့မယ်ထင်တယ်… မရပ်နဲ့…. အန်တီလေးပြီးကာနီးပြီ…. အား…. ပြီးပြီ…. အား… ရှီး…. ကောင်းလိုက်တာ… အင်း..ဟင်း… ဟင့်.. အန်တီလေး ဒီတစ်ကြိမ် ပြီးသွားတာ ပိုပြင်းသည်။ အထဲက လက်ကို ပြန်ဆွဲထုတ်လို့ မရအောင်ပင် ညှပ်ထားကာ အရည်တွေကလည်း အများကြီး ယိုစီးထွက်လာသည်။ ထို့နောက် အန်တီလေးလည်း တစ်ကိုယ် လုံး ပျော့ခွေသွားကာ ခဏ အမောဖြေနေရသည်။ကောင်းတယ်…. ဖိုးသားရယ်…. တကယ်ပဲ….. ဖိုးသားကိုလည်း ကောင်းအောင် လုပ်ပေးချင်တယ်…. ဒီနား တိုး… အေးမောင် သူမ ပြသည့်နေရာကို တိုးသွားလိုက်သည်။ သူမဘယ်ဘက်ဘေးမှာ ဘေးချင်းယှဉ်ထိုင် လိုက်သည်။ အန်တီလေး ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် အေးမောင် ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်သည်။ ပုဆိုးပြေကျသွားတော့ အောက်ခံဘောင်းဘီကို ဖောက်ထွက်မတတ် တင်းမာနေသော ငယ်ပါကို တွေ့လိုက်ရ သည်။အာ… ဖိုးသား… ဘောင်းဘီ ချွတ်လိုက်လေ…. အေးမောင် ဘောင်းဘီ ချွတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ခုနနားကို ပြန်သွားထိုင်သည်။ အန်တီလေးက အေးမောင် ဒုတ်ကို ဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်ကာ ကွင်းတိုက်ပေးသည်။ ကိုယ်တုန်းလုံး ချွတ်ကာ သူကိုယ်တိုင် ပယ်ပယ်နယ်နယ် နှိုက်ပေးပွတ်ပေးခဲ့သော အန်တီလေးက လက်ဝါးနုနုဖြင့် ဂွင်းတိုက်ပေးရာ အေးမောင် ကြာကြာ မထိန်းနိုင်။ အန်တီလေး လက်ထဲ သုက်ရည်တွေ ထွက်သွားသည်။အာ…. ဖိုးသားက…. စိတ်တွေ တအားထန်နေတာကိုး….. ပြီးသွားပြီပေါ့….. ခဏနားလိုက်…. ပြီးရင် ရေချိုး ခန်းထဲသွားပြီး ဆပ်ပြာနဲ့ ရေသွားဆေးလာခဲ့….အန်တီလေး သူ့ကို ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်ရပေမဲ့ ရွံပုံတော့ ရသည်။ အဲဒါနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲသွားပြီး ရေသွားဆေး လိုက်သည်။ အချိန်ကို ကြည့်တော့လည်း ကိုးနာရီသာ ရှိသေးသည်။ အိဖြူကို သွားကြိုရမည့် အချိန် မရောက် သေး။ အန်တီလေးအခန်းထဲ ရောက်တော့ ပုဆိုးပြန်ချွတ်ကာ သွားထိုင်သည်။ အန်တီလေးက သူ့ကို ကုတင် ပေါ် ပက်လက်လှန်အိပ်ခိုင်းသည်။ ထို့နောက် သူ့လီးကို ပြန်ထလာအောင် ဆွပေးလိုက်ရာ ချက်ချင်းလိုလိုပင် အဆင်သင့်အနေအထား ဖြစ်သွားသည်။ ထို့နောက် ဂွင်းတိုက်ပေးသည်။ ခုနက ပြီးထားသဖြင့် နောက်တစ်ချီ တော်တော်နှင့် မပြီးပေ။ ပြီးချင်စိတ်လည်း ပေါ်မလာသေး။ အန်တီလေး လက်အရသာကိုသာ ဇိမ်ခံနေလိုက် သည်။ အန်တီလေးက မျက်လုံး မှိတ်ထားခိုင်းသဖြင့် မှိတ်လိုက်သည်။မကြာမီပင် တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသည့် အရ သာကို ခံစားလိုက်ရသည်။ မျက်လုံးကို ယောင်ကာ ပိုတင်းတင်းပင် စေ့လိုက်သည်။ အံပါကြိတ်မိသည်။ တင်ပါး ကြောတွေပါ ရှုံ့သွားလောက်အောင် ကောင်းနေသည်။ ငယ်ပါက ပူနွေးစွတ်စိုသည့် အပေါက်တစ်ခုထဲသို့ ၀င် သွားသည်။ တီလေး အဖုတ်ထဲကို ရောက်သွားတာ မဖြစ်နိုင်။ သူ့ငယ်ပါက အကြီးတန်းစားကြီး မဟုတ်စေကာ မူ ယောက်ျား တစ်ယောက် ရှိသင့်ရှိအပ်သည့် အတိုင်းအတာလောက် ပြည့်ဝသည်ပဲ။ အခုက ကြပ်ကြပ်တည်း တည်း မဟုတ်လှ။ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မိတော့….အန်တီလေးက သူ့ငယ်ပါကို ပါးစပ်နှင့် ငုံထားခြင်းပင်….အားလည်း အားနာသွားသည်။ဟာ…. အန်တီလေး….ရှူး….. တိုးတိုး…. ဖိုးသား စကားမပြောနဲ့…. ငြိမ်ငြိမ်နေ….အန်တီလေးက ငုံထားရာမှ ခေါင်းကို ငုံ့လိုက် ကြွလိုက်လုပ်ရာ ငယ်ပါတစ်ချောင်းလုံး ၀င်လိုက် ထွက်လိုက် ဖြစ် နေသည်။ အရသာကလည်း ကောင်းလွန်းနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကျင်တက်လာသည်။ ပြီးတော့မည်။အန်တီလေး….တီလေး….. ပြီးတော့မယ်…..အန်တီလေးခေါင်းကို တွန်းလိုက်သော်လည်း အန်တီလေးက လက်ကို ပြန်ဖယ်ချလိုက်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက် စုပ်ယူလိုက်သည်။ ဘယ်လိုမှ ထိန်းမထားနိုင်တော့။ စိတ်အကုန် လွတ်ထွက်သွားပြီ။ သုက်ရည်များ အန်တီလေး ပါးစပ်ထဲသို့ တထုတ်ထုတ်နှင့် ပန်းထွက်သွားသည်။ အန်တီလေးက အဲဒါတွေ အကုန် စုပ်ယူကာ ဒစ်တစ်ဝိုက်ကိုပင် ပြောင်စင်အောင် လျှာနှင့် လျက်ပေးပြီး မျိုချပစ်လိုက်သည်။ အားနာလိုက်သည့်ဖြစ်ချင်း။အန်တီလေးကလည်း…. ဘာလို မျိုချလိုက်တာလဲ….ထွေးလိုက်ပေါ့….. မရွံဘူးလား…..မရွံပါဘူး….. မျိုချလိုက်တာက ဖိုးသားအရသာပျက်မှာစိုးလို့လေ…. မကြိုက်လို့လား….ဟုတ်ပါဘူး…. ကြိုက်တော့ ကြိုက်တာပေါ့…. အားနာလို့…..အားမနာနဲ့….. တီလေးကိုရော ဖိုးသား ရွံလား…..အေးမောင် ခေါင်းကိုသာ ခါလိုက်ရသည်။ တကယ်တော့ ဘယ်လိုအရသာရှိတယ်ဆိုတာ မသိသေးပါ။ သို့သော် သူကိုယ်တိုင်ပင် မစမ်းသပ်ကြည့်ဖူးသည့် သူ၏ သုက်ရည်များကို အန်တီလေးက မျိုချလိုက်ပြီ။ အန်တီလေး ဆီက ဘယ်လိုအရသာပဲ ရှိရှိ မရွံတော့ပါ။အန်တီလေး အခန်းထဲမှ ထွက်သွားကာ သူမ၏ အဖုတ်ကို ရေသွားဆေးသည်။ အခန်းထဲ ပြန်ရောက်တော့ အေးမောင် ဘယ်လိုမှ သင်ပေးစရာမလိုတော့ပဲ အန်တီလေးပေါင်ကြားထဲ အလိုလို နေရာယူလိုက်မိသည်။ ထို့ နောက် အန်တီလေး၏ အဖုတ် တစ်ခုလုံးကို လျှာနှင့် အနှံ့လျက်ပစ်လိုက်သည်။ ဘာအရသာမှတော့ မရှိ။အနံ့ ကတော့ နံသည်ဟုလည်း မဆိုသာ၊ မွှေးတာတော့ မဟုတ်တာသေချာသည်။ ထို့နောက် အကွဲကြောင်း တစ်လျှောက်ကို လျှက်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ လက်နှစ်ဖက်နှင့် ဖြဲကာ အတွင်းသားများကိုလည်း လျက်ပေး လိုက် သည်။ အန်တီလေးကတော့ တစ်ဟင့်ဟင့် နှင့် ညည်းကာ ခေါင်းကိုသာ ဘယ်ညာ ယမ်းနေသည်။ အစေ့လေး ကို လျှာဖျားနှင့် ထိုးမွှေပေးလိုက်သည်။ ဘယ်သူမှ သင်ပေးလို့တော့ မဟုတ်။ သူ့ဘာသာသူ စိတ်ကူးတည့်ရာ လုပ်ချင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အန်တီလေး၏ ညည်းညူသံများ ပိုမို ကျယ်လောင်လာသည်။ ထို့နောက် အား…. ဖိုးသား…. ပြီးတော့မယ်….. အီး….. ထိုအသံကြားသည်နှင့် အေးမောင် အဖုတ်တစ်ခုလုံးကို ငုံပစ်လိုက်ကာ ပါးနှစ်ဖက် ချိုင့်သည်အထိ တ အား စုပ်ယူပစ်လိုက်ပြီး လျှာကလည်း ခပ်သွက်သွက် ကစားပေးလိုက်သည်။ အန်တီလေး ဖင်ကြီးတစ်ခုလုံး ကော့တက်သွားကာ လေထဲတွင် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် လုပ်နေပြီး ဘုန်းကနဲ ပြန်ကျသွားသည်။ အား….. ကောင်းလိုက်တာ…. ဖိုးသားရယ်…..တီလေး…. တစ်ခါမှ ….. အဲလောက်…. မကောင်းဖူးဘူး… အန်တီလေး ကောင်းသွားသဖြင့် အေးမောင် ပျော်ပါသည်။ ကြာကြာ ပျော်ချိန်မရ။ အိဖြူကို သွားကြို ရ သေးသည်။ နောက်တစ်နေ့ညကျတော့ အန်တီလေး ဆေးတစ်လုံးနှင့် ဆေးထိုးအပ် တစ်ချောင်း ယူလာသည်။အန်တီလေး….. အဲဒါ…. ဘာဆေးလဲ…..အဲဒါ…. ဗိုက်မကြီးအောင်…. တားတဲ့ဆေးလေ….ဘယ်သူက ထိုးပေးမှာလဲ…..ဟင်…. ဖိုးသားပဲ… ထိုးပေးပေါ့…. ထိုးပုံထိုးနည်းပြမယ်…. လွယ်လွယ်လေး…..အန်တီလေးက အားလုံးချွတ်ပစ်လိုက်ကာ မှောက်လိုက်ပြီး တင်ပါး၏ အထက်ပိုင်း အပြင်ဘက်ခြမ်းကို လက်ပြန် ထောက်ပြသည်။ အေးမောင် တစ်ခါမှ မထိုးဖူးသော်လည်း အန်တီလေးပြသလို ထိုးပေးလိုက်ပြီး ပွတ်ချေပေး လိုက်သည်။အာ… ကျွတ်ကျွတ်…. နာနာလေးချေ ဖိုးသားရဲ့… ဆေးခဲသွားမယ်….ကဲ ကိုယ်တော်လေး…. စိတ်ရှိသလို လုပ်လို့ရပါပြီတော်….. တကယ်ဆို ဆေးထိုးပြီးပြီးချင်း စိတ်မချရဘူး…. ဒါပေမဲ့ ရက်လွတ်တယ်….ဘာလဲ…. တီလေးရဲ့…. ရက်လွတ်တယ်ဆိုတာ…. (အန်တီလေး သံယောင်လိုက်ကာ တီလေးဟု ပြောင်းခေါ် လိုက်သည်)တီလေးတို့… မိန်းကလေးတွေက… တစ်လတစ်ခါ… ရာသီလာရတယ်…. ဒီအထဲကနေ … သွေးဆင်းတာလေ…တစ်လမှာ ဆယ့်လေးရက်လောက်က စိတ်ချလက်ချ လုပ်ချင်တာ…. လုပ်လို့… ရတယ်…. ကျန်တဲ့ရက်တွေ… လုပ်ရင်…. ကိုယ်ဝန်ရတတ်တယ်…. ဆေးထိုးထားတော့ ဘယ်တော့လုပ်လုပ်… ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့….အင်း….ကဲ…. ကိုယ်တော်…. ဒီအတိုင်းလုပ်မလို့လား…. ချွတ်လေ….အေးမောင် သူ့အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်ကာ ခုတင်ခေါင်းရင်းတွင် ပုံလိုက်သည်…..လာ… ဒီနားကို….တီလေးက သူမဘေးနားတွင် ဘေးချင်းယှဉ် အိပ်ခိုင်းလိုက်ကာ အေးမောင်၏ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းသည်။ ထို့နောက် သူမ လျှာကို နှုတ်ခမ်းကြားသို့ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ အေးမောင်လည်း ပါးစပ်ဟလိုက်က သူမ လျှာ ကို စုပ်ယူလိုက်သည်။ ထို့နောက် တီလေးက စကားမပြောဘဲ လျှာလျှာချင်း သင်ကြားပေးရာ ခဏလေးနှင့် ကစ်ဆင် နည်းပညာ တတ်ကျွမ်းသွားရသည်။ ထို့နောက် အေးမောင် လက်ကို သူမ နို့များအား အကိုင်ခိုင်း သည်။ နမ်းနေရာမှ နို့များကို စို့ခိုင်းသည်။ အေးမောင်ကလည်း အထာပေါက်သည်။ ယခင်နေ့ကအတိုင်း ပွတ် သပ် ကိုင်တွယ်ကာ လက်ကို အဖုတ်ဆီကို ရောက်အောင် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပို့ကာ နှိုက်ပေးလိုက်သည်။ကဲ…. တီလေးလဲ…. အောက်က အရည်တွေရွှဲနစ်နေပြီ….. ဖိုးသား လိုးချင်နေပြီမဟုတ်လား….လာ….. ဒီနားကို…..အေးမောင်ကို သူမ၏ ပေါင်ကြားထဲတွင် နေရာယူခိုင်းသည်။ ထို့နောက် အေးမောင်၏ ငယ်ပါအား လက်ဖြင့် ကိုင်ပေးကာ သူမ၏ စောက်ဖုတ် အ၀သို့ တေ့ပေးလိုက်သည်။အင်း…. ဖိုးသား…. ဖြည်းဖြည်း ထိုးထည့်ကြည့်လေ…..အေးမောင် ဖိသွင်းကြည့်သည်… မ၀င်ချေ… ချော်ထွက်သွားကာ အပေါ်က အစေ့လေးကို ဒုတ်ကနဲ သွား တိုက်မိသည်….အာ့…. ဖိုးသား…. ချော်သွားပြီ….ပြန်တေ့ပေးကာ ထပ်သွင်းခိုင်းသည်။ ဒီတစ်ခါ ချော်မထွက်အောင် လက်ပြန်မလွှတ်ဘဲ ထိန်းပြီးကိုင်ကာ တေ့ပေးထားသည်။ ထို့နောက် အေးမောင် တင်ပါးကို သူမခြေထောက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ချိတ်ကာ ၀ိုင်းဝန်း ဖိသွင်း ပေးသည်။ ဒစ်အဖျားပိုင်းက စီးစီးပိုင်ပိုင်ပင် ၀င်သွားသည်။ ခေါင်းဝင် ကိုယ်ဆန့် ဆိုသလို တအိအိနှင့် ၀င် သွားတော့သည်။ တီလေး၏ မချိမဆန့် ညည်းသံ ထွက်လာသည်။အင်း….. အင်း…. ဖိုးသား နည်းနည်း ပြန်ဆွဲထုတ်ပေး…..အင်း…. ရပြီ…. အကုန်မထုတ်နဲ့…. ပြန်ထည့်လိုက်အုံး…. အဲလို သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် ဖြည်းဖြည်း လုပ်နော်…..အေးမောင် တီလေးပြောသလိုပင် သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးကြည့်သည်။ မိန်းမ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသော အေးမောင် ကြာကြာ မထိန်းနိုင် တစ်ချောင်းလုံး ကျင်တက်လာကာ သုက်ရည်ပူပူနွေးနွေးများ တီလေး စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။ဖိုးသားက…. တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတော့…. ခဏလေးပြီးသွားတာကိုး…. ခဏနားလိုက်….. ပြီးရင် ပြန်လုပ်မယ်….အေးမောင် အတော်ကြာကြာနားပြီးတော့ အန်တီလေးက ရေပြန်မဆေးခိုင်းတော့ဘဲ ပါးစပ်နှင့်စုပ်ကာ ပြန် တောင်လာအောင် ဆွပေးသည်။ ပြန်တောင်လာသောအခါရပြီ ဖိုးသား….. ခုနလို လုပ်ကြည့်….. တေ့မပေးတော့ဘူးနော်….. ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်တော့…..ဒီတစ်ခါတော့ အေးမောင် အဆင်ပြေသွားသည်။ တွင်းမချော်တော့ပေ။ ဖြည်းဖြည်း အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေး နေရာမှ မြန်မြန် အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးနေသည်။အား…. ရှီး….. အင်း…. ကောင်းတယ်…. ဖိုးသား… နာနာလေး…. ဆောင့်ပေး…..အဟင့်…. ကောင်းလိုက်တာ….မောင်လေးရယ်…. လုပ်ပါ… ဆောင့်ပေး…. နာနာလေး… မမပြီးတော့မယ်….. အား…. ပြီးပြီ…. မောင်လေး…. ပြီးလိုက်တော့…. အားးး….. ရှီးးး…. အားးးး….ခဏချင်းပင် အခေါ်အဝေါ်လေးများ ပြောင်းသွားသည်။ အေးမောင်လည်း ပြီးချင်လာသည်။အား…. မမ…. မမ… မောင်လေး…. ပြီးပြီ….သုက်ရည်များကို တီလေး စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ ပန်းထုတ်လိုက်ပြန်တော့သည်။ တီလေး စောက်ဖုတ်အတွင်း သားများက အေးမောင် လီးထဲရှိ သုက်ရည် အကုန် စုပ်ယူနေသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ကဲ…. မောင်လေး…. ကျေနပ်သွားပြီလား…. မမလဲ တအား ကောင်းတယ်…. ဒီအခန်းထဲမှာ ရောက်ရင် မမလို့ ခေါ်နော်။ မမကလည်း မောင်လေးလို့ခေါ်မယ်။ အပြင်ရောက်ရင် အရင်လိုပဲခေါ်။ မမှားစေနဲ့နော်။ ကဲ ညီမလေးကို သွားကြိုတော့။ မမလည်း အိပ်တော့မယ်။ ဒီညတော့ ချောင်းကြည့်ပြီး လက်မဆော့နဲ့တော့ နော်။ အား ကုန်လိမ့်မယ်။ သွားတော့…. အေးမောင် အိဖြူကို ကြိုရန် ထွက်သွားရသည်။ မနက်ဖြန်ဆို အိဖြူတို့ စာမေးပွဲ ဖြေရတော့မည်။ အိဖြူ လည်း စာကျက်ရတာ များတော့ အအိပ်ပျက် အစားပျက်နှင့် မျက်တွင်းလေးများပင် ချိုင့်နေသည်။ အိဖြူ စာမေးပွဲကာလ တစ်လျှောက်လုံး တီလေးနှင့် အဆင်ပြေနေသည်။ တီလေးကလည်း အိဖြူ ကျောင်းသွားပြီ ဆို သည်နှင့် အေးမောင်ကို ခေါ်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။တီလေးက အေးမောင်ကို နည်းစနစ် အမျိုးမျိုး သင်ကြားပေသည်။ အပြင်တွင် အိနြေ္ဒကြီးသလောက် အိပ်ခန်းထဲတွင် တီလေး တစ်တစ် ခွခွတွေ အရမ်းပြောသည်။ ဒီလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြီး လုပ်ရတာ ဖီးလ်လာတယ်ဟု ပြောသည်။ သူမ လို ချင်သလို ပုံသွင်းပေးလို့ ရနေသဖြင့် အေးမောင်ကို အရမ်းစွဲနေသည်။ တစ်ခါတရံ လေးဘက်ထောက်ပြီး လုပ် ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတရံလည်း မုံညင်းဆီနှင့် မက်ဆက်ခ်ျ လုပ်ခိုင်းသေးသည်။ အေးမောင်ကလည်း တီလေး သင် ပေးသမျှ မမှားမယွင်း လုပ်ပေးတတ်သည်။ အိဖြူ စာမေးပွဲ ပြီးသွားပြီ။ ဒီတော့ အန်တီလေး ကိုယ်ရှိန်ပြန်သပ်ရသည်။ ဒါမျိုးကိစ္စတွေက သမီး သိလို့ မဖြစ်သေး။ သမီးသိသွားလျှင် အမျိုးမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ သူမနှင့် အေးမောင် အဖြစ်ကို သိကာ ရှက် သွားပြီး စိတ်ထင်ရာ လျှောက်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ အတုယူတွေ လွဲမှားသွားပြီး တဏှာစိတ်တွေ ထ လာကာ လမ်းကြောင်းလွဲ ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ရည်းစားသနာ ထားလိုက်လို့ အေးမောင်နှင့် ဖြစ်သွားလျှင် ပြဿနာ မရှိလှ။ သဘောမတူနိုင်စရာလည်း မရှိ။ သို့သော် တစ်ခြား ကာလသားလူလည်များနှင့် တွေ့လျှင် ဘ၀ပျက်သွားနိုင်သည်။ ပြီးတော့ ဒါ ကြင်ယာရှာရမည့် အရွယ်လည်း မဟုတ်သေး။ မတော် လင်နောက်လိုက် သွားလျှင် ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စနှင့် ဒုက္ခပွေရအုံးတော့မည်။ အိဖြူ စာမေးပွဲပြီးတော့ သူ့အမေထံ ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်သည်ဟု ခွင့်တောင်းသည်။ အန်တီလေးက လည်း အသာတကြည်ပင် ခွင့်ပြုသည်။ အိဖြူ ရုပ်ရှင်ကြည့်မည်ဆိုတော့ အေးမောင်အတွက်ပါ ခွင့်တောင်းပေးသည်။ အန်တီလေးက သွားကြည့်ခွင့်ပြုသည့်အပြင် နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် မုန့်ဖိုးများပင် ပေးလိုက်သေးသည်။ အိမ်က စထွက်သည့် အချိန်မှာက စောသေးသည်။ရုပ်ရှင်က ည ခုနစ်နာရီမှ ပြမှာ။ အိမ်မှ အ၀တ်အစားများ လဲပြီး ထွက်တော့ လေးနာရီခွဲသာ ရှိသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်ရှင်မပြမီ လေငြင်းခံရအောင် ဆိုသဖြင့် မြစ်တန်းဘက် မောင်းသွားလိုက်သည်။ နီးစပ်ရာ အအေးဆိုင်များမှ အအေးများ၊ မုန့်များ ၀ယ်ပြီး မြစ်ကမ်းဘေး က ထိုင်ခုံတန်းလေးများမှာ ထိုင်ကြသည်။ ညနေခင်းဖြစ်သဖြင့် လူသွားလူလာများနှင့် စည်ကားကာ မြစ်ထဲမှ လှေငယ်လေးများ၊ သင်္ဘောကြီးများကို ကြည့်ရသည်မှာ စိတ်ကြည်နူးဖွယ် ကောင်းလှသည်။အိဖြူကတော့ နှစ်ဝက် စာမေးပွဲ ပြီးသွားသဖြင့် ပျော်နေသည်။ကိုကို…. ညီမလေး…. နှစ်ဝက်ဖြေတာ အကုန်ဖြေနိုင်တယ် သိလား….အင်း… ကောင်းတာပေါ့…. ညီမလေးရဲ့….. ကြိုးစားနော်…. ကိုကိုက ကိုးတန်းပဲ ရှိသေးတော့ ညီမလေး ထက်.. အတန်းငယ်ပေမဲ့… ညီမလေး ဆယ်တန်း အောင်စေချင်တာပဲ…..အင်းပါ… ကိုကိုရဲ့…. ကြိုးစားမှာပေါ့… ဒါပေမဲ့…. ညီမလေးက သင်္ချာညံ့တယ်…. အခုပထမပိုင်းက စာတွေက… နားလည်တယ်…. နောက်ဆုံးနှစ်ဝက်ကျရင်… တြီဂိုပိုင်းတွေက…. ခက်လာတော့မှာ…..အင်း…. ကိုကိုလည်း…. မသင်ရသေးတော့…. အဲဒါ မသိသေးဘူး…. ညီမလေးနဲ့ အတန်းတူရင်…. စာပြပေး ချင်တာ…. ကိုကိုက သင်္ချာစိတ်ဝင်စားတယ်….အာ…. တော်ပြီ ကိုကိုရာ…. စာတွေအကြောင်း ခဏမေ့ထားအုံးမယ်…. အခု ဒီည မုန့်တွေ တ၀ကြီးစားမယ်…. ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်…… ပြီးရင် ညကျမှ…. ဟီးးး…ညကျမှ… ဘာဖြစ်လဲ…. ညီမလေးရဲ့….ဟမ်….. သူပဲ…. ညတိုင်းချောင်းကြည့်နေပြီးတော့…. ကိုကိုနော်….. ဟွန့်…..အယ်….မအယ်နဲ့…. ကိုကိုလည်း ပျင်းနေမှာပဲ…. ညီမလေးလဲ စာတွေနဲ့ အလုပ်များနေတာ…ကြာပြီ….အင်းပေါ့…. ပျင်းတာပေါ့…. ဒါပေမဲ့…. ဒီည မပျင်းတော့ဘူး….အင်း…. ကိုကိုက ညီမလေးနဲ့ တစ်အိမ်ထဲနေတာဆိုတော့…. ဒီဟာတွေက…. ကိုကို့ကိုပဲ ပြောပြချင်မိတာ…. ကိုကို… ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောနဲ့နော်… မေမေ့လဲ မပြောနဲ့ကွာ…. ရှက်စရာကြီး….သြော်…. ညီမလေးကလည်း ကိုကိုက ဘာလို့ မေမေ့ကို ပြောရမှာလဲ။ ဘယ်သူ့မှလဲ မပြောဘူး…. စိတ်မပူ နဲ့။ ကိုကိုကလေ…. တတ်နိုင်ရင်…. …. ….ဟင်…. ကိုကိုကလည်း….. တတ်နိုင်ရင်…. ဘာဖြစ်လဲ…. ဆက်ပြောလေ….မပြောတော့ဘူး…. ညီမလေး စိတ်ဆိုးမှာ ကြောက်တယ်…..ဟေ့အေး…. မဆိုးဘူးကွာ….. မပြောရင် စိတ်ဆိုးမှာ…. နောက်မခေါ်တော့ဘူး….ကဲ…. ပြောပါ့မယ်… ကိုကိုကလေ…. ညီမလေး… ကိုယ့်ဘာသာ… ဟိုဒင်းလုပ်နေတာ ကြည့်ပြီး…. ကိုကို… အဲလို… လာလုပ်ပေးချင်တာ…. သိလား…..ဟာ…. ကိုကိုကလည်း…. ရှက်စရာကြီး….အင်းလေ… ဒါတော့ ဒါပေါ့…. ဒါပေမဲ့ အခုလည်း ညီိမလေး ဘာလုပ်လုပ် မြင်နေရတာပဲကို….အင်း…. ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်လေ…. ဒါပေမဲ့… ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်နေကျကို… သူများလုပ်ပေးတော့ တမျိုးကြီး ဖြစ်နေမှာလားလို့….ကိုကိုက ဘာလို့…. အဲလို လုပ်ပေးချင်တာလဲ… ကိုကိုလုပ်ပေးလဲ ကောင်းတော့ ညီမလေးပဲ ကောင်းမှာလေ…ကိုကိုလဲ ညီမလေးကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကို လုပ်တာပဲ…. ဒါပေမဲ့… စိတ်ထဲမှာ…. ကိုယ့်ဘာသာကို… လုပ်ရတာထက်…. သူများလုပ်ပေးတာ ပိုကောင်းမလားလို့ ….. ထင်နေတာ….။ ညီမလေးလဲ…. ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ရတာထက်…. ကိုကိုလုပ်ပေးရင်…. ပိုများ ကောင်းမလားလို့လေ….။အိဖြူ တွေတွေလေး စဉ်းစားလိုက်သည်။ ထို့နောက်…ဒါဆို ဒီလိုလုပ်.. ကိုကို… ဘယ်သူ့မှတော့ မသိစေနဲ့နော်….အင်း… ပြောပါအုံး… ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတုန်း….ကိုကိုက ညီမလေးကို လုပ်ပေး…. ပြီးရင် ညီမလေးက ကိုကို့ကို လုပ်ပေးမယ်…တကယ်လား… ညီမလေး….တကယ်ပေါ့… ကိုကိုကလည်း…ညီမလေးက… အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်…ဟွန့်…. လာမြှောက်မနေနဲ့…. အေးမောင် ပျော်သွားသည်။ မရွယ်ဘဲ စော်ကဲမင်းဖြစ်သည့် အပေါက်ပါပဲလေ။ သူ ဘာမှတောင် စည်းရုံးရေးဆင်းစရာ မလို။ စကားပြောရင်းနဲ့ သူမ အလိုလိုပါလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ရုံကို ညနေ ခြောက်နာရီခွဲလောက် ရောက်သွားသည်။ ဒီည ပြသမည့် ရုပ်ရှင်က လူအများသိပြီး ဖြစ်သည့် TITANIC ကား ဖြစ်သည်။ ယခုတော့ မြန်မာစာတမ်းထိုးကားတွေပင် ထွက်နေပါပြီ။ ထိုအချိန်ကတော့ မထွက်သေး။ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဝယ်တော့ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ လူနည်းနည်း ရှင်းနေသည်။ သိပ်မရှိလှ။ မြို့ထဲမှာလည်း စတိတ်ရှိုး ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် တော်တော်များများက စတိတ်ရှိုး ရောက်နေသည်။ အေးမောင်ရော အိဖြူပါ စတိတ်ရှိုးကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားသဖြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ စားစရာသောက်စရာ တစ်ပုံ တစ်ပင်နှင့် ရုံထဲဝင်သွားကာ သွားထိုင်ကြသည်။ ရုပ်ရှင်ရုံဆိုသော်လည်း မြို့ငယ် လေးဖြစ်သဖြင့် သိပ်ခမ်းခမ်းနားနား မရှိလှပါ။ အနောက်ဆုံးတန်းတွင် နှစ်ယောက်တွဲ ခုံလေးတွေ လုပ်ပေး ထား သည်။ ရုပ်ရှင် မစသေးသဖြင့် ပါလာသည့် နေကြာစေ့များ မုန့်များ စားနေကြသည်။ ရုပ်ရှင်စတော့ မီးအားလုံး မှောင်သွားသဖြင့် နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်ထဲတွင်ပင် မရိုးမရွ ဖြစ်နေသည်။ ကျန်သည့် ရုပ်ရှင်ကြည့်သူများက လည်း ဟိုနားတစ်စု၊ ဒီနားတစ်စုနှင့် နေရာယူထားကြသည်။ သူတို့ ထိုင်သည့်အတန်း ဘယ်ဘက်ထိပ်နားမှာ တစ်တွဲ၊ ညာဘက်ထိပ်နားမှာ နှစ်တွဲ ထိုင်နေကြသည်။ သူတို့ဘေးနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိ။ အေးမောင် ဘေးဘယ်ညာ လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ဘယ်သူမှမရှိ သဖြင့် ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် အိဖြူပါးကလေးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်သည်။ အိဖြူ ရုတ်တရက်မို့ အငိုက်မိ သွားဟန်ရှိသည်။ဟာ… ကိုကိုကလည်း…. ဘာလို့နမ်းတာလည်း…. သူ့ရည်းစားကျနေတာပဲ….ကိုကို့မှာ… ရည်းစားမရှိပါဘူး…. ချစ်စရာဆိုလို့…. ညီမလေးတစ်ယောက်ပဲရှိတာကို… ချစ်လို့နမ်းတာပေါ့….ညီမလေးမှာလည်း…. ရည်းစားမရှိပါဘူး…. ကိုကိုကလဲ….အင်းပါ….စကားရောဖောရောနှင့် နေကြာစေ့လေးများ အခွံနွှာကာ အိဖြူလက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်သည်။ အိဖြူကလည်း တစ်စေ့ချင်းစားသည်မဟုတ်၊ လက်ထဲများလာသည်နှင့် အကုန် စားပစ်လိုက်သည်။ ထည့်ပေးလို့ မလောက် သဖြင့် အေးမောင် လက်ထဲထည့်မပေးတော့ဘဲ အခွံနွာကာ တစ်စေ့ချင်း ခွံ့ပေးသည်။ဇာတ်လမ်းကလည်း ကောင်းသဖြင့် နှစ်ယောက်စလုံး ဇာတ်ရှိန်ထဲ မျောသွားသည်။ ဇာတ်လမ်း အလယ်ပိုင်း လောက် ရောက်တော့ သင်္ဘောကုန်တင်ခန်းထဲက ကားပေါ်မှာ ရိုက်ထားသည့် လပ်ဖ်ဆင်း နေရာ အရောက်တွင် နှစ်ယောက်စလုံး အာခေါင်များ ခြောက်လာကာ ကတုန်ကရင်ဖြစ်လာသည်။ အေးမောင်က အိဖြူဘက်သို့ လှည့်ကြည့်ရာ အိဖြူကလည်း အေးမောင်ဘက်သို့ လှည့်ကြည့်သည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင်။ညီမလေး… ကိုကို့စိတ်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ….အင်း…. ကိုကို…. ညီမလေးလဲ… အဲလိုမျိုးပဲ….အေးမောင် အိဖြူ၏ ခါးကျင်ကျင်လေးကို သူ့ဘက်သို့ဆွဲကာ ဖက်လိုက်ပြီး အိဖြူ၏ နှုတ်ခမ်းသားဖူးဖူးလေးကို စုပ်ငုံကာ နမ်းလိုက်မိသည်။ အိဖြူ ပြန်မရုန်းပါ။ သူ့ဘက်သို့ အလိုက်သင့်ပါလာသည်။ ကြာကြာလေး နမ်းလိုက် မိတော့ အိဖြူကလည်း မွတ်သိပ်စွာ အနမ်းများ တုန့်ပြန်လာသည်။ အေးမောင် သူမ၏ ပုခုံးအိအိလေးကို ဆုတ်ကိုင်ထားရာမှ လက်ကို အောက်သို့ လျှောချကာ ရင်သားပေါ် တင်လိုက်သည်။ နူးညံ့ဖွံ့ထွားသည့် ရင်သားလုံးလုံးကျစ်ကျစ်ကလေးပေါ်တွင် လက်ကို အလုပ်ပေးထားလိုက်သည်။ အိဖြူကလည်း အေးမောင်၏ လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်း တရှိုက်မက်မက် စုပ်နမ်းနေသည်။ ရင်သားပေါ်မှ လက်တစ်ဖက်သည် ၀မ်းပျဉ်းသားလေးပေါ်တွင် ခဏလောက် ပွတ်သပ်ရင်း အောက်ပိုင်းသို့ စုန်ဆင်းသွားသည်။ စကတ် အတို လေး ၀တ်ထားသဖြင့် အေးမောင် လက် ဘယ်နားက ၀င်ရမလဲ လိုက်ရှာတော့ ဒူးဆစ်အထက်နားလေးမှာ အတားအဆီးက အဆုံးသတ်သွားသည်။ အေးမောင် စကတ်ကလေးကို လှန်တင်ဖို့ ကြိုးစားသည်။ မရ။ အိဖြူ ဒူးနှစ်ဖက်ကို အတင်း စေ့ထားသည်။ ဘယ်လိုမှ ခွာထုတ်လို့မရ။ ပါးစပ်က ပြောဖို့ကျတော့ လည်း လျှာနှစ်ခု တိုက်စစ်ဆင်နေကြရာ မအား။ ဒါနှင့် စကတ်ကို လှန်တင်မည့် အစီအစဉ်ကို လက်လျှော့ကာ လက်ကို ဆီးခုံပေါ်သို့ ပြန်တင်ကာ ဖွဖွလေးပွတ်ပေးရင်း လက်ခလယ်တစ်ချောင်း ပေါင်ခွဆုံကြားထဲ ၀င်အောင် ကြိုးစားကြည့်ရသည်။ အိဖြူထံမှ တဏှာထန်သော ညည်းသံ သဲ့သဲ့လေး တစ်ချက်တစ်ချက် ထွက်လာပြီး တင်းတင်းစေ့ထား သော့ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်၏ အားများ လျော့လာကာ နည်းနည်း ဟ လာသည်။ အေးမောင်လည်း အခွင့်ကောင်းကို လက်လွတ်မခံဘဲ ဒူးနှစ်ဖက်ကြားကို ခြေသလုံးတစ်ဖက် ထည့်ညှပ်ကာ ဂျမ်းတုံး ခုလိုက်သည်။ သူမ ယောင်ယမ်းကာ ပြန်စေ့သော်လည်း မရနိုင်တော့ချေ။ ထိုအခါမှ အေးမောင် စကတ်အောက်နားစလေးကို တဖြည်းဖြည်း မ တင်ကာ လက်ကို အဓိက ဦးတည် ထားသည့်နေရာသို့ အရောက်ပို့လိုက်သည်။ အိဖြူ ၀င်ဆင်ထားသည့် ပင်တီလေးက ပါးလွှာလွန်းသဖြင့် နူးညံ့ ပျော့ပျောင်းလှသည့် အဖုတ်ကလေး၏ အထိအတွေ့ကို ခံစားရသည်။ အေးမောင် အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေး တစ်လျှောက်ကို စုန်ချည်ဆန်ချည် ပွတ်သတ်ပေးသည်။ အေးမောင်သည် အန်တီလေးနှင့် အဆုံးစွန်အထိ စခန်း သွားပြီး ဖြစ်သဖြင့် ဘယ်နေရာကို ထိလျှင် မိန်းကလေးတွေ ကြိုက်တတ်သည်ကို သိပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စုန်ဆန်ပွတ်သပ်နေရင်းမှ အပေါ်ပိုင်းရှိ အစေ့လေးရှိရာကို အရောက်သွားသည်။ အစေ့လေးကို ထိတွေ့မိသော အခါတွင်တော့အိဖြူ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားပြီး အေးမောင်ကို အတင်းဖက်ထားသည်။ ပါးစပ်ကလည်း..အာ့…. ကိုကို…. ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ….တဏှာသံလေးနှင့် ဘာလုပ်နေမှန်း သိသိကြီး မေးသည်ဖြစ်ရာ အေးမောင် ဘာမှန်ပြန်မဖြေတော့ဘဲ ဘာလုပ် နေမှန်း ပိုမို သိသာစေရန် ပင်တီလေး၏ ဘေးသားအစွန်းကို ဆွဲဖယ်ကာ တစ်ဖက်သို့ ကပ်လိုက်သည်။ အမွှေး ပါးပါးလေးသာ ပေါက်နေသော အဖုတ် ဖောင်းဖောင်းမို့မို့လေးက မြင်ဖူးရုံသာ မြင်ဖူးရာမှ လက်ထဲသို့ ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် ရောက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် အေးမောင် တွေဝေမနေတော့ပါ။ နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို တယုတယ ပွတ်သပ်ပေးနေရင်း လက်ခလယ်ဖြင့် အရည်ကြည်များ ရွှဲနေပြီဖြစ်သော အကွဲကြောင်းလေးထဲသို့ ခပ်နက်နက် ကလေး ဖိကာ တံမြက်စည်းလှည်းပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် အစေ့သေးသေးလေးပေါ်သို့ လက်မဖြင့် ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်လိုက်သည်။ အရည်များ စိုနေ သဖြင့် ပိုပွတ်လို့ကောင်းနေသည်။အား…. ကိုကို…. တအားမလုပ်နဲ့… ကျင်တယ်… ဖြည်း ဖြည်း… အ… အိဖြူ၏ အသံစုံများ ဝေဆာလာချိန်တွင် အေးမောင် လက်ခလယ်ကို ထပ်မံ နယ်ချဲ့ဖို့ ကြိုးစားရသည်။ အိဖြူ၏ အဖုတ်ကလေးက အန်တီလေးထက် ပိုမို ကျဉ်းကြပ်ကာ လက်ပင် သွင်းရခက်နေသည်။ တော်တော် လေး အားစိုက်ပေးလိုက်ရာ လက်တစ်ဆစ်လောက် ၀င်သွားသည်။ အိဖြူ ကြောက်အားလန့်အား ညှစ်ထားတာ လည်း ပါသည်။ ထိုအချိန်ဝယ်…ကိုကို…. သိပ်မနှိုက်နဲ့…. နာတယ်…. ဖြည်းဖြည်းလေး…. အဲဒီလောက်ကလေးပဲ… လုပ်ပေးနော်….ညီမလေး… ကောင်းနေပြီ…. အင့်.. ဟင့်…အေးမောင် ထပ်တိုးဖို့ မကြိုးစားတော့ဘဲ လက်မနှင့် လက်ခလယ်ကို ဟန်ချက်ညီညီ အသုံးချလိုက်ရာ အိဖြူ လက်အစုံသည် အေးမောင်၏ ကျောကုန်းကို အတင်း ဆုပ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်ကာ တစ်ကိုယ်လုံး တစ်ဆတ်ဆတ် တုန်ခါသွားသည်။ အဖုတ်ထဲ ထည့်ထားသော လက်ကလည်း အရည်တွေ ပိုမို စိုရွှဲလာသလို ခံစားလိုက်ရသည်။အား…. ပြီးသွားပြီ… ကိုကို…. တော်တော့နော်…. တအားကောင်းတယ် သိလား….အေးမောင် နှိုက်ထားသော လက်ကို ပြန်ထုတ်လိုက်ရသည်။ အိဖြူက ပြီးသွားသော်လည်း အေးမောင်က အနေရ ခက်နေသည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီအောက်က ညီတော်မောင်က ဒေါကန်နေပြီ။ ထို့နောက် အိဖြူ၏ စကတ်ကလေးအား လန်တက်နေရာမှ ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ပြန်ပြင်ပေးလိုက်ရသည်။ အိဖြူ၏ ခါးလေးကိုသာ ပြန် သိုင်း ဖက်ထားလိုက်သည်။ သို့သော် အိဖြူ၏ ညာလက်တစ်ဖက်သည် အေးမောင်၏ ပေါင်ကြားထဲသို့ ၀င်လာကာ တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာဖွေနေသည်။ သူမ ဘာရှာနေသည်ကို အေးမောင် သိပါသည်။ သူမလက်ကလေးကို ကိုင်ကာ တင်းမာနေ သော ညီတော်မောင် အပေါ်ဘက်မှ အုပ်ကိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် အောက်က အတွင်းခံဘောင်းဘီစကို ဘေးဖယ်ပေးလိုက်ကာ ညီတော်မောင်ကို လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ စတိုင်ပင်န် ဇစ်ကိုလည်း ဖွင့်ပေးလိုက်ရာ အပြင်သို့ ဖြောင်းကနဲ ကန်ထွက်လာသည်။ အိဖြူ အုပ်ကိုင်ထားသော လက် လန့်ဖျပ်ကာ နောက်ပြန်ရုပ်သွားသဖြင့် ကမန်းကတန်း ပြန်လိုက်ဖမ်း ကာ ညီတော်မောင်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးရသေးသည်။ ထိုတော့မှ မကိုင်ရဲ ကိုင်ရဲနှင့် လာ ဆုပ်ကိုင်သည်။ဟင့်… ကိုကို…. အကြီးကြီးပဲနော်… အေးမောင် အိဖြူလက်ကို ကိုင်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် နမူနာလုပ်ပြသည်။ အိဖြူကလည်း မခေပါ။ သူသင်ပေးသည့်အတိုင်း လိုက်လုပ်သည်။ညီမလေး… ဖြည်းဖြည်းလေး အရင်လုပ်….ဟုတ်… ကိုကို….သူမ တကယ်တော့ အေးမောင်၏ လီးကို ငုံ့မကြည့်ပါ။ မျက်လုံးကို မှိတ်ထားကာ အေးမောင်၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ မှီ ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။အား…. ညီမလေး…. မြန်မြန်လေးလုပ်တော့ …. ပြီးတော့မယ်….ပြီးပြီ…. အား… ကောင်းလိုက်တာကွာ….ဟာ…. ကိုကို…. ဘာတွေလည်း…. အရည်တွေအများကြီးပဲ…. ပေကုန်ပြီ….အဲဒါ…. ညီမလေး လုပ်ပေးတာ ကောင်းလို့…. ထွက်တဲ့ အရည်တွေပေါ့… အေးမောင် တစ်သျှူးထုပ်ထဲမှ တစ်သျှူစ ထုတ်ပေးပြီး သူမလက်ကလေးကို တယုတယ သုတ်ပေး သည်။ ထို့နောက် အရှေ့က ရုပ်ရှင်ကားကို ကြည့်ရာ ရုပ်ရှင်ကားပြီးသွားသဖြင့် စာတမ်းပင် ထိုးနေပြီ။ အောင်မလေး.. ကံကောင်းပေလို့။ တိုက်တန်းနစ်သင်္ဘောကြီး ဘယ်အချိန် ရေခဲတောင်နှင့် တိုက်ပြီး ဘယ် အချိန် နစ်သွားလိုက်သလဲပင် မသိလိုက်ကြချေ။ အချစ်ပင်လယ်ကြီးထဲ မျောနေကြသည်။ ရုပ်ရှင်ပြီးလို့ ရုံပိတ် သွားကာ ပြန်ထွက်မရရင် ဒုက္ခ။ အဲဒီဒုက္ခမတိုင်ခင် မီးတွေ ဗြုန်းကနဲ ပွင့်လာမှ အရှက်လုံးလုံးကွဲနိုင်သည်။ ဘာမှန်းမသိသော ရုပ်ရှင်ကို မျက်လုံးမဖွင့်ဘဲ တစ်ကားလုံးပြီးအောင်ကြည့်ကာ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှ ပြန်ထွက် လာသည်။ ရုံရှေ့တွင်ရောင်းသော အသုပ်စုံ ၀ယ်စားကာ အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ အန်တီလေးက အိမ်ရှေ့တံခါး သော့ကို ပန်းအိုးအောက်တွင် ဖိထားတတ်သဖြင့် သော့ဖွင့်ဝင်ကာ အိဖြူကို သူမအိပ်ခန်းလိုက်ပို့ပြီး သူ့အခန်း ပေါ် တက်လာခဲ့သည်။ အေးမောင် သူ့အခန်းထဲတွင် ပုဆိုးဟောင်းတစ်ထည်နှင့် စွပ်ကျယ်တစ်ထည် ကောက်စွပ်ကာ ခဏ လှဲ ချလိုက်သည်။ ထိုစဉ် အခန်းတံခါးမှ တံခါးခေါက်သံ ကြားလို့ ထဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အိဖြူ။ သူမလည်း အ၀တ် အစား လဲပြီးသွားပြီ။ ပေါင်လယ်လောက်ရှိသော ဂါဝန်အဖြူလေးကို ခါးစည်းကြိုးစည်းထားတော့ ခါးကျင်ကျင် လေး၏ အလှက ပေါ်လွင်နေသည်။ ကြိုးတစ်လုံးတည်းသာ ရှိသဖြင့် ပုခုံးသားနှင့် ရင်ကြားမြောင်းကို ထင်ထင် ရှားရှား ပေါ်လွင်နေစေပြန်သည်။ညီမလေး…. မအိပ်သေးဘူးလား…..မအိပ်သေးဘူး…. ကိုကို့ကို သတိရလို့ တက်လာတာ…..ဟင်…. အန်တီလေး အိပ်သွားပြီလား…. ညီမလေးကို ဆူနေအုံးမယ်…..အိပ်သွားပါပြီ….. ခုနက အိပ်ဆေးသောက်နေတာတွေ့တယ်…. အန်တီလေးလဲ အိဖြူ အိမ်မှာရှိနေတော့ စောစောစီးစီး အိပ်ဆေးသောက်ပြီး အိပ်လိုက်ပုံရသည်။အင်း…. အိပ်သွားရင်လည်း… ပြီးတာပဲ…..ညီမလေး… အိပ်မရဘူး.. ကိုကိုရာ…ဟင်… ဘာလို့ အိပ်မရတာလဲ….နေ့လည်က… ကိုကိုကြောင့်လေ… အဲဒါ သတိရပြီး အိပ်မရတာပေါ….သြော်….ဘာ သြော်လဲ… ကိုကို နော်….ဟောဗျာ… ကိုကိုလဲ ဘာမှ မပြောရသေးပါလား…. အိဖြူက အေးမောင်နား ကပ်သွားပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့ကာ နမ်းပစ်လိုက်သည်။ အိဖြူက စနမ်းတော့ လည်း အေးမောင် မနေသာတော့ပြီ။ အိဖြူကို သိုင်းဖက်လိုက်ကာ ရင်သားလေးပေါ်သို့ လက်နှင့် အုပ်ကိုင် လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းက စစ်မျက်နှာ တစ်ခုဖွင့်ထားချိန်တွင် ညာလက်ကလည်း စစ်မျက်နှာတစ်ခု ထပ်ဖွင့်လိုက် ပြန်သည်။ လက်က ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေးများကို ပွတ်သပ်ပေးနေရင်း ဂါဝန်သားပေါ်မှ ပေါင်ရင်းနားထိ ပွတ် သပ်ပေးလိုက်သည်။ အိဖြူကလည်း အလိုက်တသင့်ပင် ပေါင်လေး ဟပေးလိုက်သည်။ ဂါဝန်ပေါ်မှ ပွတ်သပ်ပေး နေရင်း ဂါဝန်ကို အပေါ်ထိ လှန်တင်လိုက်သည်။ ၀ိုး…. လှလိုက်သည့် အဖုတ်ကလေး။ မည်းသဲ မနေပါ။ ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေးလေးဖြစ်နေပြီး အပေါ်ပိုင်း ဆီးစပ်နားတွင်သာ အမွှေးနုနုလေးများ ပေါက်နေသည်။အကွဲကြောင်းလေး တစ်လျှောက်တွင် စိုနေပြီဖြစ်သော အရည်ကြည်လေးများက မီးရောင်အောက်တွင် အသက်ရှူမှားဖွယ် တစ်လက်လက် ထနေသည်။ အေးမောင် ထိုအကွဲကြောင်းလေးထဲသို့ လက်နှင့် ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။ အထဲထိ နှိုက်ပစ်လိုက်ချင်သော်လည်း အထဲက အမြှေးပါးလေး ပါကင်ပေါက်သွားမည် စိုးသည်။ (စာအုပ်တွေ ဖတ်ထားတော့လည်း ဒီလိုဒီလိုရှိတယ် ဆိုတာ အေးမောင်သိနေသည်၊ ကောင်မလေး အပျို စစ်လား မစစ်လား တော့ သူမသိချေ)။ ထို့ကြောင့် အထဲထိ အတင်း မနှိုက်တော့ဘဲ လက်တစ်ဆစ် မမြုတ်တမြုတ်ကလေးသာ ဖိဖိလေး ပွတ် ဆွဲပေးနေသည်။ အစေ့လေးကိုလည်း ညင်ညင်သာသာ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ အရည်တွေကလည်း တစ်ဖြည်း ဖြည်း များလာကာ စီးကျနေပြီ။ အေးမောင် ကျန်သည့် လက်တစ်ဖက်က ခါးစည်းကြိုးကို ဖြည်လိုက်ကာ ဂါဝန် ကို ခေါင်းမှ ချွတ်ရန် ကြိုးစားသည်။ ကိုကို…. မချွတ်နဲ့ကွာ…. ညီမလေး ရှက်တယ်…. (ငှယ်…. ဂါဝန်ကဖြင့် ဖုံးထားသမျှ အဖုတ်ပေါ်သည် သာမက နို့ပင် ပေါ်နေပြီ။ သူက အခုမှ ထရှက်နေသေးသည်) အင်းပါ…. မချွတ်တော့ပါဘူး….(ချွတ်စရာလည်း မလိုတော့ပါလေ၊ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတွေ အကုန်လုံး ပေါ်ကာ လက်ထဲပင် ရောက်နေပြီ မဟုတ်လား)အေးမောင် လက်တစ်ဖက်က အောက်မှာ ကစားနေရင်း ပါးစပ်က နို့သီးပန်းသွေးရောင် ရဲရဲဖုဖုလေးများကို တစ် လှည့်စီ စို့ပေးလိုက်သည်။ အိဖြူ ကြာကြာမခံနိုင်ရှာ။ တော်တော်ကြာတော့ ကော့ပျံတက်လာကာ တစ်ချီ ပြီးသွားတော့သည်။ အချိန်ကလည်း ညဥ့်နက်နေပြီ။ သူမ ပြီးသွားတော့ အေးမောင်ကို ပြန်လုပ်ပေးအုံးမည် ဟု ပြောသည်။ အေးမောင်ကတော့ ရှက်မနေတော့ပြီ။ ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ်ကာ အောက်တွင် ပုံလိုက်သည်။ မတ် မတ်ထောင်နေသော ဒုံးပျံကြီးကို အိဖြူ ရဲရဲတင်းတင်းပင် လာကိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာကတည်းက အတွေ့အကြုံရှိပြီး ဖြစ်ရာ အိဖြူကို သင်ပေးနေစရာ မလိုတော့ပါ။ သူ့ဘာသာပင် လုပ်စရာရှိသည်ကို ဖြောင့် ဖြောင့်တန်းတန်း လုပ်သွားသည်။ အေးမောင်ကတော့ အိဖြူကို ဖက်ထားရင်း ဇိမ်ခံနေသည်။ အေးမောင် ပြီးသွားသည့်အခါ..ဟင်… ကိုကို့အရည်တွေက … အဖြူတွေနော်… (အရည်အစိမ်းတွေ၊ အနီတွေ မြင်ဖူးထားလို့လား မသိ)အင်းပေါ့…. ညီမလေးရဲ့…. မမြင်ဖူးဘူးလား….အာ…. ကိုကိုနော်… ညီမလေးက…. ကိုကို့ကိုပဲ… ဒီလို လုပ်ပေးဖူးတာ… ဘယ်ယောက်ျားလေးမှ ပတ်သက် ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး….အာ… အင်းပါ ညီမလေးရာ… ကိုကို စကားပြော လောသွားလို့ပါ…ကဲ…. ကိုကို…. ညီမလေး သွားအိပ်တော့မယ်… ဂွတ်နိုက်….ညီမလေး…. မနက်ဖြန်ကျရင်…. ဗီဒီယိုတွေ ကူးလာခဲ့မယ်… ကိုကိုတို့ အတူကြည့်မယ်နော်…ဘာခွေလဲ ကိုကို….ကြည့်တော့…. သိမှာပေါ့….ဟွန်…. ကိုကိုကလည်း… တအား လျှို့ဝှက်တယ်…. မုန်းစရာကြီး….ကဲပါ… သွားအိပ်တော့… ဂွတ်နိုက်အိဖြူ လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်။ အေးမောင်လည်း မောမောပန်းပန်းနှင့် အိပ်လိုက်ရသည်။ နောက်တစ်နေ့ကျတော့ အပေါင်းအသင်းတွေဆီက လူကြီးဇာတ်လမ်းတွေ အမ်ပီဖိုးလေးနှင့် ကူးလာသည်။ ညဘက်ကျတော့ အန်တီလေးအခန်းဘက်က ဖောက်ထားသော အပေါက်ကို အိဖြူကို ပြလိုက်ပြီး ညဘက်ကျ အန်တီလေး အိပ် မအိပ် ကြည့်လို့ရအောင် ဖောက်ထားတာဟု ပြောရသည်။ အန်တီလေးကို ပြန်မပြောဖို့လည်း နှုတ်ပိတ်ရသည်။ တကယ်တော့ အန်တီလေးက သိထားပြီးသားပါ။ အိဖြူကို သက်သက် ဖိန့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အိဖြူကလည်း အေးမောင်နှင့် အဆင်ပြေနေသဖြင့် ပြန်တိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်လည်း ပြလိုက် ခြင်း ဖြစ်သည်။ နို့မို့ဆို သူ့အမေ မအိပ်သေးဘူးဟုထင်ကာ တက်မလာရဲမှာ စိုးသဖြင့် ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ ပင် ပြလိုက်သည်။ အိဖြူ အိမ်ပေါ်တက်လာသည့်အချိန်က အန်တီလေး အိပ်ပျော်နေပြီ ဖြစ်သဖြင့် အိဖြူ ကျေ နပ်သွားသည်။ ဒီလောက်ဆို ဘာလုပ်လုပ် အန်တီလေး သိမည်မဟုတ်တော့ချေ။ ဒီတစ်ညတော့ အိဖြူ တစ်ကိုယ်လုံးကို မြင်ချင်သည်ဟု ပူဆာသည်။ ပထမ အိဖြူက အင်တင်တင် လုပ် နေသေးသည်။ မမြင်သင့်တာ အကုန်မြင်ရပြီးသည်ကို အကုန်ချွတ်ဖို့ကျတော့ ရှက်နေသေးသည်။ သူမက လည်း လူတစ်မျိုးပင်။ နောက်တော့ သေချာ သူမပြန်စဉ်းစားကာ သဘောတူလိုက်သည်။ ၀တ်လာသည်ကလည်း မနေ့ညက ၀တ်သည့် ဂါဝန်လေးပင်။ အေးမောင်ကိုယ်တိုင် ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ အိဖြူ က အေးမောင်ကိုလည်း ကြေးတိုက်ကာ ချွတ်ခိုင်းသည်။ အေးမောင်ကလည်း ချွတ်သည်ပေါ့။နှစ်ယောက်သား ပွေ့ဖက် နမ်းရှုတ်ပြီးတော့ ကူးလာသော ကားများကို နားကြပ် တစ်ယောက်တစ်ဖက်စီတပ်ကာ ပါးချင်းအပ်ကာ ကြည့်ကြသည်။ အေးမောင်ကလည်း ဥာဏ်နီဥာဏ်နက် များသည်။ သူ လုပ်ချင်သော ပိုဇေရှင်များကို စုံအောင် ကူးလာသည်။ ကစ်စ်ဆင်ပေးသည့်အခန်းများ၊ ဘလိုးဂျော့အခန်းများ၊ ဘာဂျာအခန်းများ၊ လက်နဲ့လိုးပေးသည့် အခန်းများ၊ အရုပ်တု သုံးသည့်အခန်းများနှင့် လိုးသည့်အခန်းများလည်း ပါသည်။ ကဏ္ဍစုံလင် အပြာရုပ်ရှင် ဆိုပါတော့။ဇာတ်ကားခွေများ ကြည့်နေစဉ်မှာပင် အိဖြူ ရင်ဘတ်(နို့)ကလေးများကို ဖိလိုက်၊ အဖုတ်ကလေးကို လက်နှင့် အုပ်လိုက်၊ မျက်လုံးပြူးသွားလိုက်နှင့် မျိုးစုံ ဖြစ်နေသည်။ ကြည့်ပြီးသွားတော့…ကိုကို…. အဲဒီထဲမှာ… လုပ်ကြတာလေ… ပါးစပ်တွေနဲ့လုပ်တာ…မရွံဘူးလား မသိဘူးနော်….သြော်…. ညီမလေးကလည်း…. ဘာရွံစရာရှိလို့လဲ…. ဆပ်ပြာတိုက်ပြီး ရေနဲ့ပြောင်အောင်ဆေးထားမှာပေါ့…ဟင်… ကိုကိုကလည်း…. အရည်တွေလည်း…. ထွက်တဲ့ဟာကို…ကိုကိုကတော့….. မရွံပါဘူး…..ဟမ်…. တကယ်ကြီးလား….တကယ်ပေါ့….
အေးမောင် တအံ့တသြ ဖြစ်နေသော အိဖြူလေးကို ကြည့်ကာ အူယားလာသဖြင့် အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အမြန် အသုံးချလိုက်သည်။ အိဖြူလည်း ကော့ပျံနေသည်။ ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုလည်း အစွမ်းကုန် ကားပေး ထား သည်။ ဒီလိုဆို အိဖြူ အေးမောင်ကို သိပ်ရှက်ပုံ မရှိတော့။ သူမဖြစ်ချင်သည့် အရသာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပင် ရယူနေပေပြီ။ အိဖြူ တစ်ချီပြီးသွားတော့ တော်တော် ပင်ပန်းသွားပုံရသည်။ ခုနက အတိုင်းပင် ပေါင်ကားလျှက် ပင် အမောဖြေနေသည်။ညီမလေး မျက်လုံး ခဏမှိတ်လိုက်….ကိုကို…. ဘာလုပ်မလို့လဲ….ဘာမှမလုပ်ဘူး…. မျက်လုံးခဏပဲ မှိတ်….မှိတ်ပြီဟာ…..အေးမောင် ခပ်သွက်သွက်ပင် သူမ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ခေါင်းဝင်လိုက်ကာ အဖုတ်ကလေး တစ်ခုလုံးကို ငုံ ပစ်လိုက်သည်။ရှီး….. ကိုကို….. ဘာတွေလုပ်တာလဲ…. ညီမလေး… ငရဲကြီးမှာပေါ့….ငြိမ်ငြိမ်နေ… ညီမလေး…အာ့… ကိုကို… တမျိုးကြီးပဲ…. ရှီး…. အမေ့…အေးမောင်ကလည်း အဖုတ်တစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်အပြည့် ငုံထားရာမှ လျှာကို အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် အနှံ့ ကစားသည်။ အဖုတ်တစ်ခုလုံးကိုလည်း လျက်ပေးသည်။ အစေ့လေးကို လျှာနှင့် လိုက်ရှာရာ တွေ့သွားတော့ လျှာဖျားနှင့် အစေ့ကိုသာ တည်ပြီး ထိုးပေးတော့သည်။ဒီတော့လည်း အိဖြူ မခံနိုင်ရှာ။ အဖုတ်တစ်ပြင်လုံး ကျင် စိမ့် တက်လာပြီး အထဲပိုင်းက ယားကျိကျိဝေဒနာ တိုးလာသည်။ တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသည့် အတွေ့အကြုံကြောင့် လေထဲတွင် လွင့်မျောနေသလို ခံစားနေရသည်။ ထို့နောက် အမည်ဖော်မရသည့် အရသာတစ်ခုက တစ်ကိုယ် လုံးကို ကြီးစိုးနေပြီး ခဏအကြာတွင် တစ်ကိုယ်လုံး ပွင့်ထွက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ သတိထားမိတော့ ကိုကို့ ခေါင်းကို တအား ဆုပ်ကိုင်ထားသည်ကို သတိရမိသဖြင့် အိဖြူ ကမန်းကတန်း လွှတ်လိုက်ကာ…အယ်… ကိုကို… တအားနာသွားလား…အုံဖွ…အုံဖွ… ညီမလေး တအားကောင်းသွားလို့…. ဟီး…သွားဖြီးလေးနှင့် ရီပြနေသော အိဖြူကို ကြည့်ရတာ အူယားဖို့ ကောင်းလှသည်။တအားကောင်းသွားလား….အင်း… ကောင်းတယ်ကိုကို…ညီမလေး ကောင်းသွားတယ်ဆို…. ပြီးတာပဲ…ကိုကို့ကိုလည်း… ပြန်လုပ်ပေးချင်တယ်…မရွံဘူးလား….. ညီမလေးက…ဟင့်… အင်း… မရွံပါဘူး…. ကိုကိုတောင်… ညီမလေးဟာကို မရွံမရှာ လျက်ပေးတာပဲ…. အိဖြူက ပြောပြောဆိုဆို အေးမောင် ပေါင်ကြားထဲသို့ ၀င်လိုက်ကာ အေးမောင်ကို ပက်လက် လှန် စေသည်။ ထို့နောက် မတ်မတ်ထောင်နေသော ဒုံးပျံကြီးအား လက်နှင့် နှစ်ချက် သုံးချက် ဂွင်းတိုက်လိုက်ပြီး ပါး စပ်နှင့် ငုံလိုက်သည်။ ထိုသို့ ငုံလိုက်ပြီးနောက် လျှာဖြင့် ဒစ်တစ်ဝိုက်ကို ပတ်ကာ လျက်ပေးသည်။ အေးမောင် အန်တီလေးနှင့် အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ဖူးသည်။သို့သော် အရသာက တစ်မျိုးစီဖြစ်နေသည်။ အန်တီလေးက အတွေ့အကြုံရှိတော့ အရသာ အစုံ ခံစားရသည်ကား မှန်၏။ သို့သော် စိတ်ထဲတွင် အန်တီလေးက အတွေ့ အကြုံရှိသည်ဟု စိတ်ထဲတွင် ရှိနေတော့ အရသာက တစ်မျိုး။ ယခု အိဖြူလေးကျပြန်တော့ အတွေ့အကြုံ မရှိတော့ အန်တီလေးလိုတော့ ပါးစပ်ထဲကလီးကို ဘယ်လို အမျိုးမျိုး လျှာနှင့်ကစားရမည်ကို မသိသောလည်း စိတ်ထဲက အရိုင်းဆန်ဆန် အရသာလေးတစ်ခု ပိုတိုးနေသလို။(ဥပမာ လေးငါးခြောက်ထောင် ပေးရသည့် ဆင်းဒ၀စ်ခ်ျက ကောင်းသော်လည်း တစ်ခါတလေ အချဉ်ပေါင်း ငါးဆယ်တန်လေးကို စားရတာက တစ်မျိုးတစ် ဘာသာ ထူးခြားသလိုမျိုးပါ… ကျွန်တော်အာဘော် ဖြစ်ပါသည်။ အေးမောင်က တောသားလေး ဖြစ်သဖြင့် ဆင်းဒ၀စ်ခ်ျ မစားဖူးသေးပါ။ တောသားများကို ထိခိုက်စေလိုခြင်း မရှိပါ။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ချိန်က တောသားသာ ဖြစ်ပါသည်)အိဖြူက ဗီဒီယိုအခွေ ခုနလေးမှ ကြည့်ထားသဖြင့် အပြည့်ငုံလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် အပြည့်ထမ်းဆောင်နေပြီ။ နုနယ်ချောမောလှသော အပျိုပေါက်မလေး၏ ဘလိုးဂျော့ဘ် ဒဏ်ကို အေးမောင် ကြာကြာမခံနိုင်တော့ပါ။ လိင်တံတစ်လျှောက် ကျင်တက်လာပြီး သုက်ရည်များကို အိဖြူ၏ အာခေါင်ထဲသို့ အပြည့် ဖြန်းထုတ်လိုက်ကာ ကာမအရသာထူးကို ခံစားလိုက်ရလေတော့သည်။အိဖြူ အေးမောင်၏ သုက်ရည်များကို ထွေးမထုတ်ဘဲ မျိုချလိုက်သည်။ကိုကို…. ငံကျိကျိနဲ့…. ဟီးးး (ကျွန်တော် အဲဒီအရသာ မသိပါ၊ သူများစာအုပ်များထဲက အရသာအတိုင်းသာ)ညီမလေးဟာရော… အဲလိုပဲလား….အင်း…. ညီမလေးအရည်တွေလည်း… ငံကျိကျိနဲ့ပဲ…. ဒီလောက်တော့ မများပါဘူး….ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရာ… ညတိုင်း… ဒီလိုပဲ လုပ်ကြမယ်နော်…အင်း… ကိုကို့သဘော.. (သူမ သဘောမပါသည့်အတိုင်းပင်)ညီမလေး….ရှန့်…. (ဆွဲဆွဲငင်ငင်လေး ထူးသံ)ကိုကို ဖြစ်ချင်တာ ပြောရင်… စိတ်ဆိုးမှာလား…လာပြန်ပြီ… သူများကို လာချည်နေတာ… တတ်နိုင်သမျှ စိတ်မဆိုးအောင် ကြိုးစားမယ်… ပြောကြည့်(အောင်မယ်.. သူလေးကလည်း အလာသားပါလား….)ကိုကိုလေ…. ညီမလေးကို… …. ….ဘာဖြစ်လဲ… ညီမလေးကို….လိုးချင်တယ်… (ခပ်တိုးတိုးလေး နားနားကပ်ပြောလိုက်သည်)အိဖြူ မျက်နှာ ရဲတက်သွားသည်။ ထို့နောက် နှုတ်ခမ်းစူကာ..အာ….. ကိုကိုကလည်း… နားရှက်လိုက်တာ…ဟမ်… အဲဒါကို နားမရှက်အောင်… ဘယ်လိုပြောရမှာဒုန်း….ကိုကိုကလည်း… ပိန်းလိုက်တာ… အတူတူနေချင်တယ်တို့… လုပ်ချင်တယ်တို့ လောက်ဆို လုံလောက်ပါ တယ်…..(အိမ်း…. သူလေးက အသုံးအနှုန်းတွေ တော်တော်ကျွမ်းနေပြီပဲ။ စစ်ရော စစ်သေးရဲ့လားမသိ ဆိုသည့် အတွေးက ၀င်လာသဖြင့်)သိပုလေ… ကိုကိုမှ မပြောတတ်တာ… ညီမလေးကို… ဘယ်သူ သင်ပေးတာလဲ…အပြင်ဖြေ ဖြေတဲ့…. အစ်မကြီးတွေ… ပြောပြတာပေါ့….သြော်… တော်သေးတာပေါ့….အာ… ကိုကိုနော်… ဘာ… တော်သေးတာပေါ့လဲ…အာ… ရှုပ်ကုန်ပါပြီကွာ… မဟုတ်ပါဘူး…အဲဒါ ညီမလေး ကြောက်တယ် ကိုကိုရယ်… မလုပ်နဲ့နော်… ဒီအတိုင်းလေးပဲ… ညီမလေး… ညတိုင်း ကောင်း အောင်… လုပ်ပေးမယ်လေ……… ….. …..အေးမောင် နှုတ်ဆိတ်သွားပြီး မျက်နှာ ညိုးသွားသဖြင့် အိဖြူ သနားသွားသည်။ကဲပါ… ကိုကိုရာ…. မနက်ဖြန်ညမှ… ကြိုးစားကြည့်ကြတာပေါ့…. အဲဒါက နာတယ်လို့ပြောတယ်… ကိုကိုရဲ့…ညီမလေးကလည်း… အစပိုင်းလေး ခဏပဲ နည်းနည်းနာတာတဲ့…. နောက်ဆို မနာတော့ဘူးတဲ့…အင်းပါ… အင်းပါ… ကိုကိုရယ်… ကိုကို့သဘော… ဟုတ်ပြီလား… ညီမလေး ဆင်းအိပ်တော့မယ်…မနက်ဖြန်ညမှ… နော်… နော်..အင်း… ညီမလေးက လိမ္မာလိုက်တာ… ဂွတ်နိုက်နော်… အိဖြူ သူ့အခန်း ပြန်ဆင်းအိပ်သည်။ အေးမောင်ကတော့ နောက်နေ့ ကြုံရမည့်ကိစ္စ အတွက် အူ မြူး နေမိသည်။ အန်တီလေးက သူတို့ ကိစ္စ လုံးဝ မရိပ်မိ။ မရိပ်မိအောင်လည်း အေးမောင်က အန်တီလေးရှေ့မှာဆို အိဖြူအပေါ် ခပ်တည်တည်သာ ဆက်ဆံသည်။ ကျောင်း အတူတူ သွားချိန်မှသာ လမ်းမှာ တွတ်ထိုးသည်။ ည ဆယ့်တစ်နာရီလောက်ကျတော့ အန်တီလေး အခန်းဘက် ချောင်းလိုက်သည်။ အန်တီလေး ပိုးလိုး ပက်လက် ထဘီ အပေါ်လန်တက်ကာ အိပ်ပျော်နေသည်ကို ကြည့်မိသော်လည်း ဖီးလ် မလာတော့။ ငါးစိမ်းလေး မြင်ထားတော့ ငါးကင်ကို အနံ့မခံချင်သလို ဖြစ်နေမိသည်။ အိပ်ပျော်နေသည်မှာ သေချာသဖြင့် အေးမောင် ခဲတံနှင့် အိဖြူ အခန်းဘက်ခြမ်းကို ခပ်ဖွဖွလေး တောက်တောက်တောက် ဟု သုံးချက် ခေါက်လိုက် သည်။ နေ့လည်ကတည်းက အချိန်းအချက် လုပ်ထားသည်ပဲ။ ဗဟုသုတ ရှိထားသော အိဖြူက သတိပေး သဖြင့် အေးမောင် လေးတန်းကကျောင်းသားလေး တစ်ဦးကို ဆေးအမည်ပြောကာ အမေ၀ယ်ခိုင်းတယ်ပြော ၀ယ်ဟု သင်ပေးလိုက်ပြီး တားဆေးတစ်လုံး ၀ယ်ခိုင်းထားတာ ရှိသည်။ အန်တီလေးအား ထိုးပေးဖူးသဖြင့် ဆေး အမည်ကို အေးမောင် သိသည်။ အိဖြူက အေးမောင်ဆီက တောက်တောက်သံ ကြားလိုက်တော့ အပေါ် တက်လာသည်။ အခန်းထဲ ရောက်သည်နှင့် တံခါးကို သူမဘာသာ ဂျက်ထိုးပြီး သူမအမေ အိပ်မအိပ် သွားချောင်းသည်။ ထို့နောက် အပေါက်ကို ကမန်းကတန်း ပြန်ပိတ်ပြီး..ကိုကို… မေမေ့ကို ကြည့်ပြီးပြီလား…အင်းလေ….အယ်… ဒုက္ခ…ဘာလို့လဲ…မေမေအိပ်နေတာကြီးက…. ဟီး….ကိုကိုကြည့်တုန်းကတော့ စောင်ထဲမှာ… ကွေးနေတာပဲ…. အိပ်နေပါပြီ… သေချာပါတယ်(လိမ်လိုက်တာပါ)အင်း… အင်း… ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး… ရပြီ… ရပြီ…ကဲ…. ဆရာဝန်ကြီး ဆေးထိုးပါတော့မယ်… ကြွပါခင်ဗျာ…ဟွန့်… သူ ဟွာလုပ်တာ မနာခင်.. ဆေးထိုးတာ အရင်နာရအုံးမယ်….လာပါ… ပွစိပွစိ လုပ်မနေနဲ့… မနာအောင် ထိုးပေးမယ်… အိဖြူ ဒီည ၀တ်လာသည်က စကတ် ဒူးဖုံးလေးနှင့် တီရှပ်ကလေးဖြစ်သည်။ မှောက်ခိုင်းလိုက်ပြီး စကတ်ကို တင်ပါးပေါ်အောင် လှန်လိုက်သည်။ ပင်တီ ၀တ်မလာသဖြင့် ဖြူဝင်းသော တင်ပါးလေးပေါ်လာသည်။ အေးမောင် ဆေးထိုးပြီး သေချာ ဖိချေပေးလိုက်သည်။ မချေလို့ မဖြစ်။ ဆေးထိုးတာ ဆေးခဲပြီး အနာဖြစ်လျှင် ပြဿနာကြီးတော့မည်။ သေချာချေပြီးတော့မှ….အောင်မလေး…. နာလိုက်တာကိုကိုရာ…. မနာအောင် ထိုးပေလို့သာပဲ… ဆရာဝန်လုပ်ရန်… လူနာပြေးမှာ…ကဲပါ… ရပါပြီ… စကားအိုးလေးရဲ့…. သုံးလမှ တစ်ခါဘဲ ထိုးရမှာကို…အယ်… သူပြောပုံက… တစ်နှစ်ပတ်လုံး သုံးလတစ်ခါ ဆေးထိုးပြီး… အ၀ှာပြုမယ်ပေါ့လေ… ဆယ်တန်း မြန်မြန် အောင်ပါစေတော်…ဆယ်တယ်အောင်ရင်လည်း… တက္ကသိုလ်အထိ လိုက်ပြီး…. အဟီး…ဟွန့်… တော်တော်ဆိုးနေတာ…အိဖြူက ဆေးထိုးပြီးတော့ အေးမောင်နား ကပ်ထိုင်သည်။ အေးမောင်လည်း တာဝန်အရ ဘာမှမချွတ်သေး ခင် နမ်း၊ စုပ်၊ နှုးနှပ်ပေးရသည်။ ထို့နောက် အ၀တ်များ အကုန် ချွတ်ပေးလိုက်ပြီး အေးမောင် ကိုယ်တိုင်လည်း အ၀တ်များ ချွတ်လိုက်သည်။ အိဖြူက အိပ်ရာပေါ်မှာ ဆန့်ဆန့်လေး လှဲနေသည်။ အေးမောင် အိဖြူ၏ ပေါင်တံ နှစ်ချောင်းကို ဆွဲဟလိုက်ကာ အဖုတ်ကို ပါးစပ်အပြည့်ငုံ၍ အရသာလေး အရင်ပေးလိုက်သည်။ အိဖြူ ပြီးကာနီး လို့ သံစုံမြည်လာတော့မှ ရပ်လိုက်သည်။ တော်ကြာ ပြီးသွားလို့ မခံချင်တော့ဘူးဆိုရင် ငတ်တော့မည်လေ။ ထို့နောက်..ညီမလေး.. ကိုကို နည်းနည်းကြိုးစားကြည့်မယ်နော်…အင်း… ကိုကို… ဖြည်းဖြည်းလေး… လုပ်နော်…. တအားနာရင်… မလုပ်နဲ့တော့နော်…အင်းပါ…အေးမောင် ပြောပြောဆိုဆိုပင် ဒစ်ဖျားနှင့် အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် ရွှေဘော်ထိုးပေးလိုက်ကာ အစေ့လေးကို ဒုံးကျည်နှင့် ပစ်လိုက်ပြီး နည်းနည်းထိုးသွင်းကြည့်သည်။ အရည်များ ရွှဲအိုင်နေသော်လည်း မ၀င် နိုင်။ အန်တီလေး ကျပ်သည်ဆိုသည်မှာ အိဖြူကို မမီ။ အိဖြူဟာလေးက စိနေအောင် ကြပ်လှသည်။ အေးမောင် နည်းနည်း အားစိုက်သွင်းကြည့်သည်… ချော်ထွက်သွားပြန်သည်…အာ… ကိုကို… ဘယ်လိုတွေ… လုပ်နေတာလဲ… အနေရခက်လိုက်တာ… အဟင့်…အေးမောင် တစ်ချက် ဖိသွင်းလိုက်ပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ထိပ်ဖျား ကွမ်းသီးခေါင်းက ၀င်သွားပြီ။ တစ်ခုခုက ကြားထဲမှ ခံနေပြန်သည်။အားး… နာတယ်… ကိုကို… တော်ပြီ… တော်ပြီ….ညီမလေးကလည်း… နေပါအုံး… ခဏလေးကို…ဟင့်အင်း… နာတယ်… ကိုကိုရယ်…အင်းပါ… ညီမလေးရယ်…. ကိုကို မလုပ်တော့ပါဘူး… (ပြန်မချွတ်သေးဘဲ ချွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်)ကိုကိုရယ်… ညီမလေး နာလို့ပါ… တအားကြီးမလုပ်နဲ့နော်.. ဖြည်းဖြည်းလေး… လုပ်ကြည့်နော်…အင်းပါ… ညီမလေးရယ်… ခဏလေးပဲ… အောင့်ခံလိုက်နော်…အေးမောင် ရှေ့ကို နည်းနည်း ထပ်ဖိသွင်းကြည့်သေးသည်။ မ၀င်တော့ပေ။ ထစ်ကာ ခံနေသည်။ တစ်ချက်တော့ ရင်းရမည်။ အေးမောင်တင်ပါးတွင် အားထည့်ကာ တစ်ချက် အားကုန် သွင်းလိုက်သည်…အားးးးး ကိုကိုရေ… နာလိုက်တာ… အီး… (အော်သည့်အသံက ကျယ်လှသည်.. အခန်းလုံလို့သာ ဘယ်သူမှ မကြားတာဖြစ်သည်)ညီမလေး… ညီမလေး…. မငိုနဲ့တော့နော်…. အဆုံးအထိ ရောက်သွားပြီ… ညီမလေး မခံနိုင်ရင် ပြန်ထုတ် လိုက်မယ်…ဟာ… ကိုကိုကလည်း… အဆုံးထိရောက်မှတော့… ထုတ်မနေပါနဲ့တော့… ထပ်မနာတော့ဘူးထင်တယ်…အင်း… ညီမလေး အနာသက်သာသွားပြီလား…ခုနကတော့.. နာတယ်… ကိုကိုရ… တအားပဲ… အခုတော့.. သိပ်မနာတော့ဘူး… တစ်ဆို့ဆို့ကြီး… တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်နေတယ်…အဲဒါဆို.. ကိုကို နည်းနည်း လှုပ်ကြည့်မယ်လေ…အင်း… အေးမောင် အဆုံးအထိ သွင်းထားသော လိင်တံကို ဖြည်းဖြည်း ပြန်ဆွဲထုတ်သည်။ အိဖြူ၏ အဖုတ်က လည်း တင်းနေအောင် ကြပ်လှသည်။ အေးမောင်၏ လိင်တံနောက် မခွဲမခွာ ကပ်လိုက်လာပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း အပြင် ပြန်ထွက်လာသည်။ အေးမောင် အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။လိင်တံတွင် သွေးစလေးများ ရဲနေသည်။ အခုမှ စိတ်ချမ်းသာသွားသည်။ အိဖြူ အပျိုစစ်စစ်ကလေးပါလား။ သနားလည်း သနားသွားသည်။ စိတ်ထဲတွင် အိမ်ထောင်ပြုရမည့်အရွယ်ရောက်လျှင် အိဖြူကိုပဲ ယူမည်ဟု တွေးလိုက်သည်။ တစ်ဝက်လောက် ရောက်တော့ ပြန်ထိုးသွင်းသည်။ ထိုအချိန်တွင် အိဖြူ၏ အဖုတ်အတွင်းမှ သဘာဝချောဆီများ ထွက်လာပြီ။ အသွင်းအထုတ်က ခုနကလောက် မခက်တော့။ နည်းနည်းတော့ သွက်လာပြီဖြစ်သည်။ အိဖြူလည်း နာကျင် သည့်အသံများအစာ တဏှာမင်သည့် အသံများ ပြောင်းလဲလာပြီ။အား… ကိုကို… ကောင်းလာပြီ… နည်းနည်းလေး မြန်မြန်လေး..လုပ်ပေးနော်…အေးမောင် အထုတ်အသွင်းကို မြန်မြန်လေး ကစားပေးလိုက်သည်။ သူငယ်ချင်းများက မိန်းမ ပထမဆုံးလိုးလျှင် တပ်တာနဲ့ထွက်မှာဘဲဟု သင်ထားတော့ တပ်တာနဲ့ မထွက်ချင်သဖြင့် တပ်ထွက်မဖြစ်စေရေး ည ကိုးနာရီ လောက်ကတည်းက လက်နှင့် တစ်ခေါက် ထုတ်ထားသဖြင့် ပြီးချင်သည့်စိတ်တော့ မပေါ်သေး။ အပျိုစင်မလေး ၏ အဖုတ်အရသာ စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးကိုသာ အပြည့်အ၀ခံစားနေသည်။ အိဖြူလည်း အရှိန်တက်လာကာ ပြန် ပင့်ဆောင့်ပေးတတ်လာသည်။ ဒါကိုတော့ ဘယ်သူမှ သင်ပေးစရာမလိုဘဲ သူ့ဘာသာ အလိုလို တတ်လာခြင်း ဖြစ်မည် ထင်ရသည်။ ဆယ်မိနစ်လောက် အရှိန်မှန်မှန်နှင့် ဆောင့်ပေးနေရာ..ဟင့်.. ကိုကို… အိ ပြီးတော့မယ်… ပြီးတော့မယ်…. အာ့… ရှီး…. ကောင်းလိုက်တာ… ပြီးတော့မယ်… ပြီးပြီ… အား… ပြီးပြီ…အိဖြူပြီးသွားသော်လည်း အေးမောင် မပြီးဘဲ ကျန်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့ မြန်မြန်ပြီးစေရန် အရှိန်ကို တင်ဆောင့် သည်။ မိန်းကလေးများ ပြီးပြီ ဆိုသော်လည်း စိတ်က လျော့ပါးသွားသည်မဟုတ်ဘဲ အရှိန်လေးတော့ ရှိနေရာ အေး မောင်ကို အတင်းဖက်ကာ အဖုတ်ကလည်း ဇိကနဲ ဇိကနဲ ညှစ်ပေးနေသည်။ အေးမောင် ဆယ်ချက်လောက် ထပ် ဆောင့်လိုက်တော့မှ သုက်ရည်များကို အိဖြူ အဖုတ်ထဲသို့ ပက်ဖြန်းပေးလိုက်နိုင်တော့သည်။အာ့…. ကောင်းလိုက်တာ…. ရှီး…ပူပူနွေးနွေးအရည်များ အဖုတ်ထဲသို့ တရဟောစီးဝင်သွားရာ ခုနက ပြီးနေတာတောင် အရှိန်မပျက်သေးသဖြင့် နောက်တစ်ချီ အရသာကောင်းကောင်း ခံစားလိုက်ရသည်။အား… ကောင်းလိုက်တာညီမလေးရာ…. တကယ်…အင်း… ညီမလေးလဲ… ကောင်းတယ် ကိုကို…. တစ်ခါမှ မကြုံဖူးဘူး….ကဲ ကိုကို ညီမလေး သွားအိပ်တော့မယ်… ဂွတ်နိုက်… နောက်ညမှ… ခစ်ခ်စ်.. အိဖြူက ဘယ်လောက်ကြိုက်သွားသည်တော့ မပြောတတ်။ နောက်တစ်ညစာပင် ဘွတ်ကင် ချိတ်သွား သေးသည်။ နောက်ပိုင်း ညများတွင်လည်း အိဖြူ ပုံမှန် တက်လာမြဲပင်။ ဒီအရသာကို အိဖြူရော အေးမောင်ပါ စွဲလန်းနေပြီ။ သောက်လေ ငတ်မပြေ ဆားငံရေကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ နေ့စဉ် သင်ခန်းစာတွေ အသစ်တက် သည်။ အိဖြူ ပုဇွန်တုပ်ကွေးလည်း ခံပေးတတ်နေပြီ။ လေးဘက်လဲ ထောက်ပေးတတ်နေပြီ။ အပေါ်မှလည်း တက်ဆောင့်ပေးတတ်နေပြီ။ တစ်ညတစ်မျိုး မရိုးအောင် လိုးဖြစ်ကြသည်။ ဆော်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က အနေ အထိုင် ပိရိလေတော့ အန်တီလေးကလည်း မရိပ်မိတာ တစ်ပန်းသာသည်။ တစ်လလောက် စခန်းသွားပြီးတော့ အိဖြူ စာမေးပွဲဖြေရန် ကိစ္စနှင့် ရှုပ်သွားသဖြင့် အေးမောင် အကြို အပို့ လုပ်ပေးရုံကလွဲလို့ ဘာမှ အလုပ်မဖြစ်တော့။ အိဖြူကတော့ စာမေးပွဲ ပြီးလျှင် ကိုကို့သဘော ဟု နှစ် သိမ့်သည်။ ကိုးတန်းက စောဖြေသဖြင့် အေးမောင် စာမေးပွဲပြီးသွားသော်လည်း ရွာမပြန်ဘဲ ဆယ်တန်းအတွက် ကျူရှင်ကြိုအပ်မည်ဆိုကာ အေးမောင်ကို ရွာပြန်မလွှတ်ပေ။ အမေ့ကို လွမ်းသော်လည်း အန်တီလေးစကား ကို နားထောင်လိုက်သည်။ အမေလုပ်သူကလည်း ပြန်မလာစေလို။ ရွာရောက်လျှင် ပျက်စီးမှာကိုစိုးသည်။ အန်တီလေးဆီမှာ ထားလိုက်တော့ အေးမောင် လိမ်မာလာသည်ဟု ပြောသည်။ တစ်ခေါက်တလေ လာလည် ရုံကလွဲလို့ အမေက သိပ်မလာဖြစ်ပါ။ အမေပြောတာ မှန်ပါသည်။ အေးမောင် လိမ်မာလာပါသည်။ အန်တီလေး၏ ဆုံးမမှုကြောင့်။ တကယ်တော့ လိမ္မာတာက နည်းနည်း၊ လိင်မာတာက များများ ဖြစ်မလားပဲ။ အိဖြူ စာမေးပွဲကာလတွင် ပစ်ထားသည့် ငါးကင်ကို ပြန်မက်မောရတော့သည်။ အိဖြူ ကျောင်းသွားသည်နှင့် အန်တီလေးက အေးမောင်ကို ခေါ်တော့သည်။သမီးရှိနေတာ့… မလွတ်လပ်ဘူး မောင်လေးရယ်… လွမ်းတယ် သိလား…အန်တီလေး အေးမောင်ကို ချွဲနေသည်။မောင်လေးလဲ မမကို လွမ်းတာပေါ့… မမ အရင်လို မလုပ်တာကြာပြီနော်…လက်နဲ့လုပ်တာကိုပြောတာလား.. မောင်လေး..အင်း….မောင်လေးနဲ့… တွေ့ပြီးတော့… လက်နဲ့ လုပ်ရတာ အာသာမပြေလို့…. မလုပ်တော့တာ… ဒီလိုပဲပေါ့… ညီမလေးမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့… မောင်လေးနဲ့ ပျော်ရမှာပဲ… နော့်…နေ့တိုင်း တွေ့နေရသော်လည်း ယခုလို မတွေ့တာ ကြာပြီဖြစ်သဖြင့် အိဖြူ ကျောင်းသွားစဉ် နေ့ခင်းကြောင် တောင်… အလွမ်းသယ်နေကြသည်…အန်တီလေးက အေးမောင်ကို ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဟု မေးသဖြင့်….မမ… မောင်လေး… ဗီဒီယိုကားကြည့်ဖူးတယ်… သိလား… အဲဒီထဲကလို အနောက်ကနေ.. လုပ်ချင်တယ်…အန်တီလေးက အေးမောင် စိတ်တိုင်းကျ လေးဘက်ထောက်ကလေး နေပေးသည်။ အေးမောင် အနောက် ကနေ စိတ်တိုင်းကျ ဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။ အန်တီလေးလည်း ကျေနပ်ပါသည်။ ဒီပိုဇေရှင်က မိန်းကလေး အတွက် ပိုထိသည်ပဲ။ တစ်ချီပြီးတော့ နောက်တစ်ချီ ထပ်လုပ်ဖို့ အရှိန်ယူရပြန်သည်။ ရယ်ဒီဖြစ်လာတော့ အေး မောင် အတတ် ဆန်းထွင်တော့သည်။ လီးကို အဖုတ်ဝတွင် မတေ့ဘဲ စအိုဝတွင် သွားတေ့သည်။ဟဲ့… အို… မောင်လေး… အဲဒီကို မလုပ်နဲ့လေ…မမကလဲ… မောင်လေး… လုပ်ကြည့်ချင်တယ်…မောင်လေးကလည်း… အဲဒါလုပ်ရင်… မမ ခံနိုင်ပါ့မလား မသိဘူးရယ်…လုပ်ပါ… မမကလည်း… မောင်လေး… တစ်ခါပဲ လုပ်မယ်… မမနာတယ်ဆို… မလုပ်တော့ဘူး…နေအုံး… အဲဒါဆို… ဒီအတိုင်း မလုပ်နဲ့… မမ လုပ်ပေးမယ်…အန်တီလေးက သူမခုတင်ဘေးနားမှ အံဆွဲကို ဖွင့်လိုက်ကာ ဘူးလေးတစ်ဘူးနှင့် အထုပ်ကလေးတစ်ထုပ် ယူလာသည်။ဒါ ဘာလဲသိလား…အဲဒါ ကွန်ဒုံးလေ…. လိုးရင် စွပ်တဲ့ဟာ မဟုတ်လား…ဟဲ့… မောင်လေး… ဘယ်လိုသိ….မမကလဲ… အေအိုင်ဒီအက်စ်ပညာပေးစာစောင်မှာ… ပါတယ်လေ…သြော်… တော်သေးတာပေါ… အန်တီလေးက အဖော်ဂျယ်လ်ဘူးမှ ဂျယ်များ ယူလိုက်ကာ အေးမောင် လိင်တန်ကို ရွှဲနေအောင် သုတ်ပေးပြီး အေးမောင်ကို ဘူးပေးကာ သူမ စအိုထဲသို့ရော စအိုတစ်ဝိုက်သို့ပါ သုတ်ခိုင်သည်။ ထို့နောက် အေးမောင်လိင်တံတွင် ကွန်ဒုံးကို သူမကိုယ်တိုင် စွပ်ပေးပြီး စအိုဝတွင် တေ့ပေးလိုက်သည်။ ဒီအတိုင်း လုပ်လို့ရသော်လည်း ညစ်ပတ်ကုန်မှာစိုးလို့ဟု ပြောသည်။ အေးမောင် တေ့ထားသော လိင်တံအား အားထည့်ကာ ဖိသွင်းလိုက်သည်။ အန်တီလေးကတော့ သိပ် မအော်ပါ။ အီး….. နာလိုက်တာ… ဟင့်.. ဟု တစ်ချက်ညည်းက တအိအိ နှင့် အဆုံးဝင်သွားသည်။ ခေါင်းဝင်ရင် ကိုယ်ဆန့်သည်ပဲ။ ဒါကျတော့ တော်တော်ကြပ်လှသည်။ အိဖြူ၏ အဖုတ်လောက်ပင် ကြပ်သည်။ ပထမတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆောင့်နေရင်း မြန်မြန် ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ အန်တီလေးလက်က သူမအစေ့ကို သူမဘာသာ ကစားသည်။ အေးမောင် ပြီးသွားတော့ သူမလည်း တစ်ပြိုင်တည်း လိုက်ပြီးသွားကာ အရည်အနည်းငယ်က အဖုတ်ထဲမှ မွှေ့ယာပေါ်သို့ တောက်ကနဲ ကျသွားသည်။အန်တီလေးနှင့် ညတိုင်းလိုလို နေ့တိုင်းလိုလို အိဖြူ စာမေးပွဲကာလအတွင်း အလုပ်ဖြစ်သည်။ အိဖြူနှင့်မတူသည့်အချက်က အန်တီလေးက ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိသည်။ သူမကိုယ်တိုင် ကောင်းအောင် ခံတတ်သလို အေးမောင်ကိုလည်း ကောင်း အောင် လုပ်ပေးတတ်သည်။ ထို့အပြင် တစ်တစ်ခွခွ စကားလုံးများလည်း ပြောရဲသည်။ သို့သော် အသက် အရွယ်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကို ကျော်လာပြီဖြစ်သဖြင့် တင်းကြပ်မှုတော့ သိပ်မရှိတော့။အေးမောင်မှာ လိင်တံမှ လျော့ပါးသွားသည့်အရသာနှင့် သူ့အား အလိုလိုက်အကြိုက် ဆောင်တတ်သော ယုယမှုကို တစ်ပြိုင်တည်း ခံ စားနေရတော့ အိဖြူကို သတိရသော်လည်း သိပ် မတမ်းတဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အိဖြူက အပျိုလေး ဖြစ်သဖြင့် စေးစေးပိုင်ပိုင် ကြပ်ထုပ်ကာ အားသန် လှသော်လည်း သူ့ထက်အငယ်ဖြစ်သဖြင့် ကလေးဆိုးဆိုးသည်ကို ယုယမှုပေးရတာကလည်း အရသာတစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ယောက် တစ်မျိုးစီပေါ့လေ။အိဖြူ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေတော့ သင်္ချာဖြေသည့်နေ့တွင် မျက်နှာ မကောင်း။ သူမက နဂိုကတည်းက သင်္ချာ ညံ့ပါသည်ဆိုမှ ဒီနှစ် သင်္ချာ သတ်သည်တဲ့။ တကယ်တော့ တစ်အုပ်လုံး ကုန်အောင် တွက်နိုင် လေ့ကျင့်နိုင်ရင် သတ်သည်ဆိုတာ မရှိပါ။ သို့သော် သူမက သင်္ချာကို အလွန်ကြောက်သည်ဖြစ်ရာ ဒီနှစ်လဲ အောင်မှတ်သာသာလေးသာ ဖြေနိုင်သည်။ အောင်ဖို့ပင် မသေချာဟု ဆိုသည်။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ ဖြေနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ အိဖြူ စာမေးပွဲရက်များတွင်တော့ ဘယ်ကျူရှင် မှ မသွားတော့ပေ။ အိမ်တွင်သာ စာတွေ လှိမ့်ကျက်နေသည်။ အေးမောင်နှင့် အန်တီလေးအဖို့ အခွင့်လည်း မသာ၊ အခွင့်သာလည်း စိတ်သိပ်မပါကြလှပါ။ စာကျက်နေသည့် အိဖြူအတွက်သာ လက်ဖက်ရည်ဖျော်တိုက် လိုက်၊ လက်ဖက်သုပ်ကျွေးလိုက်နှင့် အချိန်ကုန်သွားကြသည်။ သို့သော် ကံကောင်းတာလား ကံဆိုးတာလား မပြောတတ်ချေ၊ အိဖြူ ရူပဗေဒ ဖြေသည့်နေ့တွင်ပင် အန်တီလေး၏ တစ်ဦးတည်းသော အစ်ကိုကြီး အသည်း အသန် ဖြစ်လို့ဆိုပြီး ကြေးနန်းစာ ၀င်လာသဖြင့် အေးမောင်ကိုပင် အိဖြူလေးကို ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ အိမ်ကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့၊ လျှောက်မသွားဖို့ မှာစရာတစ်ပုံတစ်ပင် မှာကြားပြီး သင်္ဘောနှင့် ထွက်သွားရတော့ သည်။အန်တီလေး၏ အစ်ကိုကြီးက ကော့သောင်းဘက်မှာ နေတာဖြစ်ရာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက ခက်ခဲ လှသည်။ ထိုအချိန်က ရထားတွေ ကားတွေကလည်း အလွယ်တကူ သွားလို့မရသေး။ ရထားနှင့် သွားရသည် မှာလည်း စိတ်မချရ။ ဓားပြတွေက ရထားလမ်းကို ခဏခဏ မိုင်းခွဲကြသဖြင့် စိတ်မချရ။ ကားနှင့် သွားပြန်လျှင် လည်း ခရီးစရိတ် တအား ထောင်းသည့်အပြင် တစ်ဆင့်တည်း မရောက်၊ သူမတို့နေသည့်မြို့မှ ရန်ကုန်သို့ သင်္ဘောစီး၊ ရန်ကုန်မှ မော်လမြိုင်သို့ ကား(သို့မဟုတ်)ရထားစီး၊ မော်လမြိုင်ရောက်မှ ရေး အထိ ကားစီး၊ ရေး မှ ထားဝယ်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် မြိတ်- ကော့သောင်းအထိ နည်းသည့်ခရီးမဟုတ်ချေ။အိဖြူ ရူပဗေဒပြီးလို့ ထွက်လာတော့ အိဖြူကို ပြောပြလိုက်သည်။ အိဖြူ မျက်နှာလေး ညှိုးသွားသည်။ သူမလည်း မိခင်ဖြစ်သူ ခရီးထွက်သွားတော့ အားငယ်ပေမပေါ့။ အိဖြူကို အေးမောင် တတ်သမျှမှတ်သမျှ အား ပေးရသည်။ ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ် ကျွေးမွေးရတော့သည်။ ထိုရက်ပိုင်းအတွင်း အေးမောင် အိဖြူကို စိတ်နှင့် ပြစ် မှားမိသော်ငြား အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေလို။ ကိုယ့်ဘာသာကိုသာ စိတ်ဖြေသိမ့်ရသည်။စာမေးပွဲပြီးသွားသည့်နေ့တွင် အိဖြူ ပျော်ရွှင်မြူးတူးကာ ခုန်ပေါက်ထွက်လာသည်။ စာမေးပွဲဖြေနိုင်လို့ မဟုတ်။ စာတွေဖိစီးထားရာမှ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အေးမောင် သွားကြိုလာတော့ အိဖြူ ဆိုင် ကယ်နောက်မှ ခါးကို တင်းတင်းဖက်ကာ လိုက်ပါလာသည်။ အိမ်ကို ရောက်သည်နှင့် ထမင်းစားပြီး အိပ်ချင်သည်ဟု ဆိုသည်။ အေးမောင် သူမအိပ်ခန်းရှေ့ကို လိုက်ပို့သည်။ အိဖြူက ဒီညက စပြီး မေမေပြန် မလာမချင်း သူမအခန်းထဲမှာ လာအိပ်ပေးပါ။ အောက်ထပ်မှာ တစ်ယောက်တည်း အိပ်ရတာ ကြောက်တယ် ဟု ပြောသည်။ အေးမောင်ကို ပြန်မလွှတ်တော့။ သူမအိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားပြီး ကျောင်းမှ ပြန်လာသည့် အဖြူအစိမ်း ပင် မချွတ်တော့ဘဲ အေးမောင် လက်မောင်းကို ခေါင်းအုံးကာ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်တော့သည်။အေးမောင် ရင်ထဲတွင် တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေသည်။ အိဖြူနှင့် မကြာခဏ ကိုယ်လက်နှီးနှောဖူးသော်လည်း အိမ်တွင် နှစ်ယောက်တည်း မဟုတ်၊ အန်တီလေး ရှိနေသည်။ ယခုမူ အိမ်တွင် သူတို့နှစ်ယောက်တည်းသာ ရှိ သည်ဖြစ်သဖြင့် စိတ်များ လှုပ်ရှားနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုမှ စာမေးပွဲပြီးလာသည့် အိဖြူကို နဖူးလေး ကို တစ်ချက်သာ နမ်းလိုက်ကာ သူမသဘောကျ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်စေလိုက်သည်။ညနေစောင်းတော့ အိပ်ရာ နိုးလာသည်။ကိုကို… ကိုကို… ထတော့…. မိုးချုပ်တော့မယ်…. အိဖြူ လှုပ်နှိုးသဖြင့် အေးမောင်လည်း နိုးလာသည်။ကိုကို… ဒီည … အပြင်မှာ… ထွက်ကဲမယ်လေ…ဟင်… ညီမလေးကလည်း….ဟာ… ကိုကိုရာ…. တစ်ရက်တစ်လေပဲ….ကဲတာ ဟုတ်ပါပြီ…. ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ….အင်း….. ဘယ်ကိုသွားရပါ…. ဟာ.. သိပြီ… ဒီလိုလုပ်… ကိုကို…ဘာများပါလိမ့်….ကိုကို ထမင်းမချက်ရသေးဘူးမို့လား…. အပြင်ထွက်ပြီး…. ထမင်းစားမယ်… အအေးဆိုင်ထိုင်မယ်… ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာ ကိုကို ဘာမှ မလုပ်ရဘူးနော်….ဘာကိုလဲ… ညီမလေးရ…ဟာ… မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပြန်ပြီ…. ညီမလေးကို… ဘာမှ… မလုပ်ရဘူး… အဲဒါ… အဲဒါ…ညီမလေးကို… ကိုကိုက….ဟာ့…. ကိုကို…. အ ချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့… ညီမလေး…. ဆယ်တန်းစာမေးပွဲပြီးတာနဲ့… ဘာညာ… သာရကာ… လုပ်မယ်… စိတ်ကူးနေတာမို့လား….ဘာလဲ… ဘာညာသာရကာ…ဟာ… ကိုကို… တော်ပြီ… မပြောတော့ဘူး…မသိလို့ပါဆို…အပြင်သွားရင်… ညီမလေးကို… ဟိုကိုင်ဒီကိုင်… ဟိုနှိုက်ဒီနှိုက်… မလုပ်ရဘူး… အိမ်ပြန်ရောက်မှ… ကိုကို့ သဘောရှိ….ဘာကိုကိုင်ပြီး…. ဘာကို…(ဘုန်း !!!!!) အေးမောင်ကျောကို အိဖြူ တအားထုပစ်လိုက်သည်…. အေးမောင်နှင့် အိဖြူ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့် မြို့တစ်ပတ် ပါတ်သည်။ အိဖြူက တော်တော်ပျော်နေသည်။ မိခင် အိမ်မှာမရှိတော့ စိတ်လွတ်လပ်ကာ ပေါ့ပါးနေသည်လည်း ဖြစ်သည်။ အေးမောင်တွင်လည်း စုဆောင်း ထားသော မုန့်ဖိုးများ ရှိသည်။ အိဖြူတွင်လည်း စုထားသည့်ငွေများ ရှိသည်။ နှစ်ယောက်သား စိတ်ကြိုက် ကဲ လို့ ရသည်။ ထမင်းဆိုင်ဝင်ကာ ညစာ စားသည်။ ထို့နောက် အအေးဆိုင်လေး တစ်ဆိုင် ၀င်ထိုင်သည်။ အအေးဆိုင် နာမည်က လရိပ်ငြိမ်။ ဆိုင်၏ နာမည်နှင့် လိုက်ဖက်အောင်ပင် တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်လွန်းလှသည်။ ငြိမ့်ငြောင်းသော တီးလုံးလေးတစ်ခုသာ ပျံ့လွင့်နေသည်။ တစ်ခုံနှင့် တစ်ခုံကြား အတော်လေး ဝေးသည်။ ခြံ ကျယ်ကြီးထဲမှာ ဆောက်လုပ်ထားကာ မှိန်ပျပျ အော်တိုမက်တစ်မီးဆိုင်းလေးများ ချိတ်ဆွဲထားသည်မှာ ကြယ် ပွင့်လေးများ လင်းလက်နေသကဲ့သို့ ရှိလှသည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်ကာ ဖာလူဒါ တစ်ခွက်စီ မှာသောက်သည်။ အေးမောင် အိဖြူ၏ လက်ကလေးကို ရုတ်တရက် အုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ညီမလေး…. ကိုကို… ပြောစရာရှိတယ်….အင်း…. ပြောလေ ကိုကို..ညီမလေး… စိတ်မဆိုးဘူး မလား….ဟင်… ဘာပြောမယ်မှန်းလဲ… မသိဘဲနဲ့….အင်းလေ…. စိတ်ဆိုးမှာစိုးလို့.. ကြိုပြောထားတာပေါ့….မသိဘူး…. ဆိုးသင့်ဆိုးမှာပေါ့…. ပြော…ညီမလေးကို…. ကိုကို…. ချစ်တယ်….ဟင်…. ကိုကို…. ညီမလေးကို… ရည်းစားစကားပြောတယ်… မေမေနဲ့… တိုင်မယ်…ဟဲ့…. ရှူး…. တိုးတိုး…. မလုပ်နဲ့လေ…ဟုတ်တယ်…. မောင်နှမချင်း… ရည်းစားစကားပြောတယ်… တိုင်မှာ…ဟာ… ညီမလေးကလဲ… အဲလိုဆို… မပြောတော့ဘူး…ဟမ်… မရဘူးလေ… ပြောပြီးတာ ပြောပြီးသွားပြီ… တိုင်မှာညီမလေးကလဲကွာ… လိမ်မာပါတယ်…ဟင့်အင်း…. မလိမ်မာဘူး…. တိုင်မှာပဲ….ညီမလေးကလဲ…. ကိုကိုပြောပြမယ်… ညီမလေးနဲ့ ကိုကိုက ချစ်သူအဆင့်ထက်တောင် ကျော်နေပြီပဲကို…ကိုကိုကလဲ… ညီမလေးက… အခုမှ.. ကျောင်းတက်တုန်း…. ယောက်ျားမယူချင်သေးဘူး….အာ…. ဘယ်သူက ယောက်ျားယူခိုင်းနေလို့လဲ….အဲဒါဆို ဒီလိုလုပ်… ညီမလေး… ရည်းစားမရှိဘူးမို့လား….မရှိဘူးလေ… ဘာဖြစ်လဲ…ညီမလေး ရည်းစားထားတော့မယ်ဆို… ကိုကို့ကိုပဲ..ရည်းစားထားပေါ့….မထားချင်ပါဘူး… ရည်းစား… ဘာလုပ်ဖို့… ကိုကိုနဲ့အတူတူနေရတာ ပျော်စရာကောင်းတာပဲ… ရည်းစား ထားရင် စိတ်မချရတာနဲ့… သူများနောက်ပါမှာ စိုးရတာနဲ့…အင်းလေ… ကိုကို့ကျတော့ရော… စိတ်မချရဘူးလား…ဟင့်အင်… ကိုကိုလည်း စိတ်မချရဘူး… အချိန်တန်ရင်… ရည်းစားရသွားမှာ…ဟင့်အင်း… မထားဘူး… ကိုကိုပြောပြမယ်… ညီမလေး ကိုကို့ကို ရည်းစားအဖြစ် မထားရင်နေ… တကယ်လို့ အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင် ကိုကိုနဲ့ပဲ ယူရမယ်… ကိုကိုလည်း ရည်းစားတစ်ခြားတစ်ယောက်မထားဘူး… မိန်း မယူရမဲ့ အချိန်ရောက်ရင် ညီမလေးကိုပဲ… ယူမယ်… ညီမလေးလဲ ရည်းစားမထားနဲ့… ကဲ… ဘယ်လိုလဲ..အိုကေ… ကိုကိုပြောတဲ့အတိုင်း တည်ပစေ… ကိုကိုရည်းစားထားတာနဲ့… ကိုကို့ရည်းစားကို လိုက်သတ်မှာ… ညီမလေး ရည်းစားထားရင်… ညီမလေးရည်းစားကို သတ်ပစ်လိုက်…(ဟိုက်… ကြမ်းကုန်ပြီ…. တမျိုးကြီးနော်…. ဟိုဒင်းဟိုဟွာ လုပ်ပြီးပြီ… ရည်းစားအဖြစ်တော့လည်း မဟုတ်ပြန် ဘူး…. ရည်းစားလည်း မထားရဘူးဆိုတော့ကာ.. ဘာထူးမလဲ… အိဖြူ၏ အတွေးကို အေးမောင် မတွေးတတ် လောက်အောင် ဖြစ်မိသည်၊ အင်းလေ… ရှိစေတော့… အခုလည်း ရည်းစားထားရတာနှင့် ဘာမှ မကွာခြားတော့ ချေ)ကဲ… ညီမလေး… ပြန်ကြစို့… ဆယ်နာရီထိုးတော့မယ်…ဟွင်း. ဟွင်း… ကိုကိုနော်… သိနေတယ်…ဟဲ… ဟဲ…. :-X အေးမောင်တို့ အိမ်ပြန်လာကြသည်။ အန်တီလေး အိပ်မအိပ် ချောင်းကြည့်စရာ မလိုတော့။ စိတ်လွတ် ပေ့ါပါးစွာ အိမ်ထဲသို့ ၀င်လိုက်သည်။ ထို့နောက် အိဖြူ အခန်းထဲသို့ လိုက်သွားသည်။ အခန်းထဲသို့ ရောက်သည်နှင့် အိဖြူကိုယ်လုံး အိအိလေးကို အေးမောင် အတင်းပွေ့ဖက်ကာ ဆာလောင်မွတ်သိပ်သော အနမ်းကြမ်းကြမ်းများ ပေးလိုက်မိသည်။ အိဖြူက စပန့်သားအင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီ ၀မ်းဆက် ပွပွကို ၀တ်ထားသည်ဖြစ်ရာ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ထိတွေ့နေရသလို ဖြစ်နေသည်။မတ်တပ်ရပ်လျှက်နှင့်ပင် အိဖြူ၏ ခါးကျင်ကျင်လေးကို ပွေ့ဖက်ထားကာ ရင်ချင်းအပ် နမ်းစုပ်နေရင် လက်တစ်ဖက် က တင်ပါးအစုံကို ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ တင်ပါးနှစ်လုံးကြားကို လက်ချောင်းများနှင့် စုန်ခြည်ဆန်ခြည် ကစားပေးလိုက်သည်။အိဖြူ မောဟိုက်စွာ အေးမောင်၏ အနမ်းများကို တုန့်ပြန်မိသည်။ မျက်လုံးများကလည်း ရမ္မက်ဆန္ဒ ပြင်းပြနေဟန် ရီဝေနေသည်။ အေးမောင် သူမကို ခုတင်ပေါ်သို့ တွန်းလှဲလိုက်သည်။ အိဖြူကလည်း အလိုက်သင့် ပါသွားသည်။ အိဖြူက မွှေ့ယာအထူကြီးနှင့် အိပ်စက်သည်ဖြစ်ရာ ကိုယ်လုံးလေး မြုပ်ဝင်သွား ပြီး ပြန်ခုန်တက်လာသည်။ အေးမောင် အိဖြူ၏ စပန့်သား အင်္ကျီလေးကို အောက်နားစမှ ကိုင်ကာ ဆွဲချွတ်လိုက် သည်။ အိဖြူ ဘာမှ ငြင်းဆန်ခြင်းမပြုဘဲ အလိုက်သင့် လက်ကလေး မြှောက်ပေးသည်။ဘောင်းဘီကိုလည်း ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ကာမခလုတ်များကို တစ်ခုချင်း ဖွင့်ထုတ် တော့သည်။ အိဖြူ တအား ထန်နေမှန်း သိတော့ အေးမောင် သိပ်အချိန်ဆွဲမနေလိုတော့ပြီ။ အိဖြူ၏ ပေါင်တံ သွယ်သွယ်လေး နှစ်ချောင်းကို ဆွဲခွာလိုက်ပြီး ၀င်ရောက်နေရာယူလိုက်ကာ လျှာဖျားဖြင့် အရည်ကြည်လေးများ တစိမ့်စိမ့် ထွက်ကျနေသော အဖုတ်ကလေးအား အားရပါးရ လျှက်ပစ်လိုက်သည်။အစေ့လေးကို လျှာနှင့်ထိုးလိုက်၊ အကွဲကြောင်းလေးထဲ စုန်ချည်ဆန်ချည် လျက်လိုက် လုပ်နေရာ အိဖြူ သိပ် စိတ်မရှည်ချင်တော့။အာ.. ကိုကို.. အဲဒီလို မလုပ်နဲ့တော့… ညီမလေး မနေနိုင်တော့ဘူး… လုပ်တော့လေ…အိဖြူက ဒီလို တောင်းဆိုလာတော့လည်း အေးမောင် နှူးနှပ်နေစရာ မလိုအပ်တော့သဖြင့် ပရိုစီဂျာတွေ အားလုံးကို ကျော်လွှားလိုက်ပြီး ညီတော်မောင်ကို တွင်းဝတွင် တေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိသွင်းလိုက်တော့ သည်။ အန်တီလေး အိမ်တွင် မရှိသဖြင့် ခါတိုင်းလို တိုးတိုးလေး မညည်းတော့ချေ၊ အိဖြူ စိတ်ထဲ ရှိသလောက် ဖွင့်အန်ထုတ်တော့သည်၊ တစ်ခန်းလုံးလည်း လိုးသံ ဆောင့်သံ ကျွက်ကျွက်ညံလျှက် အော်သံ ညည်းသံ ပွက်လောညံနေတော့သည်။အေးမောင်နှင့် အိဖြူ ပြိုင်တူလိုလိုပင် ပြီးသွားသဖြင့် တစ်ယောက်ပေါ် တစ်ယောက် ထပ်ကာ အမောဖြေနေသည်။ အိဖြူကလည်း လှောင်အိမ်ထဲမှ လွတ်သည့်ငှက်ကလေးလို ဖြစ်နေ ရသည့်အထဲ မိခင်ဖြစ်သူ ခရီးသွားနေသဖြင့် လွင့်လိုရာလွင့် ပျံလိုရာ ပျံနိုင်သည့်အနေအထားဖြစ်နေရာ အေး မောင်နှင့် စိတ်တူကိုယ်တူ ဖြစ်နေသည်။ညီမလေး…. ကိုကို… အကြံပေးမယ်…ဘာအကြံလဲ… ကိုကို…ဒီအမွှေးလေးတွေ…. ရိတ်ပစ်လိုက်ပါလား…. အေးမောင်က အိဖြူ၏ အဖုတ်မွှေးလေးတွေကို လက်နှင့် ဖွနေရင်း ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်…ဟမ့်… ကိုကိုကလည်း… အဲဒီအတိုင်းက… ဘာဖြစ်လို့လဲလို့…သွားကြားညပ်လို့….အာ… ကိုကိုက… ညစ်စုတ်ပြီ….တကယ်ပါဆို…..ညီမလေး မရိတ်ရဲဘူး၊ ဓားရှမှာစိုးလို့… ကိုကို ရိတ်ပေးလေ…. အေးမောင် ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲ ကျသွားသည်။ တောရှင်းလင်းရေး စီမံကိန်း စတင်ရန် ဂျုတ်ဘူး ပြေးယူသည်။ ဒါက သူ နှုတ်ခမ်းမွှေး ရိတ်နေကျဂျုတ်ဘူး၊ ဘလိတ်ဓား အသစ်ရှိသေးသည်။ ဒီနေရာမှာ အဆင် ပြေဖို့… ကမန်းကတန်း ပြေးယူ အသုံးချလိုက်ရတော့မည်။ ဒါနဲ့ ထပ်ရိတ်တော့ ဘာဖြစ်သေးလဲ။ ပါးစပ်ထဲတောင် တစ်ခုလုံး ၀င်နေပြီးမှတော့ ဂျုတ်ဘူး သုံးဖို့လောက် တွန့်တို မနေတော့ပါ။ ဂျုတ်ဘူး ယူလာပြီး အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာတော့ အိဖြူက အနေအထားမပျက် ရှိနေသေးသည်။ ပြီးမှ သတိရလို့ ရေခွက်နှင့် ဆပ်ပြာခွက် ရေချိုးခန်းထဲမှ ပြန်ဝင်ယူရသေးသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာ စုံလင်တော့မှ လုပ် ငန်း စတင်ရသည်။ အိဖြူက ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အစွမ်းကုန် ကားထုတ်ပေးထားကာ ငြိမ်ငြိမ်လေး နေပေးသည်။ ဓားထိမှာ ကြောက်လို့ ငြိမ်နေတာဖြစ်သည်။ အေးမောင် ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေ တဖွားဖွားနှင့် ရိတ်ပေးလိုက်ရာ အမွှေးများ ပြောင်စင်သွားကာ ဖြူဖွေးလှပစွာ မို့မို့လေး ဖောင်းအိနေသော အဖုတ်ကလေးကို မြင်ရတော့သည်။ကဲ…. ညီမလေး…. ကြည့်လိုက်…. လှသွားပြီ…..အင်းပါ…. ကိုကို သဘောကျရင်ပြီးတာပါပဲ….ညီမလေးက… မကြိုက်ဘူးလား….ကိုကိုကြိုက်တော့… ညီမလေးလဲ ကြိုက်တာပေါ့လို့… အေးမောင်နှင့် အိဖြူတို့ သောက်လေ ငတ်မပြေသည့် ဆားငံရေကိုသာ မက်မောစွာ မှီဝဲကြသည်။ အချိန်တွေ ဘယ်လောက်ကုန်သွားသည်မသိ။ နှစ်ယောက်စလုံး မဟန်နိုင်သည့် အဆုံးတွင် တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ထပ်ကာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စွာ အိပ်မောကျသွားကြတော့သည်။ နောက်နေ့တွေမှလည်း ထို့အတူပင်။ အန်တီလေးအခန်းထဲမှ လွဲ၍ ကျန်သည့် ရေချိုးခန်း၊ မီးဖိုခန်း ပါ မကျန် သူတို့နှစ်ဦးအတွက် သာယာသည့် ဘုံဗိမာန်လေးများ ဖြစ်လို့နေကြသည်သာ။ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ပင် သိပ်မထွက်ကြတော့။ သူတို့နှစ်ဦးမှာ ချစ်သူရည်းစား အဆင့်ကိုပင် ကျော်လွန်နေကာ ချစ်စ ကြင်စ ဇနီးမောင်နှံ လို ဖြစ်နေကြတော့သည်။ အေးမောင်ကလည်း အန်တီလေးနှင့် အတွေ့အကြုံ စုံပြီးဖြစ်နေရာ အန်တီလေးက အေးမောင်ကို သူမ လိုချင်သလို ပုံသွင်းခဲ့သလို သူကလည်း အိဖြူကို လိုချင်သလို ပုံသွင်းယူသည်။ အိဖြူကလည်း အေးမောင် လိုချင်သမျှ ဘာတစ်ခုမျှ ငြင်းဆန်သည်မရှိချေ။ တစ်နေ့တွင် အေးမောင်က သူမအား တောင်းဆိုသည်။ညီမလေး… ကိုကို… ပူဆာမလို့….ဘာလဲ… ကိုကိုရဲ့…ညီမလေးကို…. အနောက်ကနေ…. လုပ်ချင်တယ်…ဟင်းနော်… ကိုကို… ဘယ်ကနေ အတတ်ဆန်းတွေ တတ်လာလဲ….ညီမလေးကလဲ… ဟိုတစ်ခါ ကြည့်တဲ့ အခွေထဲကလိုမျိုးလေ….အာ.. ကိုကိုကလဲကွာ… အဲဒါ တိရစ္ဆာန်တွေ လုပ်သလိုမျိုးကြီးကို…ညီမလေးကလဲ… မဆိုင်ပါဘူး…အင်းပါ… ကိုကို့သဘော… ဟုတ်ပြီလား… အိဖြူက ခါးခါးသီးသီး မငြင်းဆန်ပါ။ အေးမောင် အလိုကျပင် ခုတင်ပေါ်တွင် လေးဘက်ကလေး ထောက်ပေးသည်။ အေးမောင်ကလည်း သူမ၏ ခါးလေးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုပ်ကိုင်ကာ အနောက်မှ အဖုတ်ဝ သို့ တေ့လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဖြည်းဖြည်းချင်းပင် ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ မဆွတ်ခင်က ညွှတ်ချင်၊ မခူးခင်က ကြွေချင်၊ မစားခင်က ၀ါးချင်စရာအရည်ရွှမ်းနေသဖြင့် ခဲရာခဲဆစ် မဟုတ်ဘဲ လျှောလျှောရှူရှူပင် ၀င်သွားသည်။အာ့… ကိုကို… ဖြည်းဖြည်း… တအားထိတယ်…အင်းပါ… ညီမလေးရဲ… ဖြည်းဖြည်းပဲ လုပ်မယ်…အား… ကိုကို… ထုံးစံအတိုင်းပင် ချစ်တေးသံစဉ်များ ဆူညံသွားသည်။ အေးမောင်က ညတိုင်း စားနေရသဖြင့် သုက်ကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းထားနိုင်သည်။ အိဖြူက တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင်ဖြစ်နေသဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပြီး သွားရလေသည်။ အဖုတ်ထဲမှ လျှံထွက်လာသော အရည်များသည် မွှေ့ရာပေါ်သို့တိုင်အောင် စီးယိုကျလာ သည်။အိဖြူ နှစ်ခါသုံးခါ ဆက်တိုက်ပြီးသွားပြီးနောက် အိဖြူကျောပေါ်တွင်မှောက်ကာ တွင်းစိမ်ထားလိုက် သည်။ အမောပြေမှ အဖုတ်ထဲမှ လီးကို ဖြည်းဖြည်း ဆွဲနှုတ်လိုက်ရာ လေခိုနေသဖြင့် ရှူးကနဲပင် အသံထွက်သွားသည်။ အိဖြူလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ထူးကဲလာသော ကာမအရသာစက်ကွင်းမှ မရုန်းထွက်နိုင်တော့ဘဲ ဒီအရသာကိုသာ အစွဲလန်းကြီး စွဲလန်းနေရှာသည်။အေးမောင် နောက်တစ်ကြိမ် လုပ်ငန်းစတင်ရန် ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ သူကလည်း သူ့အကြံနှင့် သူမို့ အိဖြူကို တစ်ဖက်သို့ စောင်းအိပ်စေလိုက်သည်။ ထို့နောက် အနောက်မှ သိုင်းဖက်ကာ လီးထိပ်နှင့် အိဖြူ၏ အနောက်သို့ဖောင်းအယ်ကာ ထွက်နေသည့် အဖုတ်ကို ထိုးဆွပေးလိုက်သည်။ ခုနကမှ ငြိမ်းသွားသော အိဖြူ၏ ကာမမီိးအဟုန်သည် ပြန်လည် တောက်လောင်လာပြန်သည်။ အိဖြူကိုယ်တိုင် တောင်းဆိုလာချိန်တွင် အေးမောင် သူ၏ လီးကို အပေါက်ဝသို့ ထောက်လိုက်သည်။ထောက်နေကျ အပေါက်ဝကား မဟုတ်ချေ။ ဖွံ့ထွားလှသည့် တင်ပါးဖြူဖြူ နှစ်လုံးကြားတွင် ညိုတိုတို လေး ဖြစ်နေသော စအိုဝလေးကို ထောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အိဖြူ တွန့်ကနဲ တစ်ချက် ဖြစ်သွားသည်။အာ…. ကိုကို…. မှားနေပြီ…. အဲဒါ မဟုတ်ဘူးလေ…ညီမလေး… စိတ်လျှော့ပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနော်…. ဒီဟာက ပိုကောင်းတယ်ပြောတယ် (တကယ်တော့ သူကောင်းချင်တာသာ ဖြစ်ပါသည်)ဟာ… ကိုကို… ဖြစ်ပါ့မလား… အဲဒါ… တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူးနော်….ဖြစ်ပါတယ်… ညီမလေးကလည်း… ဟို ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာ ပစ္စည်းကြီးတွေက အကြီးကြီးတွေနဲ့ လုပ်တာ၊ ကိုကိုက အဲလောက် မကြီးပါဘူး…. အေးမောင်… ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် အိဖြူ၏ စအိုဝလေးကို ထောက်ထားသည့် လီးကို နည်းနည်း ဖိသွင်း ကြည့်လိုက်သည်။ ခုန အဖုတ်ကို ထိုးဆွထားသဖြင့် အရည်များဖြင့် ချွဲနေသည်။ သို့သော် ကျဉ်းကြပ်လှသည့် စအိုပေါက်ကို ထိုးသွင်းဖို့ကား တော်တော် ခက်ခဲလှသည်။ ထိုစဉ် အေးမောင် တစ်ခုခုကို သွားသတိရ လိုက် သည်။ ညီမလေး.. ခနနေအုံး ဟု ပြောကာ ကွန်ဒုံးတစ်ခုကို ဖောက်လိုက်သည်။ထို့နောက် သေသေချာချာ စွပ် လိုက်ပြီးမှ ဂျယ်လ်ဘူးထဲမှ ဂျယ်လ်ကို ရွှဲရွှဲလေး သုတ်လိုက်သည်။ အိဖြူ စအိုဝကိုလည်း သုတ်ပေးလိုက်သည်။ အိဖြူကတော့ အေးမောင် ဘာတွေ လုပ်နေသည်ကို ကျောခိုင်းထားသဖြင့် မမြင်ရပေ။ သူမ၏ စအိုဝကို ပူပူနွေးနွေး အဆီတစ်မျိုး သုတ်လိုက်သည်ကိုသာ ခံစားမိလိုက်သည်။ (တကယ်တော့ ဂျယ်လ်က အေးစက်စက် ပါ၊ အေးမောင် အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်ထားတာ ကြာသဖြင့် နွေးနေခြင်းဖြစ်သည်) ထို့နောက် သူမ၏ စအိုထဲသို့ အေးမောင်၏ လီးကြီး တိုးဝင်လာသည်ကို မချိမဆန့် ခံစား လိုက်ရသည်။အားး.. ကိုကို…. တော်ပါတော့…. ညီမလေး.. မခံနိုင်ဘူး… အရမ်းနာတယ်…. ကာမဘီလူးစီးနေသော အေးမောင် အိဖြူ၏ အသံကို မကြားတော့ပေ။ အဖုတ်ထဲကို ထည့်ရတာထက် ပိုခက်သော်လည်း ဂျယ်လ်သုတ်ထားသဖြင့် ကျဉ်းကျဉ်းကြပ်ကြပ်နှင့်ပင် ထိပ်ဖျားဝင်အောင် အားစိုက် သွင်းလိုက်နိုင်သည်။ အိဖြူ၏ ခါးကို တအား ချုပ်ကာ ဖက်ထားသည်။ ထို့နောက် ခေါင်းဝင်သွားသော အခါတွင် သိပ် မခက်တော့ချေ။ တအိအိနှင့်ပင် တစ်ဆုံး ၀င်သွားတော့သည်။ အေးမောင် လက်တစ်ဖက်ဖြင့် အိဖြူ၏ ပေါင်အောက်မှ လျှိုကာ အဖုတ်ကလေးကို ကစားပေးသည်။ စအိုကို ဆက်ဆံမည်ဆိုလျှင် အဖုတ်ကို ကောင်းကောင်းကစားနိုင်မှ မိန်းကလေးဘက်က အရသာ ရှိနိုင်သည် ကို အေးမောင် နားလည်ထားသည်။ တစ်ဆုံးဝင်သွားပြီးတော့ ခဏ နားထားလိုက်သည်။ အိဖြူလည်း ၀င်ကာစ ကလောက် သိပ်မနာတော့။ တင်းကြပ်ကြပ် အောင့်တောင့်တောင့် အနေခက်လှသည်သာ ရှိတော့သည်။ ထိုစဉ် အဖုတ်ကို ဆွခံနေရသဖြင့် ကာမမီးတောက်များ ပြန်လည် တောက်လောင်လာသည်။ အဖုတ်ထဲမှ အရည်များ ထပ်ထွက်လာချိန်တွင်တော့ အေးမောင် တဖြည်းဖြည်း ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်သွင်းသည်။ အိဖြူ နာနေမှန်းသိသဖြင့် တဆုံး မထုတ်တော့၊ တစ်ဝက်လောက်သာ ဆွဲထုတ် လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်၊ ကပ်ညှောင့်လိုက်နှင့် မျိုးစုံ လုပ်ပေးနေသည်။ အိဖြူလည်း နာကျင်တာနှင့် ကောင်းတာ ဒွန်တွဲကာ တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသော အရသာကို ထိထိမိမိ ခံစားနေသည်။ ခုနက ဆူညံနေသော နာကျင်သံများ သည် ရမ္မက်သွေးကြွသော အသံအဖြစ်သို့ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းသွားသည်။ အေးမောင်လည်း ကျဉ်း ကျဉ်းကြပ်ကြပ် စအိုပေါက်ထဲတွင် နွေးထွေးသော အရသာကို ကောင်းကောင်းကြီးခံစားနေရာ ကြာကြာ ထိန်း ဖို့ မလွယ်ချင်တော့။ ဒါ့ကြောင့် အိဖြူ မြန်မြန် ပြီးသွားအောင် အစေ့ကို သွက်သွက်ကလေး ပွတ်ချေပေးလိုက် သည်။ အိဖြူ အကြောတွေ တွန်းကန်ရုန်းကြွပြီး တစ်ကြိမ် ပြီးသွားစဉ်မှာပင် ထိန်းထားသော သုက်ကို လွှတ်ပေး လိုက်တော့သည်။ ကွန်ဒုံးစွပ်ထားသဖြင့် အထဲအထိ ၀င်မလာသော်လည်း ပူနွေးသော အရသာကို အိဖြူ ခံစား လိုက်ရသဖြင့် ကာမအထွဋ်အထိပ်တွင် ရောက်နေချိန်မို့ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အရသာထူးဖြင့် ဖုံးလွှမ်းကာ လော ကကြီးကို မေ့သွားမိသလိုပင် ဖြစ်နေတော့သည်။သူတို့၏ အချစ်ဘုံကလေးသည် ရက်(၂၀)လောက်သာ ခံလိုက်သည်။ တစ်ရက် အိဖြူအခန်းထဲတွင် နှစ်ဦးသား အချစ်ဗိမ္မာန်လေး တည်ဆောက်နေချိန်တွင် အိမ်ရှေ့မှ ကားဟွန်းသံ ကြားလိုက်ရသည်။ အခန်းက လုံနေသဖြင့် သဲ့သဲ့မျှသာ ကြားသော်လည်း အေးမောင် စိတ်ထဲ မသင်္ကာဖြစ်သွားသဖြင့် အိဖြူကို အ၀တ်များ အမြန်ပြန်ဝတ်စေပြီး အေးမောင် အခန်းပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်သည်။ အန်တီလေး၏ ခေါ်သံနှင့် တံခါးခေါက်သံ ကို ကြားရသည်။ အိဖြူအား အန်တီလေးပြန်ရောက်ကြောင်းပြောကာ တံခါးသွားဖွင့်ပေးလိုက်ရသည်။ အိဖြူက လည်း သူ ဘာမှ မသိသလိုပင် သူမအမေအား ထွက်ကြိုသည်။ အန်တီလေး လက်ထဲမှ အထုပ်အပိုးများကို ၀ိုင်း သယ်ပေးကြပြီး အန်တီလေး အခန်းထဲသို့ လိုက်ပို့ကြသည်။ အန်တီလေး၏ အစ်ကိုဖြစ်သူကား ထူထူထောင်ထောင် ပြန်ဖြစ်လာပြီဟု သိရသည်။ အန်တီလေးက အိဖြူနှင့် အေးမောင်အတွက် မုန့်များ ၀ယ်လာသည်။ တနင်္သာရီတိုင်းဘက်က ဒူးရင်းသီးပေါသဖြင့် ဒူးရင်းသီး တွေလည်း ပါလာသည်။ နှစ်ဦးသား မုန့်များခွဲဝေကာ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ထိုင်စားကြသည်။ အန်တီလေးကတော့ ခရီးပန်းလာသဖြင့် ၀င်အိပ်သွားလေပြီ။ သူတို့နှစ်ဦးသာ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ကာ ရယ်ချင် သလိုလိ်ု၊ လွမ်းသလိုလို၊ စိတ်ညစ်သလိုလို ဘာလိုလိုမှန်းမသိသည့် ခံစားချက်ကိုယ်စီဖြင့် မအီမလည် ဖြစ်နေ ကြတော့သည်။ ဒီ့နောက်ပိုင်းတွင်တော့ အိဖြူရော အေးမောင်ရော နှစ်ယောက်စလုံး ကျောင်းပိတ်ထားသဖြင့် အိမ်မှာ သာ အနေများကြသည်။ ဘယ်မှလည်း သိပ်မထွက်ဖြစ်ကြ။ သူတို့နှစ်ဦး ဆုံနေတော့ အန်တီလေး အလိုလိုပင် ကိုယ်ရှိန်သတ်ထားရသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ သွေးသား တောင့်တမိသော်လည်း မသင့်တော်သည်မို့ သမီးဖြစ်သူ ရှေ့တွင် ပုံမှန်လေးသာ နေရသည်။ အိဖြူကလည်း မိခင် ရှိနေတော့ ယခင်လို မလွတ်လပ်တော့ပြီ။ အေးမောင် အတွက်တော့ အဆင်ပြေသေးသည်။ အန်တီလေး ပြန်ရောက်နေသဖြင့် အိဖြူအခန်းကို သွားလို့ မရတော့ သော်လည်း အရင်လိုပင် ဘောပင်လေးနှင့် ခေါက်ကာ အိဖြူကို ခေါ်နိုင်သည်။ အိဖြူကလည်း ခေါ်လျှင် အေး မောင်အခန်းသို့ တက်သွားသည်သာ။ သို့သော် အန်တီလေး ခရီးသွားစဉ်ကကဲ့သို့ အားရပါးရ လိုးလို့ မရ။ အိဖြူလည်း အားရပါးရ မအော်ရဲ။ မတော်တဆ ကြားသွားလျှင် ပြဿနာတက်သွားနိုင်သည်။ အေးမောင်ရော အိဖြူပါ ဘယ်လောက်သောက် သောက် ငတ်မပြေနိုင်သည့် ဆားငံရေကိုသာ သောက်နေမိကြပြီ ဖြစ်သည်။ အေးမောင်က တစ်ခါတစ်လေ အန်တီလေးနှင့် စခန်းသွားချင်မိသည် (ဒါတော့ လွန်လွန်းတယ် ထင်တာပဲ) သို့သော် အန်တီလေးနှင့် ဖြစ်ဖို့ အခွင့်မသာလှ။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ အိဖြူ သူငယ်ချင်းများနှင့် အပြင်သွားချိန်မျိုး ဆိုလျှင် အေးမောင်နှင့် အန်တီ လေးတို့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါကလည်း ကြုံတောင့်ကြုံခဲပေါ့။ အေးမောင် စိတ်အလိုမကျတာ တစ်ခုရှိသည်။ အေးမောင် ကာမနှင့် ပတ်သက်သမျှ အိဖြူဆီက အပြည့်အ၀ ရနေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အိဖြူက ချစ်တယ် ဆိုသည့် အဖြေကို ပေးဖို့ ငြင်းဆန်နေ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆားမပါသည့် ဟင်းကို စားရသလိုမျိုးဖြစ်နေသည်။ အေးမောင်က အိဖြူကို အရမ်းချစ် သည်။ အိဖြူ မျက်နှာညှိုးသည်နှင့် မနေနိုင်တော့။ အိဖြူက သူ့အပေါ် ဘယ်လို သဘောထားသည်ကို မသိ သဖြင့်သာ စိတ်ထဲ ခုလုခုလု ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အိဖြူကလည်း အေးမောင်အပေါ် ဘယ်လိုစိတ်မျိုး ရှိသည်ကို သူမကိုယ်တိုင်ပင် ရေရေရာရာ မသိ။ သေချာသည်ကတော့ သူမ အေးမောင်အပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးမားသည်။ စေတနာရှိသည်။ ထို့အပြင် ကာမ ကိစ္စများတွင် အေးမောင်အလိုကျ လိုက်လျောသည်။ သို့သော် အချစ်ဆိုတာ ဘာမှန်းတော့ သူမလည်း မသိ။ အေးမောင်က အဖြေတောင်းလိုက်တိုင်း ချစ်တယ် ဆိုသည့် စကားတစ်ခွန်း ပြောဖို့ ငြင်းဆန်မိသည်။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် ကုန်ဆုံးကာ မိုးဦးကာလ ကျောင်းများ ဖွင့်ချိန်ကို ရောက်ပြီ။ အေးမောင် ဆယ်တန်း စတက်ပြီ။ အိဖြူတို့ကတော့ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း မထွက်သေး။ သို့သော် အိဖြူ သူမကိုယ် သူမ သိပါသည်။ မအောင်နိုင်ပါ။ ဒါနဲ့ပဲ အေးမောင် ဆယ်တန်း စတက်သည့်အချိန်တွင် အိဖြူ အပြင်ဖြေ ဖြေ ဖို့အတွက် ကျူရှင် စတင် တက်တော့သည်။ အောင်စာရင်းထွက်လာတော့ အိဖြူမပါသေး။ သူမ ဆယ်တန်းဖြေတာ နှစ်နှစ်ရှိပြီ။ အခု ထပ်ဖြေမည်ဆို သုံးနှစ်။ သူမထက် အသက်ကြီးသော်လည်း အတန်းငယ်သည့် ကိုကို အေးမောင်ပင် ဆယ်တန်းတက်နေပြီ။ သူမ၏ အားနည်းချက်ကို သူမ ပြန်လည် သုံးသပ်မိသည်။ သူမ ဆယ်တန်း စတက်သည့်နှစ်မှာ Repeater အစ်မ များနှင့် တွဲမိသည်။ သူမနှင့် တွဲသည့် အစ်မကြီးတွေနှင့် တအားခင်သွားသည်။ ထိုအစ်မကြီးတွေ ဘာတွေပြောပြော သူမယုံကြည်မိသည်။ ထိုအစ်မကြီးများ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် ပထမဆုံး အပြာစာအုပ် ဖတ်ဖူးမိသည်။ သူမ တစ်သက်နှင့်တစ် ကိုယ် မဖြစ်ဖူးသည့် ကာမစိတ်များ တဟုန်းဟုန်း နိုးကြွလာမိသည်။ ထိုအစ်မကြီးများက သူမကို ရည်းစားထား ခိုင်းသည်။ ရည်းစားထားရသည့် အရသာက အလွန်ကောင်းသည်ဟု ဆိုသည်။ ရည်းစား၏ အလိုဆန္ဒကို လိုက် လျောရသည့် ခံစားမှုသည့် ဘာနှင့်မှ မတူဟု ဆိုသည်။ ပထမတော့ အိဖြူ စိတ် ယိုင်သွားသေးသည်။သို့သော် သူမပင် ကံကောင်းသည်လားတော့ မသိ။ သူမနှင့် ညီအစ်မလို ခင်သော အစ်မကြီး နောက်တစ်ယောက်က အပျိုစင်ဘ၀ဆိုတာ မိန်းကလေးရဲ့ ထူးမြတ်တဲ့ ဂုဏ်ပဲ။ အပျိုစင်ကိုပဲ ယောက်ျားတွေ လိုချင်ကြတာ။ တကယ် လက်ထပ်ကြမယ်ဆို အပျိုစင်ကိုပဲ လိုချင်ကြတာ။ ရည်းစားထားလို့ အပျိုစင်ဘ၀ကို ပေးဆပ်လိုက်မိပြီဆိုရင် ပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူး။ အပျိုမစစ်တော့ဘူးလို့ သိကြတာနဲ့ အမျိုးမျိုး လက်တည့်စမ်းချင်ကြလိမ့်မယ်။ အပျိုစင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို အလွယ်တကူ မပေးလိုက်နဲ့။ အပျိုစင်ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်တဲ့ အချိန်ဟာ မင်္ဂလာ ဦး ညမှာ ဖြစ်ပါစေ။ မင်္ဂလာဦးညမှာ အပျိုစင်ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ရခြင်းဟာ လောကဓမ္မတာအရဖြစ်ပြီး ဂုဏ်သရေ ရှိတဲ့ စွန့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ် ဟု ဆုံးမသည်။အိဖြူ ယိမ်းယိုင်နေသည့် အတွေးများ ပြန်တည့်သွားသည်။ ထိုအစ်မကြီးနှင့် ရည်းစားထားရန် ပြောသော အစ်မကြီးက မတည့်။ ပထမတော့ မတည့်လို့ ဆန့်ကျင်ဘက် သွေးထိုးတာလားဟု ထင်မိသေး သည်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ သူမဆုံးမတာ မှန်နေသည်။ ထိုအစ်မကြီးနှင့် တတွဲတွဲ ပေါင်းမိတော့ ပထမ ခင်သည့် အစ်မကြီးနှင့် သိပ်အစေးမကပ်တော့ဘဲ နောက်ဆုံး အပေါင်းအသင်းပင် မလုပ်တော့သဖြင့် သူမနှင့် ဝေးသွားတော့သည်။သူမအား ဆုံးမသည့် အစ်မကြီးနာမည်က သီရိမေ။ အိဖြူထက် အသက် နှစ်နှစ်လောက် ပိုကြီးပြီး အပြင်ပန်းတွင် တည်ကြည်ကာ မျက်နှာကျောတင်းလှသဖြင့် တော်ရုံကျောင်းသားများက စကားမပြောရဲကြ။ စကားပြောဖူးသည့် ကျောင်းသားများလည်း နောက်ဆုံး နောက်ဆုတ်ခဲ့ကြသည်။ သူမက သူမကို လာစကား ပြောသည့် ကျောင်းသားတိုင်းကို စကားတစ်ခွန်းမေးသည်။ နင် ငါ့ကို တကယ်ယူနိုင်သလားဟု။ သူတို့ ပြန်ဖြေ ကြသည်။ တကယ်ယူမှာပါ။ တကယ်ချစ်တာပါ။ သီရိမေ စကားတစ်ခွန်း ထပ်ပြောသည်။ သေချာလား တဲ့။ သူတို့ ထပ်ဖြေကြသည်။ သေချာပါတယ်။ တကယ်ပါ။ အဟုတ်ပါ။ သီရိမေ စည်းကမ်းချက် ထုတ်တော့သည်။ ကောင်းပြီ ငါစဉ်းစားပေးမယ်၊ မစဉ်းစားခင် ငါ့ကို ကတိတစ်ခုပဲပေး၊ ချစ်သူဘ၀မှာ လက်ကိုတောင်မကိုင်ရ၊ လူ အများသွားလာသည့်နေရာတွင်သာ ချိန်းတွေ့မည်၊စကားပြောမည်၊ ဘွဲ့ရပြီးလျှင် လက်ထပ်မည် ဟု ပြော သည်။ ချဉ်းကပ်သော ကျောင်းသားများ လက်လျှော့သွားသည်။ ချစ်သူဖြစ်ပြီး လက်ကလေးတောင် မကိုင်ရ တော့ ဘာလုပ်မည်နည်းဟု စိတ်ညစ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။သူမလည်း မိန်းမထဲက မိန်းမသားတစ်ယောက်သာ။ သူမသည်လည်း အသက် ဆယ့်ခြောက်၊ ဆယ့် ခုနစ် ၀န်းကျင် ဖြစ်ရာ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ယောက်ျားလေးတွေ တွေ့လျှင် ရင်ခုန်ဖူးသည်၊ စိတ်ကူးယဉ် ဖူးသည်။ ဒီအရွယ်ဆိုတာ သစ်ရွက်လေးတွေ လေမှာလှုပ်ရှားရင်တောင် စိတ်လှုပ်ရှားတတ်သည့် အရွယ်ပေပဲ။ သို့သော် သူမတွေ့ဖူးသည့် ယောက်ျားလေး တော်တော်များများက ဂျင်ကလေးတွေဖြစ်နေသည်။ လူလည်လေးတွေ ဖြစ်နေသည်။ သူတို့နှင့် ရည်းစားထားမိလျှင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သည်ကိုလည်း သူမ သိသဖြင့် ဒီလိုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။သူမလည်း သူများတွေနည်းတူ ကာမစိတ်များ ခဏခဏ လှုပ်ရှားဖူးသည်။ တစ်ခါတလေ ရည်းစား ထားပြီး စိတ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ချင်မိသည်။ သို့သော် သူမ၏ စိတ်များကို ဖြေသိမ့်နိုင်သည့် နည်းလမ်းကို သူမ ကိုယ်တိုင်ပင် ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားသည်။ သူမကို ရည်းစားစကားလာပြောသည့် ယောက်ျားလေးများထဲတွင် သူမ ထက် တစ်နှစ်ခန့်ကြီးသော အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက် ပါသည်။ သူမကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ပြောလွှတ်သည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုတ်သွားသည်။ သို့သော် သူမရင်ထဲတွင် ရင်ခုန်သံမြန်ဆန်မှုက ရပ်တန့်မသွားခဲ့။ သူ၏ ယောက်ျားပီသသည့် ဟန်ပန်နှင့်တောင့်တင်းသည့် ခန္ဓာကိုယ် အချိုးစားက သူမ၏ စိတ်ကို ညှို့ငင်နေသလို ရှိ သည်။သူ့အကြောင်း စိတ်ကူးလိုက်တိုင်း ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းက လှုပ်ရှားထကြွလာသည်။ အဖုတ်ထဲမှ တစ်ခုခုကို လိုအပ်နေမိသလိုမျိုး။ တစ်ခါတလေလဲ တစ်ခုခု ထိုးထည့်ပစ်လိုက်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်နေမိ သည်။ ယားယံခြင်းမျိုးလည်း မဟုတ် သို့သော် လိုအပ်နေသလိုလို ဖြစ်နေမိသည်။ ထိုအတွေးများ ပေါ်လာတိုင်း တွင် အရည်ကြည်လေးများ စိုလာတတ်သည်။ တစ်ရက်တွင် သူမ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖတ်နေသည်။ ထိုစာအုပ်သည် အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး ဆင်ဆာ လွတ်အောင် ရေးသားထားသော်လည်း နဂိုကမှ စိတ်က မခိုင် သည် ဖြစ်နေရာ စာအုပ်ထဲမှ ဇာတ်ကောင်မိန်းကလေး နေရာမှာ ၀င်ရောက် ခံစားနေမိသည်။သူမက ညဘက် အိပ်ကာနီးလျှင် စပန့်သားဂါဝန် ပျော့ပျော့လေးကို ၀တ်ဆင်ပြီး အိပ်လေ့ရှိသည်။ ထို ညတွင်လည်း စာဖတ်ရင်း ဇာတ်ကောင်နေရာမှာ သူမနှင့်အတူ ဟိုအစ်ကိုကြီးကိုပါ စိတ်ကူးထဲတွင် သရုပ် ဆောင်ကြည့်ရာ အဖုတ်ထဲမှ စိုတိုတို ယားကျိကျိ ဖြစ်လာသည်။ သူမ ယောင်ယမ်းကာ နို့ကလေးကို လက်နှင့် အုပ်မိသည်။ ခါတိုင်း ရေချိုးစဉ် ပွတ်သပ်ချိုးသော်လည်း ဘာမှမဖြစ်သော်ငြား ယခု ရုတ်တရက် ကိုင်မိရာတွင် ဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲဖြစ်ကာ ထိလိုက်သည်နှင့်ပင် မျက်လုံးလေး မှေးသွားသည်အထိ စည်းစိမ်ရှိနေသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်နေရာမှ ယားကျိကျိဖြစ်နေသော အဖုတ်ကလေးကို လက်နှင့် အုပ်မိသည်။အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း မီးအုပ်ဆောင်းကလေးနှင့် စာဖတ်နေရာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုက လည်း သူမကို ကလူကျီစယ်နေသည်။ အဖုတ်ကလေးကို လက်နှင့် ကိုင်မိလိုက်သည်နှင့် တစ်ကိုယ်လုံး ဖျင်း ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ ကြက်သီးမွှေးညှင်းများလည်း ထောင်ထသွားသည်။ အထိအတွေ့နောက်ကို ပါသွားတော့ လည်း အုပ်ကိုင်မိရာမှ ပွတ်သပ်မိပြန်သည်။ တစ်ချက်ပွတ်လိုက်တိုင်းမှာ ပါးစပ်မှ ဟင့်ကနဲ အသံထွက်သည် အထိ ဖြစ်လာသည်။ သူမ ဂါဝန်ပေါ်မှ အုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်ရသည်ကို အားမရတော့။မီးအုပ်ဆောင်းကို ပိတ်လိုက်သည်။ ခြင်ထောင်ထဲကို ၀င်လိုက်သည်။ အမှောင်ကို ပိုသဘောကျနေ မိသည်။ ယခင် မီးအလင်းရောင်ရှိမှ အိပ်တတ်သော်လည်း ယခုမူ မီးအလင်းရောင်ထဲမှာ မနေလိုတော့ပြီ။ အမှောင်ထဲမှာ ဂါဝန်ကို ဗိုက်အထိ လှန်တင်လိုက်သည်။ လက်ချောင်းလေးများဖြင့် အဖုတ်ကို ရွရွလေး ပွတ်သပ်မိပြန်သည်။ ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားလာတော့ အရည်များ စိမ့်ကျနေသည့် အကွဲကြောင်းထဲကို ဖိပွတ်မိသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် အစေ့ကို သွားထိမိတော့ ပိုပြီး ကောင်းလာသည်။ အစေ့ကိုထိလျှင် အရသာတအားရှိသည် ကို ခံစားသိရှိသွားသည်။ အစေ့ကိုချည်းပဲ ပွတ်ပြန်တော့ မခံနိုင် တအား ကျင်သည်။ ဒီတော့ အစေ့နှင့် အကွဲ ကြောင်းတစ်လျှောက်ကို လက်ခလယ်နှင့် စုန်ချည်ဆန်ခြည် ပွတ်မိသည်။ အရည်တွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း ရွှဲနစ်လာသည်။အရည်တွေရွှဲလာသည်နှင့်အမျှ အရသာစည်းစိမ်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း မြင့်လာသည်။ တစ်နေရာကို ရောက်အောင် ပြေးသွားနေသည်နှယ် မောနေသော်လည်း ထိုနေရာသို့ ရောက်ချင်နေသည်။ ထိုနေရာရောက် လျှင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမည်ကို သိချင်နေသည်။ ပွတ်သပ်နေသည့် အရှိန်ကို တဖြည်းဖြည်း မြှင့်သည်။ ပါးစပ်မှ ညည်းသံ ကျယ်ကျယ်မထွက်အောင် ထိန်းထားရသည်။ လက်ကလည်း မြောင်းထဲသို့ ခပ်နက်နက်လေး ဖိကာ ပွတ်မိလာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ ချောက်ကမ်းပါးကြီးတစ်ခုပေါ်မှ လွင့်ကျသွားသလို တစ်ကိုယ်လုံး တွန်းကန် ရုန်းကြွကာ လေဟာနယ်ထဲ လွင့်သွားသလိုလို၊ အသည်းတွေ ပြုတ်ကျသွားသလိုလို အမည်ဖော်ပြ မတတ်နိုင်သော စည်းစိမ်တစ်ခုကို ရရှိသွားတော့သည်။တစ်ကိုယ်လုံး မလှုပ်နိုင် မရှားနိုင် ဖြစ်လောက်သည်အထိ အားအင်များ ကုန်ခမ်းကာ မောပန်းသွား တော့သည်။ ခုန သူမစိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေသော အာသာဆန္ဒများ ပြည့်ဝသွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ သူမ ဒီအရ သာကို အရမ်းသဘောကျသွားသည်။ အိပ်ချင်စိတ်များလည်း မရှိ။ နောက်တစ်ကြိမ် ခံစားလိုသေးသည်။ တစ်ည တည်းနှင့် သုံးကြိမ်လောက်အထိကို အာသာဖြေပစ်လိုက်မိသည်။သူမ ရည်းစားမထားချင်သဖြင့် ဒီလိုနှင့် လက်ဖြင့်အာသာဖြေသည့်နည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူငယ်ချင်းတွေ ရှာရှာဖွေဖွေ ယူလာသော အပြာကားများကိုလည်း အမ်ပီဖိုးနှင့် နားကြပ်တပ် စောင်ခြုံကာ ကြည့်ပြီး အာသာဖြေတတ်လာသည်။ သူမ ညီမလေးလို ခင်ရသော အိဖြူနှင့် တွေ့တော့ ဒီ အကြောင်းတွေ မိန်းကလေးချင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြသည်။ အိဖြူက ခင်ဖို့ကောင်းသည်။ သူမ၏ အကြံပြု ဆုံးမစကားများကိုလည်း လက်ခံသည်။အိဖြူက ရည်းစားများများထားကာ ထည်လဲတွဲတတ်သော မိန်းကလေးများနှင့် ပေါင်းမိတော့ လမ်းမှား မရောက်အောင် တားမိသည်။ အိဖြူကလည်း လက်ခံသည်။ နောက်ဆုံးတော့ သူမလိုပင် လက်နှင့်အာသာဖြေ သည့်နည်းကိုသာ ကျင့်သုံးတော့သည်။ အိဖြူလည်း ရည်းစားမထားဖြစ်တော့ချေ။ ဒီကောင်မလေးက သင်္ချာ တအားညံ့သည်။ သီရိမေ ဆယ်တန်းအောင်သွားချိန်တွင် အိဖြူ ကျသွားသည်။အိဖြူ စာမေးပွဲကျသည်များတွင် ဒါတွေလည်းပါသည်။ သီရိမေက နည်းလမ်းသာ ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အိဖြူက နေ့စဉ် ပုံမှန် အလုပ်ဖြစ်သည်။ အိဖြူ၏ အားနည်းချက်က ဒီလိုလုပ်ပြီးလို့ ပြီးသွားသည်နှင့် နုန်းသွား လျှင် စာဆက်မကျက်တော့ဘဲ အိပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီအားနည်းချက်ကို အိဖြူ ယခင်နှစ်တွေမှာ သိသော်လည်း စိတ်ကို အလိုလိုက်ကာ ကျခဲ့သည်။ ရည်းစားထားပြီး စာမေးပွဲကျရသည်ဆို တန်သေးသည်။ ယခုတော့ ကျန်တာတွေ ဘာမှမလုပ်ဘဲနှင့် စာမကျက်ဖြစ်အောင်နေလို့ ကျခြင်း ဖြစ်သည်ကို အိဖြူ နောင်တ ရမိတော့ သည်။အိဖြူ အောင်စာရင်းထွက်သည်နှင့် စာများကို ကြိုးစားကျက်တော့သည်။ အေးမောင်လည်း စာကို ကြိုး စားသည်။ အန်တီလေးက အေးမောင် ဆယ်တန်းရောက်သွားပြီဖြစ်သဖြင့် ယခင်လို လစ်လျှင် လစ်သလို မခေါ် တော့ပေ။ အိဖြူရော အေးမောင် နှစ်ယောက်စလုံးကို အောင်စေချင်သည်။ စာမေးပွဲ အောင်ရေးကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ပေးသည်။ အေးမောင်က အိဖြူ ညံ့သည့် သင်္ချာကို ကူညီရှင်းပြကာ တွက်ပေးသည်။ အိဖြူ အေးမောင်နှင့် အတူတူ တွက်တော့လည်း ကာမစိတ်များ သိပ်ဖြစ်မလာတော့။ စာမေးပွဲအောင်ချင်စိတ်ကြောင့် ချိုးနှိမ်ထားသည်။အေးမောင်နှင့် အိဖြူ နားလည်မှု ယူထားကြသည်။ ကျောင်းဖွင့်ရက်တွင် အိဖြူ စာကျက် မည်။ စာကျက်ချိန်တွင် အေးမောင်နှင့် အတူတူကျက်သည်။ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ကျက်ကြသည်။ နှစ်ဦးလုံး စာကျက်ပြီးသည်နှင့် အေးမောင်က အိမ်ပေါ်ထပ် တက်သွားသည်။ အိဖြူက သူမအခန်းထဲ ၀င်သွားသည်။ ကျောင်းဖွင့်ရက်တွင် အေးမောင်က အိဖြူကို သူ့အခန်းသို့ မခေါ်တော့။ အိဖြူကလည်း အေးမောင် ချောင်း ကြည့်နေမည်စိုးသဖြင့် မီးပိတ်ကာ အိပ်သည်။ အေးမောင်လည်း စာကျက်ပြီးသည်နှင့် အိပ်သည်။ ငါးဦးကော်မတီလည်း မဖွဲ့ဖြစ်။ စာကျက်ပြီးချိန်တွင် ဆယ့်တစ်နာရီခွဲလောက် ဖြစ်သည့်အပြင် မနက်စောစော ထရမှာလည်းဖြစ်၊ စာတွေကလည်း များသဖြင့် ဒီစိတ်တွေ သိပ်မရှိ။သောကြာနေ့နှင့် စနေ့နေ့ညများတွင်တော့ စာသိပ်မကျက်ကြ။ နေ့ခင်းပိုင်းကို အချိန်ယူကာ ကျက် သည်။ ညဘက်တွင် ဦးဏှောက်ဆေးသည်ဟုဆိုကာ နှစ်ယောက်သား ဧည့်ခန်းထဲတွင် တီဗီကြည့်သည်။ နေ့ ခင်း စာကျက်သဖြင့် အန်တီလေးကလည်း တီဗီကြည့်သည်ကို ခွင့်ပြုထားသည်။ ကိုးနာရီလောက် ရောက်လျှင် တီဗီအစီအစဉ်တွေလည်း ပြီးသဖြင့် ကိုယ့်အခန်း ကိုယ်ဝင်ကြသည်။ (ထိုစဉ်က စကိုင်းနက်များ မရှိသေး) အေးမောင်က အန်တီလေး အရိပ်အခြည် ချောင်းကြည့်သည်။ အန်တီလေး အိပ်သည်နှင့်….တောက်…. တောက်…. တောက်…..ဒီအသံကြားလျှင် အိဖြူ အိမ်ပေါ် တိတ်တိတ်ကလေး တက်လာသည်။ ထို့နောက် အားရပါးရ လိုးကြ ဆော်ကြတော့သည်။ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရက်များနှင့် စာမေးပွဲရက်များတွင်တော့ ဆောရီးပါ။ အိဖြူက လုံးဝမပေး သလို အေးမောင်ကလည်း မခေါ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ အိဖြူ ကျူရှင်အချိန်ပို ရှိလျှင် အေးမောင် အရိပ်အခြည် ကို အန်တီလေး ကြည့်သည်။ အေးမောင် စာမကျက်ဘဲ အားအားလျားလျား ဖြစ်နေပြီ ဆိုလျှင် အန်တီလေး ခေါ်ပြီ။ အေးမောင်ကို ဦးဏှောက်ဆေးခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အေးမောင်ကလည်း အန်တီလေးကို မစားရသည်မှာ ကြာပြီ ဖြစ်သဖြင့် အသားကုန် ကြုံးဆော်သည်ပဲ။စာမေးပွဲကြီးပြီးတော့ အေးမောင် အိမ်ပြန်ရတော့သည်။ အေးမောင် အိမ်မပြန်ချင်သေးပါ။ သို့သော် မပြန်လို့ မဖြစ်တော့ပြီ။ သူ့အမေကိုလည်း သူဝိုင်းကူရအုံးမည်။ စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ထွက်ပြီးတော့ အေးမောင်ထံ အိဖြူလာလည်သေးသည်။ အန်တီလေးတော့ ပါမလာ။ သူမအိမ်တွင် နေစဉ် နှစ်နှစ်လုံး အေးမောင်နှင့် အိဖြူ ဇာတ်လမ်းကို အန်တီလေးမသိသလို အန်တီလေးနှင့် ဇာတ်လမ်းကိုလည်း အိဖြူမသိပါ။ ထို့ကြောင့်လည်း အိဖြူအား စိတ်ချလက်ချ လွှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။အိဖြူလာလည်သည့်အချိန်မှာ အငြိမ့်ပွဲများ ခြိမ့်ခြိမ့်သည်းသည့် ဆောင်းတွင်းကာလ ဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စကို သီးခြား ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် တင်ဆက်မည်ဖြစ်သဖြင့် ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါသည်။အိဖြူ အေးမောင်တို့အိမ်မှာ တစ်လလောက်နေပြီးတော့ မြို့ကို ပြန်သွားသည်။ များမကြာမီ အန်တီလေး ရွာသို့ ရောက်လာသည်။ သူမ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ခရီးသွားလိုကြောင်း၊ မိန်းမသားတစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားရသည်မှာ အဆင်မချောလှသဖြင့် အေးမောင်ကို ခေါ်သွားလိုကြောင်း ပြောကာ ဘော်ဒီဂတ် ခန့်၍ ခေါ် သွားလေသည်။ ထိုအကြောင်းကိုလည်း သီးခြား ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြင့် တင်ဆက်မည်ဖြစ်သဖြင့် ချန်လှပ် ထားခဲ့ပါမည်။အေးမောင်တို့ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်းထွက်တော့ နှစ်ယောက်စလုံးအောင်ကြသည်။ အေးမောင်က သင်္ချာအထူးပြု၊ အိဖြူက ဓာတုဗေဒအထူးပြုဖြင့် တက္ကသိုလ် အတူတက်ကြရသည်။ တက္ကသိုလ် ရောက်တော့ အိဖြူ အေးမောင်လိုချင်သည့် အဖြေကို ပေးလိုက်သည်။ နှစ်ယောက်အတူ တက္ကသိုလ်တက်ကြ ရင်းနှင့် ဘာတွေဖြစ်ကြမည်ဆိုသည်မှာ ဗေဒင်မေးနေစရာပင် မလိုတော့ချေ။ဘွဲ့ရပြီးသည်နှင့် အိဖြူက အန်တီလေးကို သူမနှင့်အေးမောင်အကြောင်း ဖွင့်ပြောလိုက်သည်။ အန်တီလေး ဒါတွေ ကြိုတွေးထားပြီးပါပြီ။ သူမအသက်လည်း လေးဆယ်ဝန်းကျင် ဖြစ်နေပြီပဲလေ။ သို့သော် လည်း လူ့စိတ်သည် ဆန်းကျယ်လွန်းသည်။ သူမသမီးကို အေးမောင်နှင့် သဘောလည်းတူသည်၊ အေးမောင် ကိုလည်း နှမျောမိပြန်သည်။ သူမ ဒီသမီး ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဖခင်နေရာ မိခင်နေရာပါ တစ်ယောက် တည်း ရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်သာ။ယခု သမီးကို အေးမောင်နှင့် လက်ထပ်မပေးနိုင်ရလောက်အောင်လည်း အကြောင်းပြချက် မရှိ။ သို့သော် လက်ထပ်ပေးလိုက်ပြီး သမီးကို အေးမောင်နှင့် ထည့်ပေးလိုက်ရအောင်လည်း သူမတစ်ယောက် တည်း အိမ်တွင် ဘယ်လိုဆက်နေရမည်နည်း။ အထီးကျန်ဘ၀နှင့်တော့ မနေလိုပြီ။ ဒါဆို သမီး ကိုထည့်မပေးဘဲနှင့် အေးမောင်ကို အိမ်ပေါ်တင်ထားလျှင်ရော။ သားမက်နှင့် ယောက္ခမ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်မလာ ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။ သူမ အေးမောင်နှင့် ကာမအမှုများ ပြုခဲ့ဖူးသည်ဖြစ်ရာ အေးမောင်က ဇာတ်လမ်း ပြန်လာစ နိုင်သလို သူမစိတ်ကိုရော ထိန်နိုင်ပါ့မလား။ သူမလည်း လောကီသားပေပဲလေ။အေးမောင်နှင့် အိဖြူကို နှစ်ဖက်မိဘသဘောတူ မြို့မှာပင် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် အသစ်စက်စက် ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်က သူမအား ကန်တော့သည့်အချိန်တွင် မျက်ရည်များ တွေတွေ ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ဘာ့ကြောင့်ကျသည့် မျက်ရည်လဲ၊ ၀မ်းနည်းခြင်းလား၊ ၀မ်းသာခြင်းလား၊ ပီတိလား၊ သောကကြောင့်လား၊ ပရိဒေ၀မီးလား သူမကိုယ်တိုင်သာ သိပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်လည်း မသိပါ။ သူမ ရုတ်တရက် ထကာ ဘီရိုထဲမှ ဖိုင်တစ်ခု ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ လက်ရှိ နေအိမ်အား အေးမောင်နှင့် အိဖြူ တို့အတွက် လက်ဖွဲ့လိုက်ကြောင်းပြောကာ အိမ်ဂရန်ကို အေးမောင်လက်ထဲသို့ ပေးအပ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဘီရိုသော့အား အိဖြူထံ ပေးလိုက်ပြီး သားနှင့် သမီး ရင်းနှီးစားသောက်ရန် ငွေအလုံအလောက် လက်ဖွဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။နောက်တစ်နေ့ မနက် မိုးလင်းလင်းချင်း ထူးခြားမှု တစ်ခု တွေ့လိုက်သည်။ အိမ်ရှေ့တံခါးဝမှာ ညှပ်ထားသော စာတစ်စောင်။ နှစ်ယောက်သား ကမန်းကတန်း ဖွင့်ကာ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ အန်တီလေး တရားဓမ္မမှာ ပျော်မွေ့ဖို့အတွက် ထွက်သွားပြီ။ သားစဉ်မြေးဆက် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်အောင် ပြုစု ပျိုးထောင် ကြပါဟု အကျဉ်းအားဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ရသော စာရှည်ကြီးတစ်စောင်အား တွေ့လိုက်ရလေတော့သည်။ဤတွင် ဆန္ဒနှင့် ဘ၀ ဇာတ်လမ်းကို နိဂုံး ကမ္ပတ် အဆုံးသတ်ပါသည်။ ချစ်ဦးမောင်မောင်